ထိနျးမရသောအဖွဈ – My Blog
အသကျအစိတျမှာ ပုခကျမခြိတျရရငျ တဈသကျမနိတျဘူးဆိုတဲ့စကားရှိပမေယျ့ ညိုမောငျအဖို့ကတော့ အသကျ(၂၆)နှဈရောကျမှ ရှားရှားပါးပါးရညျးစားလေးတဈယောကျရခဲ့ရသညျ။ ရမဲ့ရတော့လညျး ညိုမောငျရညျးစား လေးငယျက ညိုမောငျထကျအသကျ(၇)နှဈလောကျငယျသညျ။ လေးငယျအသကျက ခုမှ (၁၉)နှဈသာရှိသေးသညျ။ အသကျကွီးမှရညျးစားလေး(၁) ယောကျရတော့ ညိုမောငျမှာမထိရကျမကိုငျရကျ ထိလိုကျလြှငျ နှမျးကွတေော့မလားထငျနသေညျ။ ပနျးလေးတဈပှငျ့ကို ထိုငျ၍အလှကွညျ့နသေလိုထားသညျ။ ဒါပမေယျ့ လေးငယျက ခတျေကာလသမီးပြိုဘဲ ညိုမောငျထကျရဲသညျ၊ သှကျသညျ။ ရညျးစားဘဝပီပွငျအောငျ ညိုမောငျအားလမျးပွခေါငျးဆောငျပေးသညျ။ ဘာလိုလိုနဲ့ ညိုမောငျနှငျ့လေးငယျကွိုကျကွတာ (၆)လကြျောလာခဲ့ပွီ။ တဈနမှေ့ာတော့ ညိုမောငျတဈယောကျအိမျမှာတဈယောကျထဲရှိသညျနှငျ့ ပငျြးပငျြးနှငျ့အိပျပြျောနတေုနျး လေးငယျတဈယောကျ ဘယျကဘယျလိုရောကျလာ သညျမသိ။ညိုမောငျ၏အိပျခနျးထဲထိရောကျ၍လာသညျ။ ပကျလကျအိပျနသေော ညိုမောငျ၏ရငျဘတျပျေါသို့လေးငယျကပါးလေးအပျပွီး မှောကျအိပျလိုကျသညျ။
နုညကျသောအထိအတှနှေ့ငျ့မှေးပြံ့သောရနံ့တှကွေောငျ့ ညိုမောငျနိုးလာပွီး မကျြလုံးဖှငျ့ကွညျ့မိသညျ။ ““ဟငျ……လေးငယျ…”” ညိုမောငျအံ့သွသှားသညျ။ ““အဈကိုနိုးလာပွီလား…”” ““အငျး….လာ အိမျရှသှေ့ားရအောငျ….”” ညိုမောငျက ထထိုငျရနျပွငျလိုကျသညျ။ လေးငယျက ညိုမောငျ၏ရငျဘတျပျေါမှောကျခထြားသော သူမ၏ကိုယျလုံးကို မ ထသညျ့အပွငျ ပို၍ဖိခလြိုကျသညျ။ ဒီလိုအနအေထားမှ ဘယျသှေးဘယျသားတှကေ ခံနိုငျရညျရှိနိုငျပါ့မလဲ……။ ပွောမရသညျ့အဆုံး ညိုမောငျကနားမလညျနိုငျစှာနှငျ့လေးငယျ၏မကျြနှာလေးကို စိုကျကွညျ့ရငျး သူ့စိတျတှကေလှုပျရှား၍လာ သညျ။ ညိုမောငျ သူ့ခေါငျးကိုကွှ၍ လေးငယျပါးလေးတဈဖကျကိုနမျးရှုံ့လိုကျသညျ။ လေးငယျမကျြလုံးလေးမှိတျကသြှားပွီး မကျြနှာလေးကပွုံးသှားသညျ။ အရှိနျပွငျးစှာလှုပျရှားနသေော ညိုမောငျ၏ရငျခုနျသံတှကေို လေးငယျကွားနရေသညျ။ မိနျးမသားဆိုတာက အိနွေ်ဒကောငျးလှနျး၍သာ သူတို့ကိုအကဲမခတျနိုငျရှိရမညျ။ သူတို့ကယောကငြ်္ားတှထေကျပိုပွီးခံစားခကျြပွငျး ပွ၍ စိတျလှုပျရှားမှုပွငျးထနျသညျ။
လေးငယျ၏လကျလေးတဈဖကျက ညိုမောငျ၏ရငျဘတျပျေါကို ယုယုယယလေးပှတျသပျပေးရငျးမှ ညိုမောငျ၏ဝမျးဗိုကျပျေါရောကျသှားရာမှ ဆီးခုံပျေါသို့ထိပှတျနမေိသညျ။ ““လေးငယျထတော့ကှယျ…..တျောကွာမှားကုနျကွလိမျ့မယျ….”” ““တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ခဈြကွတာ မှားတာလားဟငျ အဈကို….”” အသံလေးမြားက လှိုငျးထပုတျခတျနသေညျ။ ညိုမောငျဘာပွနျပွောရမှနျးမသိတော့ပေ။ လေးငယျမကွားအောငျသကျပွငျးတဈခကျြခိုး၍ခရြငျး ညိုမောငျ၏လကျအစုံက နှေးထှေးအိစကျ နသေော လေးငယျ၏ကိုယျလုံးလေးကို ရဈပတျပှပေို့ကျလိုကျသညျ။ လေးငယျ၏ရငျထဲတှငျ ဝဟေငျထဲလှငျ့မြောသှားသလိုခံစားလိုကျရသညျ။ ညိုမောငျ၏လကျတဈဖကျက လေးငယျ၏ တငျသားလုံးလုံးလေးကို ဆုပျကိုငျပှတျသပျပေးရငျးဆုပျနယျသညျ။ ““ခဈြတယျ….လေးရယျ”” ညိုမောငျ၏အသံက အဈတဈတဈ တဈဆို့ဆို့ကွီး….. ““လေးလဲ….အဈကို့ကို သိပျခဈြတာပဲ သိလား…….”” ကာမအမှောငျထုသညျ တဈဖွေးဖွေးမှုံရီနကျရှိုငျး၍လာသညျ။ ညိုမောငျရငျဘတျပျေါသို့ လေးငယျလှိမျ့တကျလိုကျသညျ။ တဈယောကျမကျြနှာကို တဈယောကျစစေ့မေ့ကွညျ့ရဲကွပေ။ ညိုမောငျ ပေါငျနှဈဖကျကိုဘေးသို့ကားလိုကျသညျ။ မာကြောကြော အခြောငျးတဈခုက လေးငယျ၏စောကျပတျလေးကို ထောကျမိသှားသညျ။
လေးငယျ၏အသားလေးတှတေဆတျဆတျ တုနျလာသညျ။ ““အဈကို…”” ““ဘာလဲ…..လေး…”” ““လေးငယျ ရှကျတယျကှယျ….”” လေးငယျကညိုမောငျနားဝသို့ တိုးတိတျညငျသာစှာလေးဆိုသညျ။ ညိုမောငျလကျမြားကတရှရှလှုပျရှား၍လာသညျ။ လေးငယျ၏ထဘီအောကျစလေး လနျတကျသှားသညျ။ ““အဈကို….လေးငယျ ရှကျပါတယျဆို…”” ညိုမောငျထံမှ တုနျ့ပွနျစကားသံထှကျပျေါ၍မလာပေ။ သူ၏အပျေါမှာ မှောကျလကျြသားလေးဖွဈကာ ထဘီအောကျစလေးလှနျတငျနေ၍ ဖငျပွောငျပွောငျလေးဖွဈနသေောလေးငယျ ကိုအသာပှဖေ့ကျ၍ ဘေးသို့လှဲခလြိုကျရာက ညိုမောငျကအပျေါစီးမှဖကျလြှကျသား နရောယူလိုကျသညျ။ လေးငယျ၏ဒူးလေးကခပျကားကားလေး ထောငျထားမိရာ ပေါငျလေးနှဈဖကျ ကအလိုအလြှောကျကားထားသညျ့နှယျ အသငျ့အနအေထားသို့ရောကျ၍နသေညျ။ ညိုမောငျ၏အသကျရှုသံတှကေ စညျးခကျြမကတြော့ဘဲ ဗရမျးပတာဖွဈကာပွငျးထနျ၍လာသညျ။ အလားတူ လေးငယျ၏ထှကျသကျလသေံမြားကလညျးမူမမှနျတော့ပေ။ ညိုမောငျက သူနှငျ့လေးငယျတို့ကွားသို့ လကျကိုလြှိုသှငျးပွီး လေးငယျ၏စောကျဖုတျလေးကိုစမျးသညျ။
““ဟငျ့အငျး…..မကိုငျနဲ့ကှာ…..အို…”” ညိုမောငျ၏ လီးကအစှမျးကုနျမတျတောငျ၍နသေညျ။ လီးကိုလကျတဈဖကျဖွငျ့ကိုငျပွီး လေးငယျ၏စောကျပတျလေးထဲသို့တသှေ့ငျးသညျ။ လီးနှငျ့စောကျပတျအတှကေ့ စိုစှတျနှေးထှေး ၍နသေညျ။ တဈကိုယျလုံးရှိသှေးသားမြားဆူပှကျကာ နှဈယောကျစလုံးဆောကျတညျရာမရကွခြေ။ ““ပွှတျ….အား….ဟငျ့…အဟငျ့…..မဝငျဘူး…..”” လီးကဘေးသို့ခြျောထိုးမိသညျ။ လေးငယျက လှတျခနဲပါးစပျကထှကျသှားသညျ။ ““မဝငျသေးဘူးလား………….ဟငျ…..လေး….”” ““ဟငျ့အငျး….”” လေးငယျ ညိုမောငျမကျြနှာကို မကွညျ့ပဲ အသားတှတေဆတျဆတျတုနျနသေညျ။ ““ကိုငျသှငျးပေးပါလား….ဟငျ..”” ““ဟာ….ကြှတျ….ဒုက်ခဘဲ….မကိုငျရဲဘူး….အဟငျ့….”” ခန်ဓာကိုယျနှဈခုက ပူးကပျတှနျ့လိမျနသေဖွငျ့ လိုရာမရောကျဘဲ နှောငျ့နှေး၍နသေညျ။
ညိုမောငျက လေးငယျ၏ပါးပွငျနုနုဖှေးဖှေးလေးကို ညငျသာစှာနမျးပွီး သူမ၏လညျတိုငျဖှေးဖှေး လေးကို ယုယစှာပှတျသပျနမျးရှုံ့ပွီး သူ့ကိုယျကွီးကိုတငျးတငျးကွပျကွပျဖကျထားသော လေးငယျ၏လကျထဲမှရုနျး၍ ကိုယျခွငျးခှာကာ သူ့ကိုယျကိုကွှပွီး သူ့လီးကွီးကို အသာအယာလေး ဖိသှငျးခလြိုကျပွနျသညျ။ ““ပွှတျ….အမလေး…အဈကိုရယျ….”” သညျတဈခါတော့ လီးကလေးငယျ၏စောကျပတျလေးထဲသို့ တငျးတငျးကွပျကွပျကွီးဝငျသှားသညျ။ ခန်ဓာကိုယျနှဈခုလုံး တုနျခါလှုပျရမျးသှားသညျ။ ““ပွှတျ…ပွှတျ….စှတျ…..စှတျ……ပွှတျ….”” ညိုမောငျ၏အလိုးအညှောငျ့ လေးငယျ၏အလူးအလူးအလိမျ့လိမျ့ အကော့လေးတှေ ဗွောငျးဆနျသှားသညျ။
လှပနုနယျသော လေးငယျ၏ခန်ဓာကိုယျလေးမှာ ဘယျလူးညာလိမျ့ဖွငျ့ ဖွဈနသေညျ။ ညိုမောငျ၏လီးကွီးကလညျး မှနျမှနျကွီးဆောငျ့သှငျးနသေညျ။ ““ပွှတျ….ဖှတျ….စှပျ…စှပျ…..ပွှတျ…ပွှတျ….”” အမှေးပါးပါးလေးအုပျလှမျးနသေော လေးငယျ၏စောကျပတျကို ညိုမောငျငုံ့၍ကွညျ့သညျ။ မဲမှောငျနသေော သူ၏လီးမှေးကွီးမြားက ဖွူလှနူးညံ့နသေောလေးငယျ၏စောကျဖုတျအုံလေး ကို ပှတျသပျမိလတေိုငျး လေးငယျမှာကော့ပြံလူးလိမျ့သှားရသညျ။ လီးကွီးဆှဲနှုတျလိုကျတိုငျး ရဲကနဲ ရဲကနဲ အပွငျသို့ပွူးထှကျလာသောလေးငယျ၏ စောကျခေါငျးအတှငျးသားလေးမြားမှာ အရညျမြားဖွငျ့ ရှဲနဈကာနူးအိ၍နသေညျ။ သူ့တဈသကျမိနျးမတဈယောကျ၏ စောကျပတျကို နဖူးတှဒေူ့းတှေ့ တှမွေ့ငျလိုကျရခြိနျမှာပငျ တဈပါတညျးလိုးဖူးလိုကျရသညျ။ မှနျမှနျဆောငျ့လိုးနသေညျ့အရသာဒဏျကိုခံရငျးလူးလိမျ့၍ တဈလောကလုံးကိုမနေ့သေော လေးငယျ၏ကိုယျပျေါမှရငျစအေ့ကငြ်္ီလေး၏ကွယျသီးမြားကို အဆောငျ့မပကျြညိုမောငျဖွုတျ ပဈလိုကျသညျ။ ပွီးတော့အောကျမှဘျောလီပနျးရောငျလေးကို အပျေါသို့လှနျ၍တငျလိုကျသညျ။
အဲ့ဒီနောကျတော့ ညိုမောငျ၏လကျတဈဖကျက လေးငယျ၏နို့နှဈလုံးကိုဆုပျကိုငျညှဈနယျ ပေးလိုကျရာ လေးငယျခမြာအလူးလူးအလိမျ့လိမျ့ဖွငျ့ရငျဘတျလေးကော့ကော့တကျသှားရသညျ။ ““ပွှတျ…..ပွှတျ…..စှပျ…..ပလှပျ….စှပျ…ပွှတျ….ပွှတျ”” ““အဈကို….အ…အငျ့…..အငျ့….အငျ့…အ…အား…”” အင်ျဂါစပျနှဈခုကွားမှ ယိုစိမျ့ကလြာသောခြှဲပွဈပွဈအရညျလေးမြားက လြှံကလြာပွီးအသံလေးတှကေပို၍ကယျြလာသညျ။ ““ရှီး…အား….အဟငျး….တဈမြိုးကွီးဘဲ….ဟငျး…ဟငျး….”” ““နာရငျပွောနျော….လေး..”” ““အငျ…လေးငယျ..မပွောတတျဖူး….အငျး…ဟငျးးးးး”” ““လေး…လေးငယျ…..အား….ဟ”” နောကျဆုံးဆောငျ့ခကျြနှငျ့အတူ ညိုမောငျက လေးငယျ၏ရငျဘတျပျေါသို့မှောကျခြ၍ လေးငယျ၏ကိုယျလေးကိုသိမျးကွုံး၍ဖကျလိုကျခိုကျ လေးငယျကလညျးကမနျးကတမျးပွနျဖကျရငျး ခန်ဓာကိုယျနှဈခုမှာ ဗရမျးဗတာတုနျခါသှားရလတေော့သညျ။
ကြှဲကောသီးအမှာနှဈခုလိုတငျးပွောငျနသေော နှုတျခမျးသားနှဈခုက သာမာနျအနအေထားထကျပိုပွီး ဖောငျးမို့နတောသိသာ လှသညျ။ ခံစားရတာလဲအသားတှကေတငျးနပွေီးနာနသေညျ။ မခံမရပျနိုငျအောငျနာကငျြခွငျးမြိုးမဟုတျပမေယျ့ နရေထိုငျရတာခကျလှသညျ။ လေးငယျဘာလုပျရမညျမှနျးမသိ………. တဈသကျနှငျ့တဈကိုယျဒီတဈခါဘဲ ဒီနရောမှဒီလိုဖွဈဖူးသညျ။ အဈကိုညိုမောငျလေ….လူပြိုသိုးကွီး မနကေ့နခေ့ငျးက လေးငယျကိုနဲနဲလေးတောငျအနားမပေးဘဲ သုံးခြီဖွုတျလိုကျသညျ။ လီးဆိုတာ ဘာမှနျးမသိသေးသော မကျြနှာစိမျးစောကျပတျလေးက သူ့အားသူ့အငျနှငျ့မမြှလောကျအောငျ တာဝနျတှထေမျးဆောငျလိုကျရသညျ။ ဒီတော့ခုလိုယောငျယမျးလာရတာ ဘာမှမဆနျးလှပေ။ ဒါကလဲ လေးငယျကွောငျ့ဘဲမဟုတျလား……..သူ့ဘာသာအိပျပြျောနတေဲ့ ညိုမောငျကိုလေးငယျဘဲ မိနျးကလေးတနျမဲ့ မနနေိုငျမထိုငျနိုငျသှားပွီး နူးခဲ့တာမဟုတျ လား……။
ညကတော့သိပျပွီးမသိသာလှ အရှိနျကမသသေေးဘဲကို…စောကျပတျလေးနာနတောကို “အဈကိုလိုးခဲ့တဲ့စောကျပတျလေးဆိုပွီး ဒီနရောလေးကို အဈကိုမကျမကျမောမော လိုးခဲ့တာပဲဆိုပွီး” ဖီးလျလေးနဲ့ယှဉျပွီး နာနတောလေးကိုခံစားကာကွညျနူးနတေော့ ဝဒေနာတဈရပျရယျလို့မခံစားမိသေးပေ။ အခုမိုးလငျးတော့မှ သူ့ဟာလေးသူကွညျ့ပွီး လေးငယျဘာ လုပျရမှနျးမသိဖွဈနသေညျ။ တဈခါမှမကွုံဖူးတော့လဲ ဘာတှထေပျပွီး တိုးပွီးဖွဈလာအုံးမလဲဟုတှေးပွီး ထိတျလနျ့မိပွနျ၏။ ဆေးခနျးသှားပွဖို့တော့ ဘယျနညျးနဲ့မှမဖွဈနိုငျပါ။ အတျောအတနျစဉျးစားလိုကျတော့မှ နညျးလမျးလေးတဈခုကို ဝဝေဝါးဝါးလေးသိလိုကျရသညျ။ အိမျတှငျ မိဂသီဒဏျကွလေိမျးဆေး ရှိသညျ။ ခွထေောကျတှလေကျတှေ တဈခွားကိုယျအင်ျဂါအစိတျအပိုငျးတှထေိခိုကျမိ၍ နာကငျြယောငျယမျးလြှငျတော့ မိဂသီလိမျးလြှငျပြောကျသှားသညျ။ လေးငယျဘာမှ သိပျပွီးမစဉျးစား တော့ဘဲ အဈမဖွဈသူ ထှေးနှယျ၏အိပျယာဘေးမှာ တုံးလုံးပကျလကျလေးဖွဈနသေော မိဂသီဆေးပုလငျးကိုယူ၍ နံရံကိုမှီကာ ခပျလြှောလြှောလေးထိုငျ၍ ပေါငျနှဈခြောငျးထောငျကာ ကားရငျးဆေးလူးနမေိသညျ။
““ဟယျ….လေးငယျ ဘာဖွဈလို့လဲ”” ““ဟာ မမ ….ဘာ….ဘာမှမဖွဈပါဘူး”” လေးငယျပေါငျနှဈလုံးကိုစေ့၍ထဘီကိုကမနျးကတနျးဆှဲခလြိုကျပွီး ခါးကိုပတျပွီးထိုငျပဈလိုကျမိသညျ။ မမ၏မကျြနှာက ညီးပွောတာငါမယုံပါဘူးအေ ဆိုသညျ့မကျြနှာပေးမြိုးဖွငျ့ လေးငယျကိုကွညျ့သညျ။ ““ငယျလေးကလဲ….ညီအဈမခငျြးဘဲဟာ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောပေါ့ ဒါမှမမလဲ ဝိုငျးပွီးလုပျပေးနိုငျမှာ….”” ““အာ….မမကလဲ ခုံစောငျးနဲ့ဆောငျ့မိလို့ ဒီမှာနာရတဲ့ကွားထဲမှာ ဘာတှမှေနျးလဲမသိဘူး လာပွောနတေယျ….”” မိဂသီဆေးပုလငျးကို ထှေးနှယျ၏အိပျယာပျေါတငျလိုကျပွီး ခွကေိုဆောငျ့နငျး၍ထှကျလာခဲ့မိသညျ။ အငယျဆုံးတှရေဲ့စရိုကျကဒီလိုဘဲဆိုးတတျသညျ။ လေးငယျ မမထှေးနှယျကို သိပျ ပွီးအစာမကွခေငျြ။ ရှငျးရှငျးပွောရရငျ သူဒီလိုဖွဈတာ မမထှေးနှယျကွောငျ့…၊မမကွောငျ့ တဈနကေ့ညက မမထှေးနှယျလေ သူ့ရညျးစား ခငျမောငျထှေးနဲ့ခြိနျးတှတေ့ယျ….ခြိနျးတှတေဲ့ နရောကသိပျပွီးဝေးဝေးလံလံမဟုတျ။ သူမတို့အိမျတှငျပငျဖွဈသညျ။
တနညျးအားဖွငျ့ပွောရရငျ ခငျမောငျထှေးက အိမျလာတတျသညျဟုလညျး ပွောရငျရသညျ။ ကှာပါ့…အဈကိုညိုမောငျ တို့နှငျ့အတော့ အိမျရှလေ့မျးကဖွတျသှားလို့ ““အိမျထဲဝငျအုနျးလေ””ဟု လေးငယျကချေါရငျတောငျမှ အဈကိုညိုမောငျက “မဝငျတော့ဘူးသှားတော့မယျ” ဆိုပွီးဆကျလြှောကျသှား တတျသညျ။ မမထှေးနှယျရဲ့ရညျးစားခငျမောငျထှေးကတော့ လူခွတေိတျခြိနျကမြှ ခွံထဲကိုရောကျလာတတျသညျ။ မမထှေးနှယျနှငျ့ခငျမောငျထှေးတို့က ကွိုတငျခြိနျးထားပုံမရ။ ခငျမောငျထှေးရောကျ လာလြှငျ သဈကိုငျးခွောကျသေးသေးလေးတှကေို သှပျမိုးပျေါပဈတငျ၍အသံပေးတတျသညျ။ ခဲလုံးလိုလိမျ့ဆငျးသှားတာမြိုးမဟုတျတော့ ဖြောကျ….ဖြောကျ……ဆိုသောအသံလေးသာ ကွားလိုကျရသညျ။ ဒီအသံကွားပွီးပွီဆိုလြှငျ မမထှေးနှယျက လေးငယျအိပျနရောဖကျကိုလှညျ့ကွညျ့ပွီး အသာလေးအိပျယာပျေါမှထကာ ခွံထဲဆငျးသှားတတျသညျ။
ဒီအခါမြိုးတှငျ လေးငယျအိပျခငျြယောငျဆောငျနပွေီး အိပျယာထဲမှာငွိမျပွီးနလေိုကျသညျ။ နောကျတော့….လေးငယျတဈကယျအိပျပြျောသှားသညျ။ သူတို့ခွံထဲတှငျဘာတှဖွေဈနမှေနျးမသိတော့ပေ။ တဈနကေ့တော့ မိုးခြုပျမှလေးငယျလကျဖကျတှစေားထားမိလို့ ညဖကျအိပျမပြျောဘဲဖွဈနတေုံး သှပျမိုးပျေါမှတဈဖြောကျဖြောကျအသံလေးတှကွေားလိုကျရသညျ။ လေးငယျအိပျခငျြ ယောငျဆောငျနသေညျ။ မမထှေးနှယျထှကျသှားပွီး ခဏလောကျကွာမှ လေးငယျအိပျယာမှထပွီး မမထှေးနှယျစထေ့ားပဈခဲ့သော နောကျဖေးတံခါးမှခွံထဲသို့ဆငျး၍စပျစုမိသညျ။ ခွံထဲ ရောကျတော့ လေးငယျသူမကိုယျသူမ မှားမြားသှားပွီလားလို့ အထိတျတလနျ့တှေးလိုကျမိသညျ။ တှလေို့ကျရသောမွငျကှငျးကမသကျသာလှ။
မမထှေးနှယျက မွပွေငျမှနှဈပကြေျော ကြျောအမွငျ့ပျေါတှငျပေါကျနသေော သရကျပငျခှကွားပျေါသို့ သူ့ဗိုကျလေးကိုတငျပွီး မှောကျထား၍လကျနှဈဖကျက ဘယျညာခှဲထှကျသှားသောသရကျပငျ ပငျစညျနှဈခုကိုကိုငျ၍ အားပွုထားသညျ။ (သရကျပငျခှကွားမှာ သားရခှေလိုပုံစံမြိုးဖွဈနသေညျ။) ခါးအောငျပိုငျးက ထဘီကိုခါးဆီသို့ဆှဲ၍လှနျတငျထားပွီး မမထှေးနှယျ၏ဖငျဖှေးဖှေးကွီးတှကေ ပွောငျ၍နေ၏။ ခငျမောငျထှေးဆိုတဲ့လူက နောကျကနေ မမရဲ့ခါးသေးသေးလေးကိုကိုငျပွီး နောကျကိုပွူးထှကျနတေဲ့ မမပစ်စညျးထဲကိုသူ့ဟာကွီးကဝငျနပွေီး အားရပါးရကွီးကို ကဈနသေညျ။
ဒီလောကျကွီး ခငျမောငျထှေးက အားရပါးရကွီးသှငျးနတောတောငျမှ မမထှေးနှယျကအားရပုံမရ။ ““ပွှတျ……ဖှတျ….ဗွဈ……ပွှတျ…..ဖှတျ…..ဖှတျ…ကြှတျ…ဆောငျ့….ဆောငျ့…ကိုထှေး….အားရအောငျလုပျ….ပွှတျ…..ပွှတျ……ဖှတျ….ဖှတျ…စှပျ…စှပျ….ပလှတျ..ဖှတျ အား….အငျး…အငျး….ဗငျြးစမျးပါအုနျး….နာနာလုပျ….”” သုမနောကျမှ ခငျမောငျထှေးကို လညျပငျးကွောလေးထောငျအောငျ သမငျလညျပွနျလှညျ့ကွညျ့ရငျး အငမျးမရပွောသညျ။ မွငျလိုကျရသညျ့တဈခဏအတှငျးမှာပငျ အပြိုရိုငျးမလေး လေးငယျ၏သှေးသားတှကေ ဟုနျးကနဲထ၍သောငျးကနျြးလာသညျ။ သဲသဲမဲမဲ ဝငျလိုကျထှကျလိုကျလုပျနသေော ခငျမောငျထှေး၏လီးကွီးကို ငေးကွညျ့မိရငျးလေးငယျ၏ဒူးဆဈလေး တှကေ မခိုငျခငျြတော့ တဆတျဆတျဖွဈလာသညျ။ ပွီးတော့ လေးငယျစောကျခေါငျးထဲကယားတကျလာပွီး အရညျလေးတှလှေိမျ့ဆငျးလာသညျ။ စိတျတှအေဆမတနျထနပေုံရတဲ့ စောကျပတျဖောငျးဖောငျးမို့မို့ကွီးထဲကို ဒုတျကနဲ ဒုတျကနဲ စိုကျစိုကျဝငျသှားနတေဲ့ ခငျမောငျထှေး၏လီးကွီးက အရညျတှစေိုရှဲပွီးပွောငျတငျး၍နသေညျ။ လေးငယျမကျြတောငျပငျခတျမိသလား၊ မခတျမိလားမသိတော့။
ကွညျ့ရငျး ပှဲကကွမျးသထကျကွမျးလာသညျ။ လေးငယျဒူးတှတေုနျပွီး အာခေါငျ တှခွေောကျကာ ရငျထဲတှငျကွပျ၍မောလာသညျ။ လေးငယျဆကျပွီးရပျကွညျ့နိုငျစှမျးမရှိတော့ပေ။ ဒါကွောငျ့အိမျပျေါသို့ပွနျတကျခဲ့ပွီး အိပျယာထကျသို့ခွပေဈလကျပဈ လှဲခလြိုကျမိသညျ။ အိပျယာပျေါတှငျပကျလကျလေးနရေငျးနဲ့ လေးငယျမကျြလုံးထဲမှာ မမထှေးနှယျနှငျ့ခငျမောငျထှေးတို့ဆျောနကွေသညျ့မွငျကှငျးကတဈဖနျပွနျလညျလို့မွငျယောငျလာမိပွနျသညျ။ မမထှေးနှယျကလညျး သူ့ကိုယျတိုငျကကိုရှထကာ ခငျမောငျထှေး၏ဆောငျ့လိုးခကျြမြားကို အံကွိတျခံရငျးညီးညူနရေပွနျတော့ လေးငယျမှာလညျးသူတို့အတှဲလိုဖွဈခငျြစိတျကနိုးထလာရပွနျသညျ။ မမထှေးနှယျတဈယောကျတညျး ရညျးစားရှိသညျမဟုတျ။ လေးငယျမှာလညျးရညျးစားရှိတာဘဲ။ ဒီခံစားခကျြကွောငျ့ပငျ လေးငယျတဈယောကျ မိနျးကလေးတနျမဲ့ အရှကျကိုငဲ့ကှကျ ၍ မနကေ့အဈကိုညိုမောငျဆီရောကျခဲ့ရတာဖွဈလတေော့သညျ။ လေးငယျတဈယောကျ ညိုမောငျကိုမကျြနှာပူမိတာအမှနျပငျဖွဈသညျ။
အပြိုလေး၏ပထမဆုံးအတှအေ့ကွုံဆိုတော့လဲ လေးငယျရှကျမိသညျ။ နောကျပွီးတော့ လေးငယျကအိနွေ်ဒမဲ့ပွီး အဈကိုကို့နှုးခဲ့တာမဟုတျလား…..။ တဈနတေ့ညျးနှငျ့လေးငယျ၏ပစ်စညျးလေးက မူလနဂိုအတိုငျးပွနျ၍ဖွဈသှားသညျဆိုပမေဲ့လေးငယျ ညိုမောငျကိုရှောငျနခေဲ့သညျ။ တဈရကျမှနှဈရကျ နှဈရကျမှသုံးရကျ အဈကိုညိုမောငျတို့အိမျဖကျကိုမသှား။ အဈကိုညိုမောငျကလညျး လေးငယျကိုရှိနျနပွေီး မကျြနှာမပွဘူး။ ဒီမှာလေးငယျတဈယောကျနောကျပိုငျးတော့အနရေအထိုငျရခကျလာသညျ။ လေးငယျအခုခံစားနရေတဲ့ဝဒေနာက နာကငျြသော၊ ယောငျယမျးခွငျးဝဒေနာထကျပိုဆိုးသညျ။ ပိုပွီးခံရခကျသညျ။ အရညျလေးတှတေဈစိုစိုဖွဈနသေညျ။ ညိုမောငျကို မတှရေ့တာ(၃)ရကျမှ(၄)ရကျထိရောကျလာတော့ လေးငယျစိတျထဲဒေါသစိတျလေးတှပှေားလာသညျ။
သူကွငျမှကိုယျကွငျဘဲ သူကဘာမို့လို့လဲ…..။ သူမလာသမြှ ငါ့ကိုဘယျတော့မှ မတှရေ့ဘူး။ ငါကတော့ သူ့ဆီဘယျတော့မှမသှားဘူးဟု ဒေါသအတှေးတှဝေငျလာပွီး ဝဒေနာကိုကွိတျမှိတျပွီး ခံစားနမေိသညျ။ ဒီကွားထဲ မမထှေးနှယျကလဲ တဈမှောငျ့ အကိုညိုမောငျ တို့အိမျခေါငျးရငျးမှ လှလှတငျတို့အိမျတှငျအလှူရှိ၍ဝိုငျးလုပျရနျ လေးငယျကိုပါချေါနသေညျ။ ““မလိုကျခငျြဘူး မမရာ မမဘာသာသှားပေါ့”” ““ငယျလေး အိမျမှာတဈယောကျထဲဖွဈနမှောပေါ့”” ““မမကလဲ ဖွဈဖွဈပေါ့….အိမျကတံခါးပိတျထားရငျလုံနတောဘဲဟာ….ခါတိုငျးလဲ….မမသှားရငျ ငယျလေးတဈယောကျထဲ နတောဘဲဟာကို….”” ““ငယျလေးကလဲကှာ မမက မိုးလငျးမှပွနျလာမှာ”” ““ဟငျ့အငျးကှာ….ဟငျ့အငျး…မလိုကျခငျြဘူး”” ““ကဲ….မယျမငျးကွီးမ မလိုကျခငျြလဲနတေော့….မမဘာသာဘဲ သှားလိုကျတော့မယျ…”” ““အဲ့ဒါပွီးတာဘဲဟာကို…”” ““အေးပါ….အေးပါဟုတျပါတယျ”” ““တံခါးတှတေော့ သခြောပိတျအိပျ…”” ““သှားမဲ့ဟာ သှားစမျးပါမမရာ…”” လေးငယျမကျြစောငျးထိုး၍နှုတျခမျးစူရငျး စိတျမရှညျသလိုလုပျကာပွောလိုကျသညျ။
လေးငယျ၊ ထှေးနှယျတို့၏မိဘနှဈပါးမှာ မြားသောအားဖွငျ့ အိမျတှငျမရှိတတျ…..လေးငယျတို့အဖကေပွညျတှငျးရကွေောငျးသင်ျဘောမှာစကျဆရာဆိုတော့ အမကေပါ.. အဖသေ့င်ျဘော နှငျ့လိုကျနတေတျသညျ။ တဈလမှတဈခါလောကျသာ သင်ျဘောနားရကျမှအိမျသို့ပွနျလာတတျလသေညျ။ အိမျတှငျက လေးငယျနှငျ့ထှေးနှယျတို့ ညီအဈမနှဈယောကျထဲသာ ကနျြရဈခဲ့ရ တာဖွဈသညျ။ ညနစောစားပွီး နဲနဲမှောငျမှ မမထှေးနှယျတဈယောကျအလှူအိမျသို့ထှကျသှားခဲ့သညျ။ မမထှေးနှယျထှကျသှားပွီးတော့ လေးငယျက အိပျယာထဲတှငျလှဲကာ ဝတ်ထုဖတျသညျ။ အခဈြဝတ်ထုတှကေိုကွိုကျသာ လေးငယျတဈယောကျဖတျနသေောဝတ်ထုစာအုပျတဈဝကျမကြိုးခငျမှာပငျ ရညျးစားဖွဈသူ ညိုမောငျကိုသတိရလာသညျ။
ဒီရကျတှထေဲတှငျ သူမခံစားနရေသောကာမဆန်ဒဝဒေနာကလညျး လေးငယျအခဈြဝတ်ထုကိုဖတျနခွေငျး၊ အိမျကွီးတဈလုံးထဲတှငျ တဈယောကျထဲလှတျလှတျလပျလပျဖွဈနခွေငျး၊ ပတျဝနျးကငျြတဈခုလုံး တိတျဆိတျငွိမျသကျနခွေငျးတို့ကိုအားပွု၍ လေးငယျ၏တဈကိုယျလုံးရှိသှေးသားတှကေိုဆူပှကျအောငျလှုပျရှားလာစသေညျ။ လေးငယျညိုမောငျကို ဒေါသဖွဈလိုကျမိသညျ။ လကျထဲမှဝတ်ထုစာအုပျကို ဘုနျးကနဲဘေးသို့ပဈခလြိုကျပွီး စားပှဲတငျနာရီလေးကိုလှမျး၍ကွညျ့လိုကျမိသညျ။ ည(၁၀)နာရီတောငျ ထိုးတော့မှာပဲ သူမဝတ်ထုဖတျတာ အခြိနျမနဲတော့ လေးငယျအိပျယာမှထ၍မီးပိတျပွီး၊ ခွငျထောငျခကြာလေးငယျခွငျထောငျထဲဝငျသညျ။
ခံစားနရေသောဝဒေနာခံစားခကျြကို ကွိတျမှိတျ ခံစား၍ လေးငယျအိပျပြျောအောငျကွိုးစားသညျ။ အခြိနျတျောတျောလေးကွာသှားသညျအထိ လေးငယျကအိပျ၍ပငျမပြျောနိုငျဖွဈနသေညျ။ ““ဖြောကျ….ဖြောကျ….ဖြောကျဖြောကျ”” ကွားလိုကျရသညျနှငျ့လေးငယျတဈယောကျခေါငျးနပမျးကွီးကာ ရငျတှတေဒိနျးဒိနျးခုနျသှားသညျ။ သဈကိုငျးခွောကျသေးသေးလေးမြား သှပျမိုးပျေါသို့ကလြာသညျ့အသံ။ ခွံထဲသို့ မမ ထှေးနှယျရညျးစားခငျမောငျထှေးရောကျလာပွီး အခကျြပေးလိုကျသညျ့အသံဖွဈသညျ။ လေးငယျရငျတှခေုနျပွီး စိတျတှဗွေောငျးဆနျအောငျလှုပျရှားလာသညျ။ ခငျမောငျထှေးရောကျလာ ပွီး အိမျမှာကမမထှေးနှယျက မရှိပေ။ သူအလှူအိမျသှားမှာကိုမပွောထားလို့လား….အဲ….ဘယျလိုပွောဖွဈပါ့မလဲ…ခငျမောငျထှေးကစကျရုံအလုပျလုပျနပွေီး နှဈရကျဆငျးတဈရကျနား ရသော အလုပျဆိုတော့ခုညမှအိမျကိုပွနျလာပွီး ရညျးစားထံပွေးလာဟနျတူသညျ။
““ဖြောကျ….ဖြောကျ….ဖြောကျ….ဖြောကျ”” မမထှေးနှယျ မနိုးသေးဘူးထငျ၍ထပျပွီးအခကျြပေးတာဖွဈသညျ။ ဟိုတဈနကေ့ သူမတှခေဲ့ရသညျ့ ခငျမောငျထှေးနှငျ့မမထှေးနှယျတို့၏မွငျကှငျးကို လေးငယျပွနျ၍မွငျယောငျလာပွီး မူလခံစားနရေသော ဝဒေနာပျေါတှငျထပျဆငျ့ကာသှေးသားဆူပှကျမှုတို့က အဆမတနျခံစား၍လာရသညျ။ အရညျလေးတှကေဆကျတိုကျဆိုသလိုစိမျ့ထှကျကလြာသညျ။ လေးငယျ ကောကျကာငငျကာထထိုငျလိုကျပွီး ခွငျထောငျကိုဖှငျ့၍ထှကျလိုကျသညျ။ ခွငျထောငျအပွငျရောကျတော့ ထရပျရနျကွမျးပွငျသို့လကျတဈဖကျထောကျလိုကျပွီးမှ လေးငယျနဲနဲတှေး၍ ပွီးမှအောကျနှုတျခမျးလေးကိုကိုကျပွီး ဆတျကနဲထရပျလိုကျကာ လြှောကျလာခဲ့ပွီးအိမျနောကျဖေးတံခါးကိုဖှငျ့ကာ ခွံထဲသို့ဆငျးလိုကျလသေညျ။
အပွငျဖကျမှာက လမိုကျညမို့မှောငျမဲနေ သညျ။ အမွဲသှားလာလှုပျရှားနသေညျ့ မိမိအိမျရှိရာခွံဝနျးကိုတော့ လေးငယျအခကျအခဲမရှိသှားလိုရာသို့လြှောကျလာနိုငျသညျ။ အမှောငျထဲတှငျမကျြစကေ့လဲနဲနဲကငျြ့သားရလာသဖွငျ့ ခွံထဲတှငျမသဲမကှဲလေးဖွဈလာရသညျ။ အိမျဘေးရှိခွံထဲတှငျသရကျပငျဘေး၌ငုတျတုတျထိုငျ၍စောငျ့နသေော ခငျမောငျထှေးကို လေးငယျရေးရေးလေးမွငျလာရသညျ။ လေးငယျ၏တဈကိုယျလုံးဖိနျးရှိနျး၍တကျလာပွီး ရငျတှတေဒိနျးဒိနျးပိုခုနျလာသညျ။
ဆုံးဖွတျပွီးလြှငျနောကျဆုတျတကျသူတှထေဲမှာ လေးငယျမပါ။ ခငျမောငျထှေးကိုတှလေို့ကျရသညျနှငျ့ ရပျတော့မလိုဖွဈသှားသောသူမ၏ခွထေောကျနှဈဖကျကိုအားယူ၍ ထပျလှမျးလိုကျပွီးခငျမောငျထှေး၏ရှမှေ့ဖွတျကနဲလြှောကျ သရကျပငျခှကွားကို မကျြနှာမူ၍လေးငယျရပျလိုကျသညျ။ ထှေးနှယျဆငျးလာမညျဆိုသောအသိဖွငျ့စောငျ့နသေော ခငျမောငျထှေးမှာလေးငယျသူ့နားသို့ရောကျသညျနှငျ့ လေးငယျမှနျးသိပွီးအနားမှပနျးခွုံထဲ လှညျ့ဝငျမညျအလုပျသူအနီးကပျမွငျလိုကျရသော လေးငယျ၏မကျြနှာ၌ တဏှာခိုးတှဝေပွေီးအမျးတနျးတနျးဖွဈနကော နီမွနျးနသေညျကိုသတိရလိုကျပွီး ပနျးခွုံထဲခေါငျးတိုးဝငျပွီးကာမှ ခငျမောငျထှေးမှလေးငယျဖကျသို့လှညျ့၍ကွညျ့သညျ။ သူကွညျ့လိုကျမိသောခဏမှာပငျ လေးငယျကသရကျပငျခှကွားသို့ သူမ၏ဗိုကျကလေးကိုမှောကျ၍ကုနျးလိုကျသညျကိုတှမွေ့ငျလိုကျရသညျ။
ခငျမောငျထှေးနောကျသို့ပွနျလှညျ့၍ မတျတပျရပျလိုကျခိုကျမှာပငျ လေးငယျကကုနျးရကျသားလေးမှ သူမ၏ထဘီလေးကို ခါးဆီသို့လှနျ၍တငျလိုကျသညျကိုတှလေို့ကျရပွီး ခငျမောငျထှေးတဈယောကျလေးငယျ၏နောကျနား သို့ရောကျမှနျးမသိရောကျ၍သှားသညျ။ ကိုယျ့ခဈြသူလညျးမဟုတျ၊ တဈစိမျးယောကငြ်္ားတဈယောကျရှေ့၌ဖငျကုနျးပေးပွီး ထဘီကိုပါလှနျပေးလိုကျကာလိုးတော့မညျ့အရေးကိုစောငျ့မြှျော နရေသော လေးငယျ၏ရငျတှမှောတဈလှပျလှပျဖွဈကာ တဈကိုယျလုံးကသှေးသားတှဗွေောငျးဆနျနပွေီး အသားလေးတှပေငျတဈဆတျဆတျတုနျ၍နခေသြေညျ။
ကာမရှပွေ့ေးအရညျ တို့ကလညျး ပေါငျတှငျးသားနှဈဖကျပျေါသို့ပငျလိမျ့ဆငျးကလြာကွသညျ။ ခငျမောငျထှေးစားရကံကွုံတော့မုတျဆိတျပြားစှဲပွီး ထှေးနှယျကိုလိုးဖို့ဆောငျ့နရေငျး ထခငျြတိုငျးထနသေော သူ့လီးကွီးကိုဝတျထားသောပုဆိုးကိုလှနျတငျ၍ ခါးတှငျပွနျညှပျကာထုတျလိုကျသညျ။ ပွီးတော့ ကားကားတဈတဈဖွဈနသေောလေးငယျ၏ဖငျနှဈလုံးကို လကျနှဈဖကျဖွငျ့ညှပျ၍ ကိုငျလိုကျသညျ။ လေးငယျဆီမှ သကျပွငျးသေးသေးလေးတဈခကျြခသြံကိုကွားလိုကျရသညျ။ လေးငယျ၏တငျသားအစုံကမာပွီးကဈြနသေညျ။ ထှေးနှယျ၏တငျသားတှလေို အိစကျ၍မနေ။
သူမကွာခဏ လိုးလိုးနသေဖွငျ့ ထှေးနှယျ၏တငျသားတှကေအတနျငယျပြော့နပွေီ။ ခငျမောငျထှေးလကျဖဝါးတဈဖကျကို ပကျလကျလှနျ၍လေးငယျ၏ပွူးထှကျနသေော စောကျပတျကွီးကိုအောကျမှနေ ၍ပငျ့ကိုငျလိုကျသညျ။ လေးငယျကိုယျလေးတှနျ့ကနဲဖွဈကာ ဖငျလေးရမျးသှားသညျ။ အရညျတှကေ မတရားရှဲနပွေီ။ လေးငယျဆီမှ သကျပွငျးခသြံလေး တဈခကျြကွားလိုကျရပွနျသညျ။ လေးငယျ၏စောကျပတျကို စိုစှတျနှေးထှေးစှာထိတှမေိ့လိုကျကာမှ ခငျမောငျထှေး၏စိတျတှကေပိုပွီးဗလောငျဆူလာသညျ။ ခငျမောငျထှေး သူ့လီးကိုကိုငျကာတလေို့ကျပွီးမှ မှနျလာသောကာမစိတျတှကွေောငျ့ လီးကိုဆောငျ့၍သှငျးလိုကျသညျ။ ““ပွှတျ….ဖှတျ…အား….အား…”” လီးကတဈခါတညျးအဆုံးဝငျမသှား…..အပွငျတှငျလကျနှဈလုံးလောကျ ကနျြနသေေးသညျ။ ဒါကိုဆကျမသှငျးသေးဘဲ ခဏရပျလိုကျသညျ။ ““လေးငယျ…သိပျနာသှားလား…”” ““ဟငျ့အငျး….ကွပျတယျကှာ…”” လေးငယျစိတျတှဘေယျလိုမှ မအောငျ့အီးနိုငျတော့…ဖငျကွီးကိုနောကျသို့တှနျးပို့ရငျးပွောသညျ။
ခငျမောငျထှေးက လေးငယျ၏ခါးလေးကိုဆှဲ၍ တဈခကျြခွငျးဆောငျ့လိုးသညျ။ ““ပွှတျ….ဖှတျ….ပွှတျ….ဖှတျ….ပလှတျ…”” ““ကြှတျ….ကြှတျ….ကြှတျ…အငျး….အငျး”” လိုးနရေငျး လေးငယျဆီကမသဲမကှဲငွီးသံလေးတှကွေားနရေတာ ခငျမောငျထှေးအဖို့ပို၍အရသာတှလှေ့သညျ။ ထှေးနှယျကတော့ဒါမြိုးမဟုတျ အံကွိတျပွီးနှုတျခမျးနှဈခုတငျးတငျးစေ့ ကပျကာခံသညျ။ လူကွားမှာစိုးတာလဲပါသညျ။ ပွီးတော့လီးတဈဆုံးဝငျသှားကတညျးက လေးငယျ၏အတှငျးထဲမှဆှဲငငျရဈပတျအားက ပွငျးထနျလှသညျ။ ဒီလိုတဈမူထူးကို အရသာတှေ ထူးခွားလာတော့ ခငျမောငျထှေး၏ဆောငျ့ခကျြတှကေပို၍စိပျလာသညျ။ သရကျပငျခှကွားမှာမှောကျထားသော လေးငယျ၏ကြောပွငျလေးကော့ကော့ပွီး ထောငျထောငျသှားရသညျထိ ဆောငျ့ခကျြတှကေပွငျးထနျလာသညျ။
““ ပွှတျ….ဖှတျ….ပွှတျ….ဖှတျ….ပလှတျ…”” ““ကြှတျ….ကြှတျ….ကြှတျ…အငျး….အငျး”” ““အား….အား…..အငျး…အငျး…..လုပျ…”” ““အမလေး….လုပျ…လုပျပါ”” လေးငယျပွီးလုပွီးခငျဖွဈလာပွီဆိုတာကို ခငျမောငျထှေးသိလိုကျပွီး ခပျစိတျစိတျလေးဆောငျ့ပဈလိုကျသညျ။ ညိုမောငျလိုးတာကိုခံရတုံးကထကျ အမြားကွီးပိုပွီးအရသာရှိလှသညျ။ ဒီတုံးကအစိမျးသကျသကျဖွဈနရေတာကလညျးတဈကွောငျး၊ ညိုမောငျကလညျး မိနျးမလုပျဖူးပုံမရသေး….၊လိုးခကျြတှကေထိထိမိမိမရှိလှ။ အခုတော့ အတှအေ့ကွုံမြားလှသော ခငျမောငျထှေး၏အတှဝေ့ယျ လေးငယျဘယျလိုမှမအောငျ့နိုငျတော့ဘဲ အားနဲ့ဖငျကွီးတှကေိုနောကျသို့ခပျပွငျးပွငျးဆောငျ့ပွီး အဆုံးသတျလိုကျသညျ။ လေးငယျပွီးသှားမှနျးသိတော့ ခငျမောငျထှေးကခပျဖွေးဖွေးတဈခကျြခွငျးဆောငျ့ပေးသညျ။ လေးငယျအရသာရှိလှသညျမှာ မပွောပါနဲ့တော့။
အရသာရှိလှပမေယျ့ သရကျပငျခှကွားမှမှောကျပွီးခံရတော့ သိပျပွီးဇိမျမ တှလှေ့ပေ။ သရကျပငျခှကွားတှငျမှောကျ၍ကုနျးထားသော လေးငယျခါးကိုဆနျ့၍ဗွုနျးကနဲမတျတပျရပျလိုကျတော့ ခငျမောငျထှေး၏လီးကအလိုအလြှောကျကြှတျသှားသလို ခါးသို့လှနျ တငျထားသော သူမ၏ထဘီလေးကလညျး အလိုအလြှောကျအောကျသို့ပွနျကြ၍ လေးငယျ၏အောကျပိုငျးကိုဖုံးအုပျသှားသညျ။ လေးငယျကိုခငျမောငျထှေးနားမလညျနိုငျစှာကွညျ့လိုကျသညျ။ သူ့ပုဆိုးကိုပွနျပွီးမဖုံးမိသေး။ မပွီးသေးသော ခငျမောငျထှေး၏လီးကွီးကအရညျတို့ဖွငျ့ ပပှေကာမတျတောငျနသေညျမှာ အသဲယားစရာကောငျးလှသညျ။ မကျြလုံးစှေ၍ လေးငယျ ခငျမောငျထှေး၏အောကျပိုငျးကိုကွညျ့လိုကျသညျ။ ““လာ….အဈကိုထှေး အိမျပျေါသှားရအောငျ…”” လေးငယျက သူမဘာသာတဈယောကျထဲပွောသလို ခငျမောငျထှေးကိုမကွညျ့ဘဲပွောပွီးလှမျးထှကျသှားသညျ။
ရပျနသေောခငျမောငျထှေး၏ခွထေောကျတှကေ ဗွုံးကနဲမလှုပျရှားတှေ ဝနေပေုံရသညျ။ ““အိမျမှာဘယျသူမှမရှိဘူး အဈကိုထှေး…”” ဒီတော့မှ ခငျမောငျထှေး၏ခွထေောကျတှကေ လှုပျရှား၍လာသညျ။ ရှမှေ့သှားနသေော လေးငယျ၏နောကျသို့ ခငျမောငျထှေးလိုကျလာသညျ။ အိမျပျေါရောကျတော့ လေးငယျအိပျခနျး ထဲထိသှားမနတေော့၊ မီးဖိုဆောငျကွမျးပွငျမှာပငျ ထိုငျ၍လှဲခလြိုကျသညျ။ ခငျမောငျထှေး သူမဘေးသို့ရောကျလာပွီးထိုငျခလြိုကျရာမှ လေးငယျ၏ထဘီလေးကိုလှနျတငျလိုကျသညျ။ လေးငယျမကျြလုံးလေးမှိတျပွီး ငွိမျခံနသေညျ။ ပွီးတော့ ခငျမောငျထှေးသူမ၏စောကျပတျလေးကို တရှရှကိုငျတှယျပှတျသပျသညျ။ လေးငယျပေါငျနှဈလုံးကိုဆှဲထောငျလိုကျသညျ။ ဟာလာဟငျးလငျးဖွဈနပေမေယျ့ စောကျပတျကအဝလေးဟနမေယျဆိုတာ လေးငယျသိသညျ။ ““လိုးတော့မယျနျော…..လေးငယျ…”” လေးငယျနားထဲပူသှားပွီး တဈကိုယျလုံးဖိနျးရှိနျးသှားသညျ။
စောစောက လေးငယျ၏ဟာလေးကို သူတရှရှကိုငျကွညျ့နကေထဲက လေးငယျစိတျတှပေါလာနပွေီဖွဈသညျ။ လေးငယျ ပေါငျနှဈလုံးကိုထပျပွီးကားကာ ဖငျလေးကိုပှတျပေးရငျးစောကျဖုတျလေးကို ပိုခုံးမောငျအောငျလုပျပေးသညျ။ ခငျမောငျထှေးလီးထိပျကွီးက စောကျပတျလေးကိုပှတျတိုကျဆော့ကစားပွီးမှ စောကျခေါငျးဝလေးကိုတလေို့ကျသညျ။ လေးငယျအသကျအောငျ့ထားမိသညျ။ ခငျမောငျထှေး၏ဖငျကွီးကိုကော့၍ လီးကိုဖိသှငျးသညျ။ စောကျခေါငျးထဲသို့ပွညျ့ကွပျစှာ တငျးတငျးကွီးပငျ ဝငျလာသော လီးကွီး၏အရသာကိုခံစားရငျးလေးငယျ၏မကျြဝနျးတှထေဲတှငျ ညိုမောငျကိုမွငျယောငျနမေိသညျ။ ခဈြသူညိုမောငျကိုသတိရနမေိသညျ။ လေးငယျမှားမြား မှားသှားပွီလား၊ မသိဘူး၊ အခဈြကိုငဲ့ကှကျ၍ လေးငယျသှေးသားဆန်ဒကို ရှတေ့နျးတငျခဲ့လသေညျ။
တငျးကနဲဝငျလာသောလီးကွီး၏အရသာအတှကေ့ လေးငယျ၏တဈကိုယျလုံးကိုဖငျြးကနဲလှမျးခွုံရဈ သိုငျး၍သှားသညျ။ လေးငယျလကျကလေးမြားကခငျမောငျထှေး၏ကြောပွငျကိုအလိုလြှောကျဖကျတှယျလိုကျမိသညျ။ လေးငယျဖငျလေးကိုကော့ထားရငျး တငျးတငျးလေးနသေဖွငျ့ စောကျဖုတျလေးကခုံးမို့ဖောငျးကားနသေညျ။ ““ ပွှတျ….ဖှတျ….ပွှတျ….ဖှတျ….ပလှတျ….စှပျ….ဖှတျ….အငျး…အငျး…အမလေး..လေး…အား….အငျး…”” လေးငယျ ခငျမောငျထှေးကိုမခဈြမိသညျကတော့သခြောသညျ။ ခငျမောငျထှေးလိုးတာကိုခံရငျး ခဈြသူညိုမောငျကိုဘဲ မွငျယောငျနသေညျ။ ဒါပမေယျ့ လေးငယျ ခငျမောငျထှေးကို တဈအားပွနျ၍ဖကျထားပွီး ခငျမောငျထှေး၏ပါးကိုပငျ ခေါငျးထောငျ၍တဈခကျြနမျးလိုကျမိသေးသညျ။ ဆောငျ့အားနှငျ့လိုးအားကောငျးလှသောကွောငျ့ မကွာမှီမှာပငျ လေးငယျမခံနိုငျ အောငျကငျြတကျအီဆိမျ့လာသညျ။ ဖငျကိုလူးလိမျ့၍ စကောဝိုငျးကော့ကော့ပေးလိုကျမိသညျ။ ““ပွှတျ….ဖှတျ….ပွှတျ…ဗွဈ….အား…”” လေးငယျ၏စောကျခေါငျးထဲမှအရညျမြားပှကျကနဲ ပနျးထုတျလိုကျသညျ။
““ပွှတျ…ဒုတျ….ဖှတျ….ဖှတျ…ဗွှီ….”” ““အငျး……”” တခဏအတှငျးမှာပငျ ခငျမောငျထှေး၏လီးထိပျမှထှကျလာသောအရညျတှကေ လေးငယျ၏စောကျခေါငျးလေးအတှငျးဝယျ နှေးကနဲ နှေးကနဲဖွငျ့ လေးငယျကိုဆိမျ့ကငျြသှားပတေော့ပါ သညျ။ ခငျမောငျထှေးနှငျ့လေးငယျလိုကျပွေးသှားသညျဟူသော သတငျးကညိုမောငျ၏အသဲကို ကြှဲခတျသှားရုံမြှသာမဟုတျ။ ထှေးနှယျ၏ရငျဝကိုလညျး လှံခြှနျစိုကျသကဲ့သို့ခံစားလိုကျရသညျ။ ညိုမောငျက လေးငယျ၏ရညျးစား၊ ထှေးနှယျဆိုတာက ခငျမောငျထှေး၏ရညျးစား၊ ပွီးတော့ထှေးနှယျကလေးငယျ၏အဈမအရငျးခေါကျခေါကျ ခငျမောငျထှေးနှငျ့လေးငယျဘကျက ဘယျလိုဖွဈသှားကွသညျကို ထှေးနှယျနှငျ့ညိုမောငျတို့နှဈယောကျစလုံး မစဉျးစားတတျအောငျဖွဈကွရသညျ။ ထှေးနှယျဆီနှဈရကျခွားတဈခါလာနကွေ ခငျမောငျထှေးမလာတာ နှဈလကြျောအကွာမှာလေးငယျကို ခိုးပွေးခွငျးဖွဈသညျ။ ဒီကွားထဲမှာ ခငျမောငျထှေးက ထှေးနှယျကိုတဈခါခြိနျးခဲ့ဘူးသညျ။ လာနကွေဘာကွောငျ့ရောကျမလာသလဲဆိုတာသိခငျြသော ထှေးနှယျက ခငျမောငျထှေး၏အိမျကိုအရဲစှနျ့၍ သှားတှခေဲ့သညျ။
ဟိုရောကျတော့ ကိုထှေးဘာကွောငျ့မလာသလဲဆိုသော မေးခှနျးကိုမမေးမိ၊ မတှရေ့တာကွာပွီဖွဈသောခဈြသူနှငျ့ အတိုးခပြွီးခဈြခဲ့ကွသညျ။ ဒါပမေယျ့ပွနျခါနီးမှာတော့ နုံးခြိနသေော ထှေးနှယျ၏ကိုယျလုံးလေးကို ဖေးမဖကျငငျကာအိမျပေါကျဝသို့လိုကျပို့ရငျး ကိုယျ ထှေးနှယျဆီလာဖို့မလှယျတော့ဘူး။ အိမျကလူကွီးတှကေညဘကျဆို ကိုယျ့ကိုအပြောကျမခံတော့ဘူး။ အခုလိုအိမျမှလူရှငျးတဲ့အခါ ထှေးနှယျကိုလှမျးပွီးခြိနျးလိုကျပါ့မယျ…ဟူသောစကားက အိမျပေါကျဝရောကျကာမှ ကိုယျ့လညျပငျးကွီးကိုထှေးနှယျလှမျးဖကျပွီးနမျးလိုကျမိသညျအထိ ထှေးနှယျကိုအငျအားတှဖွေဈစခေဲ့တာပါ။ အခုတော့ဒီစကားက ထှေးနှယျကိုပြားရညျနဲ့ဝမျးခခြဲ့တာမှနျး ထှေးနှယျနောကျကစြှာဖွငျ့သိခဲ့ရပါပွီ။ အခုတော့ကိုရယျ ထှေးနှယျဘယျလိုနရေမ လဲ ဟငျ……။ ညိုမောငျအိမျသို့ လေးငယျရောကျလာပွီးညိုမောငျအိပျနစေဉျရောကျလာကာ လေးငယျကဦးဆောငျ၍အခဈြပှဲကိုနှဲခဲ့ကွသညျ။
နောကျနမှေ့စ၍ လေးငယျအားညိုမောငျမတှမေိ့တော့ပေ။ လေးငယျရှကျနတောပဲဖွဈမညျ။ ဒါဆိုလေးငယျတို့အိမျဖကျလြှောကျပွီး လေးငယျကိုသှားတှဖေို့ကောငျးပါ့မလား….လူပြိုသိုးကွီးညိုမောငျမဆုံးဖွတျနိုငျ။ ခြီတုံခတြုံဖွဈနသေညျ။ သူသှား တော့ရှိနသေောလေးငယျစိတျတိုသှားလြှငျခကျမညျ။ ဒီအသကျအရှယျရောကျမှ ရညျးစားဦးရသော ညိုမောငျတဈယောကျဘာလုပျရမှနျးမသိဖွဈနသေညျ။ ပွီးတော့တဈကယျလို့မြား သူနှငျ့လေးငယျ ဟိုတဈနကေ့တှခေဲ့ဖွဈခဲ့ကွတာတှကေို တဈနညျးနညျးနဲ့လူကွီးတှသေိသှားပွီး လေးငယျဘာပွဿနာတှဖွေဈမှနျးမသိ။ အကယျ၍ဒီလိုဖွဈနတောမှနျခဲ့ရငျ သူရောကျသှား ရငျ လေးငယျအတှကျပါ ပွဿနာကမသေးလှ။ ညိုမောငျ၏အတှေးတှကေ သူလေးငယျဆီမသှားဖို့ကမြားနသေညျ။
ဒါကွောငျ့လဲ ညိုမောငျကိုငယျငယျထဲကသှေးကွောငျတဲ့ညိုမောငျလို့ သူငယျခငျြးတှကေ ပွောကွသညျ။ ပွီးတော့ငယျငယျတုနျးကဆိုရငျ သူငယျခငျြးတှကေသူ့ကို စကွောကျကွီးတဲ့။ နောကျဆုံးညိုမောငျတှေးမိတာကတော့ အရငျတဈခါကလညျးလေးငယျသူ့ဆီရောကျလာတာနဲ့ အခုလညျးအခွအေနပေေးရငျ သူ့ဆီရောကျလာမှာဘဲဟုတှေးကာဆုံးဖွတျပွီး လေးငယျ အလာကိုသာညိုမောငျမြှျောနမေိတော့သညျ။ အခုတော့လေးငယျတဈယောကျ ညိုမောငျဆီဘယျတော့မှ လာတော့မညျမဟုတျတော့ပေ။ ညိုမောငျထံလေးငယျရောကျခဲ့ပွီး ညိုမောငျလာ လနေိုးနဲ့မြှျောခဲ့ပမေယျ့လညျး လေးငယျထံသို့ညိုမောငျရောကျမလာခဲ့ပေ။ ထနျးနို့ကလှီးလိုကျမိပွီ။
အစရှိတနောငျနောငျ သှေးသားတို့က ပကတိသှေးသားတှမေဟုတျတော့…။ လူသှေး ကိုလြှာပျေါတငျယကျစုပျလိုကျမိသော ကြားရိုငျးမလေးသဖှယျဖွဈနသေညျ။ လေးငယျက ငယျရှယျနုပြိုသူမို့ မထိမျးနိုငျ၊ အဈမဖွဈသူထှေးနှယျ၏ရညျးစား ခငျမောငျထှေးတဈယောကျလာနကွေအတိုငျး ညဖကျခွံထဲရောကျလာတော့ အိမျမှာမမထှေးနှယျကမရှိ။ အလှူအိမျသို့သှားနသေညျ။ မမထှေးနှယျနှငျ့ခငျမောငျထှေးတို့၏ ပြျောရှငျမွူးတူးခဈြပှဲလူးခဲ့ကွတာကိုလညျး လေးငယျမကျြဝါးထငျထငျတှရေ့ဖူးသညျ။ အခုလတျတလောမှာလညျး ကြားရိုငျးမလေး လေးငယျသှေးကဆာနသေညျ။ အဈမထှေးနှယျ၏ရညျးစား ခငျမောငျထှေး စောငျ့နမေညျ့ခွံထဲသို့ လေးငယျညသနျးခေါငျတှငျ တဈယောကျထဲဆငျးလာသညျ။
ပွီးတော့ လေးငယျတဈယောကျအသိဉာဏျတှေ အရှကျတှကေိုလှငျ့ပဈလိုကျပွီး မမထှေးနှယျကာမအရသာကိုခံစားနကွေ သရကျပငျခှကွား၌မှောကျ၍ကုနျးပေးလိုကျသညျ။ အဈမဖွဈသူ ထှေးနှယျထကျတောငျ့သော ခြောသော ပို၍စှဲမကျဖှယျရာကောငျးလှသော လေးငယျတဈယောကျသူ့ရှသေို့စကျရုပျတဈရုပျနှယျ လှမျးလြှောကျရောကျလာပွီး ဖငျလေးကုနျး ကာ ထဘီလေးလှနျတငျလိုကျတာမွငျလိုကျရတော့ ခငျမောငျထှေးမှာကနျြးမာသနျစှမျးသော လူပြိုလူငယျတဈယောကျပါ…။ ပွီးတော့လာနကေအြတိုငျး ခဈြသူထှေးနှယျထံရောကျလာပွီး ပွငျးပွသောဆန်ဒနှငျ့ထှေးနှယျကိုစောငျ့နခေိုကျ…….ဒီတော့လေးငယျကို ဘယျအလှတျပေးပါ့မလဲ…..။
သူဖွဈခငျြသောဆန်ဒ၊ လေးငယျတောငျ့တနသေောဆန်ဒတှကေို တဈဝကွီးဖွညျ့ ဆညျးလိုကျသညျ။ အတှအေ့ကွုံမြားက ညိုမောငျထကျအစစအရာရာသာသော အတှတေို့တှငျနဈမှနျးကာ လေးငယျတဈယောကျခငျမောငျထှေးကို အိမျပျေါအထိချေါခဲ့လသေညျ။ တဈကွိမျမှသညျ အကွိမျပေါငျးမြားစှာ တဈရကျမှသညျရကျပေါငျးမြားစှာ နှဈလတာကွာခဲ့သောကာလဝယျ ကာမအတှေ့၌နဈဝငျနခေဲ့သော လေးငယျတဈယောကျခွောကျခွားစရာကောငျး လှသော အိပျမကျကွောငျ့အိပျပြျောနရောမှ ဗွုံးကနဲလနျ့နိုးရသူလို လေးငယျတုနျလှုပျခွောကျခွားသှားရသညျ။ မိနျးမတို့ စမူဆာ မတှရေ့တာနှဈလရှိသှားခဲ့ပွီ။ တတျကြှမျးနားလညျသူကို တိုးတိုးတိတျတိတျပွကွညျ့တော့ ထငျသညျ့အတိုငျးအဖွကေမှနျနသေညျ။ လေးငယျဘာလုပျရမလဲမသိ….။ ပထမဆုံးညိုမောငျနှငျ့တဈနခေ့ငျးလုံးအပြျောကွူးခဲ့ကွသညျ။
နောကျခငျမောငျထှေးနှငျ့ အကွိမျကွိမျအဖနျဖနျဆိုတော့ ဘယျသူ့လကျခကျြမှနျး လေးငယျဝခှေဲဆုံးဖွတျ၍မရ။ ဒါပမေယျ့လကျရှိက ခငျမောငျထှေး ဒီတော့…မိနျးမသားပီပီ လေးငယျတဈယောကျ ခငျမောငျထှေးထံမကျြရညျခံထိုး၍ ကိုထှေးရငျသှေးလေး ငယျလေးဆီမှာ ရှိနပွေီဆိုတဲ့စကားလေးကို မရဲတရဲလေးတုနျခိုကျစှာ မပှငျ့တပှငျ့လေးဆိုလိုကျတော့ ခငျမောငျထှေးတဈယောကျလေးငယျကို ခိုးပွေးလတေော့သညျ။ အိမျမှာက မိဘနှဈပါးရှိသညျမဟုတျ အဈမကွီးအမိအရာဆိုသလို ထှေးနှယျတဈယောကျမကျြရညျစကျလကျဖွငျ့ မိဘတှထေံကိုလညျးအကွောငျးကွားရသညျ။ ရပျရှာသူကွီးမြားမှတဈဆငျ့ ခငျမောငျထှေး၏မိဘမြားထံလညျး ဆကျသှယျရသညျ။ ညီမလညျးဆုံး၊ ခဈြသူလညျးဆုံး ပွီးတော့သူတို့နှဈယောကျကိစ်စကိုလညျး ထှေးနှယျမကျြရညျစကျလကျဖွငျ့လိုကျလုပျနရေသညျ။ ထှေးနှယျလောကျနာကငျြခံစားနရေ တာ ဘယျမှာရှိနိုငျပါတော့မညျနညျး။ ညိုမောငျကတော့ ယောကငြ်္ားလေးအမာစား၊ အပြော့စားမဟုတျ။
ဒါပမေယျ့ လေးငယျကညိုမောငျအတှကျရညျးစားဦး၊ ဒီတော့ညိုမောငျခံနိုငျရညျမရှိ၊ မကွုံဖူးသောဝဒေနာကို လူးလှိမျ့ နအေောငျခံစားနရေသညျ။ ဒီလိုကိစ်စမြိုးနှငျ့ပတျသကျ၍ ယောကငြ်္ားတှမှောထှကျပေါကျကရှိပွီးသား အဲ့ဒါကတော့ ယမကာထှကျပေါကျပငျဖွဈသညျ။ တဈသကျလုံးသောကျတတျစားတတျ သူမဟုတျတော့ ညိုမောငျစိတျကမရဲ ဒီတော့အိမျသို့ဝယျလာပွီး ပုနျးလြှိုးကှယျလြှိုးသောကျရသညျ။ အိမျမှာကလညျး လူကမြားမြားစားစားရှိတာမဟုတျ။ ညိုမောငျအဈကိုဝမျးကှဲ မွငျ့ဝေ နှငျ့ မရီးခငျသကျတို့လငျမယားနှဈဦးသာရှိသညျ။ မွငျ့ဝကေ လိုငျးကားမောငျးတော့ ညဥျ့နကျမှပွနျလာတတျပွီး မိုးမလငျးမှီထသှားတတျသညျ။ ဒီတော့ညိုမောငျတဈယောကျ လှတျလပျ ခငျြတိုငျးလှတျလပျ၍နသေညျ။ အမှနျတော့ ညိုမောငျတို့မိသားစုကနယျတှငျနတောဖွဈသညျ။ ညိုမောငျသာအလုပျလာရှာရငျး စကျရုံတှငျအလုပျရကာ အဈကိုဝမျးကှဲမွငျ့ဝေ၏အိမျမှာနတောဖွဈသညျ။ မွငျ့ဝမေိနျးမ ခငျသကျကလညျး သူတို့မွို့သူပငျဖွဈတော့…..ညိုမောငျနှငျ့ရငျးနှီးခငျမငျပွီးသားဖွဈလသေညျ။
မခငျသကျက သဘောကောငျးသညျ။ အိမျတှငျညိုမောငျကို အစစအရာရာ ဦးစားပေးသညျ။ ညိုမောငျ၏အဝတျအစားကအစ ခငျသကျလြှျောပေးသညျ။ စားစရာခကျြရငျလညျး အသဲအမွဈလေးမြားပငျ ညိုမောငျအတှကျခူးခပျ၍ဖယျပေးထားသညျ။ မခငျသကျက ညိုမောငျထကျ အသကျတဈနှဈသာကွီးသညျမို့ သူငယျခငျြးတှလေိုပွောဆိုဆကျဆံသညျ။ ဒါပမေယျ့ ညိုမောငျကအိမျတှငျရှိသော ခငျသကျကိုလညျးဂရုမစိုကျ စကျရုံမှခှငျ့ရကျရှညျယူထားပွီး ပုလငျးတဈလုံးနှငျ့သာအဖျောပွုနလေသေညျ။ ညိုမောငျရညျးစား လေးငယျ ခငျမောငျထှေးနှငျ့လိုကျပွေးသဖွငျ့ ညိုမောငျခံစားနရေတာကို ခငျသကျသိသညျ။ အရငျကညိုမောငျရညျးစားမထားခဲ့ဖူးတာကိုလညျး ခငျသကျတဈစှနျးတဈစသိသညျ။ ဒီတော့ ညိုမောငျအဖွဈကိုစာနာ၍ ညိုမောငျ့ကို ဘာမှမပွောဘဲ ခငျသကျအသာဘဲကွညျ့၍နသေညျ။
ဒါပမေယျ့ ညိုမောငျက တဈနထေ့ကျတဈနပေို့၍ဆိုးလာသညျ။ သောကျကာစက သူ့ကိုယျသူထိမျးနိုငျသိမျးနိုငျသေးသညျ။ သူ့ကိုယျသူ သတိထား၍သောကျသညျ။ နောကျတှငျတော့ ဆငျဆငျခွငျခွငျမရှိရုံမြှမက လူမှနျးသူမှနျးမသိအောငျအထိသောကျလာပွီး ခငျသကျခူးခပျ၍လာခပြေးသော ထမငျးဟငျးကိုပငျစားတယျဆိုရုံ တဈဇှနျးနှဈဇှနျးစား၍ နရောတှငျပငျလှဲခအြိပျ ပြျောသှားသညျအထိ အခွအေနဖွေဈလာတော့ ခငျသကျဆကျပွီးဒီအတိုငျးကွညျ့မနနေိုငျတော့ ညိုမောငျအားပွောဆိုဖြောငျးဖရြနျ စဉျးစားရလတေော့သညျ။ ညိုမောငျတဈယောကျရှတှေ့ငျ အရကျပုလငျး၊ ဖနျခှကျ၊ ရခှေကျနှငျ့ ငါးခွောကျကွျောပနျးကနျလေးကိုခြ၍ ကွမျးပွငျတှငျထိုငျကာ ထုံးစံအတိုငျး သူလုပျနကွေအတိုငျး အိမျရှလေ့မျးမကို အကွာကွီးမြှျောကွညျ့နလေိုကျ အရကျဖနျခှကျကို ကောကျမော့လိုကျနှငျ့လုပျနသေညျ။ ခငျသကျရခြေိုးပွီး အိမျပျေါသို့တကျလာကာ မကျြနှာသုတျအပွီး ညိုမောငျအားထမငျးခူးပေးရနျ သတိရကာ ထမငျးနှငျ့ဟငျးတို့ကို ပနျးကနျနှငျ့ခူးခပျထညျ့ယူလာပွီး ညိုမောငျ၏ရှတှေ့ငျခပြေးလိုကျသညျ။
ခငျသကျကွညျ့လိုကျတော့ အရကျပုလငျးထဲတှငျလကျနှဈလုံးလောကျသာရှိ တော့သညျ။ ““ညိုမောငျ…..ထမငျးစားတော့..”” ““အငျး….”” ပွောပွီး ထမငျးပနျးကနျကိုခပြေးကာ ခငျသကျလှညျ့ထှကျမညျအလုပျ အပွငျတှငျမှောငျစပြိုးနသေညျကိုသတိထားမိပွီး အိမျရှတေံ့ခါးကို ခငျသကျသှား၍ပိတျလိုကျသညျ။ သူမပွနျလှညျ့ လာသညျအထိ ညိုမောငျကထမငျးပနျးကနျကိုမတို့သေး။ ““ညိုမောငျ ထမငျးလညျးစားအုနျး……ပွီးတာတှလေညျးပွီးသှားပွီဘဲဟာ….တဈယောကျမကောငျး တဈယောကျပေါ့….ကိုယျ့ကနျြးမာရေးလညျးဂရုစိုကျဦး…..”” ခငျသကျ ညိုမောငျနားအရောကျရပျ၍ ဖြောငျးဖပြွောဆိုလိုကျသညျ။ ခငျသကျဖြောငျးဖလြိုကျသညျကပငျ ညိုမောငျကိုဆှပေးသလိုဖွဈသှားသညျလားမပွောတတျတော့။
““မပွီးဘူး….ဘယျတော့မှမပွီးဘူး….ငါ့ရငျထဲမှာ ဘယျတော့မှ မပွီးဘူးခငျသကျ…”” ခငျသကျကိုလှညျ့ကွညျ့ပွီး ညိုမောငျကမူးသံကွီးဖွငျ့ပွောသညျ။ ရှမှေ့ပုလငျးကို ခငျသကျကွညျ့လိုကျတော့ စောစောက ကနျြနသေညျ့အရကျလကျနှဈလုံးကမရှိတော့။ ပုလငျးပငျ ကွမျးပွငျပျေါတှငျ တုံးလုံးလဲနပွေီ။ ““ဒါတော့…..ဒါပေါ့ဟာ….ကနျြးမာရေးကို ဂရုစိုကျဖို့ပွောတာပါ…”” ““ထှီ….ယောကငြ်္ားခငျြး ဘာမြားကှာလို့လဲ ခငျသကျရာ ငါလညျးယောကငြ်္ားစဈပါပဲဟာ…”” အို…“ဟာ…..ဝုနျး…..အာ”” ““ဟဲ့…ညို…..မောငျ…..ညိုမောငျ….အို….အို….”” ညိုမောငျက အားမာနျအပွညျ့ဖွငျ့ကွုံး၍အထ ဘေးသို့ယိုငျဆငျးသှားတော့ ခငျသကျကလှမျးဆှဲ၍ထိနျးလိုကျသညျ။ ညိုမောငျသူမဖကျပါလာပမေယျ့ ခါးကပုဆိုးကကြှတျကသြှားသညျ။
ခငျသကျက ဗွုံးကနဲလှမျးဆှဲ၍ ညိုမောငျကခငျသကျဘကျကို မတျ၍ပွနျပါလာသျောလညျး သူ့ကိုယျသူမဟနျနိုငျ၍ ပွနျ၍ယိုငျအသှား ညိုမောငျက ခငျသကျကိုလှမျး၍ဖကျလိုကျသျောလဲ ညိုမောငျ၏ခန်ဓာကိုယျအလေးခြိနျကို ခငျသကျမထိနျးနိုငျ နှဈယောကျစလုံးဖကျလြှကျသား…..ကွမျးပွငျပျေါသို့လဲပွို၍ကသြှားတော့သညျ။ ရငျလြားထားသော ခငျသကျ၏ထဘီကပွကြေ သှားပွီး ဖှေးနဈသော နို့နှဈလုံးကဝငျးကနဲထှကျပျေါ၍လာသညျ။ စူးရှသောမကျြလုံးအစုံဖွငျ့ ညိုမောငျကခငျသကျ၏နို့နှဈလုံးကို စူးစူးရဲရဲစိုကျကွညျ့နသေညျ။ ““ညိုမောငျ…..ဖယျ…ဖယျတော့….ငါထတော့မယျ….”” ခငျသကျ ဘယျလိုမှဒီအနအေထားနှငျ့မနတေတျတော့…. နို့နှဈလုံးကလညျး ဟငျးလငျးကွီးပျေါ၍နသေညျ။ ဒါကိုလညျး ညိုမောငျကစိုကျကွညျ့နသေညျ။ ဒါတငျလားမဟုတျသေး။ သူမ၏ကိုယျတဈခွမျးပျေါသို့ မှောကျကနြသေော ညိုမောငျ၏ပေါငျကွားမှဖှားဖကျတျောကွီးက ဘယျအခြိနျကထနတောလဲမသိ သံခြောငျးကွီးအလား ခငျသကျ၏ပေါငျထိပျဘေးကို ထောကျထားမိသညျ။
စောစောက ကြှတျကသြှားပွီဖွဈ၍ ညိုမောငျခါးတှငျပုဆိုးကရှိတော့တာမဟုတျ။ ကိုယျလုံးခွငျးပိနသေဖွငျ့ မာကြောလှသော လီးတနျကွီးကတဒိတျဒိတျသှေးတိုငျး နတောကို ခငျသကျသိနရေသညျ။ ခငျသကျတဈကိုယျလုံးထူပူလာသညျ။ ခငျသကျပွောလိုကျတာကို ညိုမောငျကဘာမှပွနျမပွော ခငျသကျ၏မကျြနှာကို ဖွတျကနဲလှမျးကွညျ့လိုကျပွီး “ရှတျ” ကနဲ လှမျးနမျးလိုကျသညျ။ ““ဟငျ….အို…”” တဈကိုယျလုံးထူပူနရေသညျ့အထဲတှငျ ခငျသကျတဈကိုယျလုံးကွကျသီးဖနျြးကနဲထသှားသညျ။ ““ဖယျ….ဖယျဟာ…အို….အို….အငျး…..အငျး…အ…အငျး..”” ခငျသကျ၏နို့ကိုညိုမောငျ အငမျးမရစို့လိုကျသညျ။ စို့တာမှ ကမူးရှုးထိုးကို ကွမျးကွမျးရမျးရမျးစို့ပဈလိုကျသညျ။ ခငျသကျ ညိုမောငျ၏ကြောပွငျကို လကျသီးဆုပျလေးဖွငျ့ထုသညျ။
နှဈခကျြသုံးခကျြသာထုလိုကျနိုငျပွီး ခငျသကျငွိမျကသြှားပွီး တအငျးအငျးငွီးကာ ရငျဘတျလေးကွှ၍ ကွှ၍တကျလာသညျ။ ဟုတျသညျ ဒီလိုအငမျးမရကွမျးကွမျးရမျးရမျးစို့တာကို သူမခံ ရတာကွာပွီ။ နို့နှဈလုံးကို တဈလုံးပွီးတဈလုံး ညိုမောငျစို့သညျ။ ဖှေးနဈသော နို့အုံလေးမြားပငျ ပနျးနုရောငျသနျးလာသညျ။ ခငျသကျမကျြလုံးလေးတှစေငျးကလြာပွီး တအငျးအငျးငွီးကာ ခန်ဓာကိုယျမှအားအငျမြားက တဈစတဈစရုတျလြော့၍လာသညျ။ ခငျသကျ၏အာရုံက နို့စို့ခံနရေသောအတှမှေ့သညျ ပေါငျထိပျတှငျထောကျ၍နသေော လီးခြောငျးကွီးဆီသို့ တဈခကျြခကျြ ရောကျ၍သှားသညျ။ သနျလိုကျတဲ့ဟာကွီးဟု တှေးမိလိုကျတိုငျး နို့အုံတဈခုလုံးပါစပျထဲပွုတျဝငျသှားလုမတတျ ရငျဘတျလေးကွှပေးရသညျအထိခံစားနရေသော အတှဆေီ့ကိုအာရုံက ရောကျသှားပွနျသညျ။ ခငျသကျဘာသားနဲ့ထုထားတာမို့လို့လဲ…ခငျသကျခန်ဓာကိုယျအတှငျးမှသှေးသားတှဘေလောငျဆူလာသညျ။
ညိုမောငျ သူ့ခန်ဓာကိုယျကွှပွီးထလိုကျကာ သူလှတျပေးလိုကျသော နို့လေး တှကေိုအာသာမပွပေုံဖွငျ့ကွညျ့သညျ။ ခန်ဓာကိုယျကိုကွှပွီး ညိုမောငျထလိုကျတော့ ညိုမောငျ၏လီးတနျကွီးက ရှငျးရှငျးလငျးလငျးကွီးဖွဈသှားသညျ။ ခငျသကျအမိအရကွညျ့လိုကျရငျး မကျြတောငျလေးတှေ တဈဖတျြဖတျြခတျလိုကျကာ သူမ၏မကျြလုံးလေးတှကေခကျြခငျြးရီဝသှေားသညျ။ လီးကွီးကဒဈပွဲကွီး စောငျးကွီးကအသဲယားစရာကောငျးလောကျအောငျ ဖောငျး ထနပွေီး တငေါကျငေါကျဖွဈကာ လီးထိပျတှငျအရညျလေးတှစေို့နတောကို ထငျထငျရှားရှားမွငျလိုကျရသညျ။ ခငျသကျရငျထဲတှငျမှနျးကွပျ၍လာသညျ။ ပကျလကျလေးဖွဈနသေော ခငျသကျ၏တဈကိုယျလုံးကို ညိုမောငျခွဆေုံးခေါငျးဖြားကွညျ့သညျ။ နှဈဆယျကြျောအသကျနှငျ့ တဈသားမှမကြ သေးသော ခငျသကျ၏ကိုယျလုံးလေးက ဖှံ့ထှားကဈြလဈကာ စှဲမကျစရာကောငျးလှသညျ။ မူလရငျလြားထားသော ထဘီကခါးနားအထိပွကေနြပွေီး ထဘီအောကျနားစလေးကလညျး ဒူးဆဈတဈဖကျပျေါ တဈဖကျဖုံးဖွငျ့အသားလေးတှကေဝငျး၍နသေညျ။
ခငျသကျတဈကိုယျလုံးကို ညိုမောငျက တဈခကျြမြှကွညျ့လိုကျပွီးမှ ထဘီအောကျနားစလေးကို အပျေါသို့လှနျ တငျလိုကျသညျ။ ““အို….ဟဲ့…ညိုမောငျ….မလုပျနဲ့လေ….မတျောပါဘူး….”” အတှငျးအင်ျဂါကိုလစေိမျးတိုး၍ အေးကနဲဖွဈအသှားသတိဝငျလာသော ခငျသကျကတဈဆို့ဆို့အသံလေးဖွငျ့တားရှာသညျ။ လူကတော့ နရောမှမရှေ့။ ညိုမောငျ ခငျသကျကိုဂရုမစိုကျ လှဈဟပျေါပေါကျလာသော ခငျသကျ၏အတှငျးအင်ျဂါကိုကွညျ့သညျ။ ခငျသကျအမှေးသနျသညျ။ ဒါကွောငျ့ တဈလတဈခါရိတျပေးရသညျ။ အခုရိတျပွီးတာ နှဈရကျဘဲရှိသေးတော့ အမှေးငုတျတိုလေးတှကေစိမျးမွမွလေးထှကျ၍နသေညျ။ စောကျပတျနှုတျ ခမျးသားနှဈခုက ဘာလို့ဖောငျးစို၍ထကွှနသေညျမသိ ဖောငျးတငျး၍ထနသေညျ။ ညိုမောငျ သူမအပျေါသို့ခှ၍အတကျ ခငျသကျမကျြလုံးမှိတျခလြိုကျသညျ။ မောငျမငျးကွီးသားညိုမောငျက လူပျေါကိုခှတကျပွီးကာမှ စောကျပတျကိုလကျဖဝါးလှနျ၍ကိုငျကွညျ့လိုကျသညျ။
ခငျသကျတဈခကျြတှနျ့သှားသညျ။ သသေခြောခြာကိုငျပွီးပှတျလိုကျတော့ပါလား….ထိုသို့မဟုတျ စမျးကွညျ့ကိုငျတှယျရုံမြှသာ တဈခကျြကိုငျလိုကျပွီး သူ့လီးကိုအရငျးမှကိုငျကာတလေို့ကျသညျ။ ပွီးတော့တဈဆကျတညျးဆောငျ့သှငျးလိုကျသညျ။ ““ပွှတျ…ဖှတျ…ဟငျး…”” အထဲမှာကအရညျတှပွေညျ့လြှံနသေညျ။ တဈခကျြတညျးနှငျ့ လီးကတဈဆုံးဝငျသှားသညျ။ ခငျသကျဟငျးကနဲသကျပွငျးခကြာ ကွမျးပွငျနှငျ့တဈထှာလောကျကှာအောငျသာကွှထား သော သူမ၏ဒူးနှဈဖကျကိုဆှဲထောငျပဈလိုကျသညျ။ ညိုမောငျ ခငျသကျ၏မကျြနှာလေးကိုလှမျး၍နမျးရငျး သူမပျေါသို့မှောကျ၍ခကြာ ဖငျကွီးကွှကွှပွီးဆောငျ့သညျ။ ““ပွှတျ…ဖှတျ….ဖှတျ…ဟငျ့…ဟငျ့…ဟငျး…”” လူပြိုလို့မပွောရ ညိုမောငျ၏ဆောငျ့ခကျြတှကေ အရိုငျးဆနျလှသညျ။
ခငျသကျက အရိုငျးသကျသကျမဟုတျပါ။ ဆောငျ့ခငျြသလိုဆောငျ့၍နသေော ညိုမောငျ၏လီးတနျကွီးကို သူမလို သလို ဖငျကိုညာလိမျ့လိုကျ ဘယျလိမျ့လိုကျကွှ၍ ကော့ပေးလိုကျသဖွငျ့ သူမလိုသလိုလှညျ့ပွောငျးကာ အလိုးခံသညျ။ တဈခကျြတဈခကျြ သတိရလြှငျလညျး ညိုမောငျအရသာတှစေ့ေ ရနျ သဲကွီးမဲကွီးဆောငျ့ဝငျနသေော ညိုမောငျ၏လီးတနျကွီးကို စောကျပတျနှငျ့ညှဈ၍ပေးသညျ။ ဆှဲ၍ပေးသညျ။ ““ပွှတျ…ဖှတျ…ပလှတျ….ဖှတျ…..ဖှတျ…ဟငျ့…ဟငျ့…ဟငျး…”” ညိုမောငျက တရှုးရှုးအသကျရှုသံကွီးနှငျ့ အားရပါးရဆောငျ့နသေလို ခငျသကျခမြာမှာလညျး မကျြလုံးစုံမှိတျထားရငျးက ပါးစပျလေးဟဟပွီး ဟငျးကနဲ ဟငျးကနဲ အသကျရှု၍ ရှုံ့၍သှား သညျ။ ““ပွှတျ…ဖှတျ…ပလှတျ….ဖှတျ…..ဖှတျ…အငျး…ဟငျး…အ….အ…..အငျး…ညို…ညိုမောငျ….ဟငျး…..ဟငျး”” ခငျသကျဘယျလိုမှစိတျတငျးထား၍မရ၊ ညိုမောငျကိုယျကွီးကိုပွနျ၍ဖကျထားလိုကျမိသညျ။
ကာမအရသာက နှဈယောကျစလုံး၏ကိုယျနှဈခုစလုံးမှာဆူဝေ၍တကျလာသညျ။ ညိုမောငျ ကုနျးထ၍ ခငျသကျ၏နို့ကိုဆှဲစို့ရငျး ဆကျဆောငျ့သညျ။ ဒီတော့ခငျသကျက ညိုမောငျ၏လညျပငျးကို သိုငျး၍ဖကျသညျ။ ညိုမောငျ၏စိတျထဲအာရုံထဲတှငျ လေးငယျဆိုတာမရှိတော့သလို ခငျသကျ၏အာရုံထဲတှငျလညျး မွငျ့ဝဆေိုတာမရှိတော့ပေ။ နှဈယောကျစလုံး အရာအားလုံးကိုမေ့၍ ကာမအရသာတှငျနဈမှနျးနကွေသညျ။ ““ဖှတျ…..ပွတျ…ပွတျ…ပလှတျ….အဟငျး….အငျး….ဟငျးဟငျး….”” ညိုမောငျက ဒလစပျဆောငျ့လာသလိုအောကျမှ ခငျသကျကလညျး ဟငျးကနဲ ဟငျးကနဲ အားယူကာ ညိုမောငျ၏ဆောငျ့ခကျြအတိုငျးဖငျကွီးကိုကော့၍ကော့၍ပွနျဆောငျ့သညျ။ ““ပလှတျ…..ဖှတျ….ဗွဈ….ညို….မောငျ….အား….ထှကျ….ထှကျ….ပွီ…အား….အား…”” ခငျသကျတဈယောကျအတငျးကော့၍ လီးကွီးကိုဆှဲညှဈကာပွီးသှားခိုကျ ညိုမောငျမှာလညျး မအောငျ့နိုငျတော့ဘဲပနျးထုတျလိုကျပါလတေော့သညျ။ ခငျမောငျထှေးနှငျ့လေးငယျတို့၏ မင်ျဂလာဆောငျကပွီးသှားပွီ။ လေးငယျနှငျ့ထှေးနှယျတို့၏ ဖခငျမှာလညျးတာဝနျကရြာ ရယောဉျသို့ပွနျရသဖွငျ့ မိခငျဖွဈသူပါပွနျ၍လိုကျပါသှားသညျ။
အိမျမှာကထှေးနှယျတဈယောကျထဲကနျြခဲ့သညျ။ လေးငယျမှာ ယောငျနောကျဆံထုံးပါဆိုသောစကားအတိုငျး ခငျမောငျထှေးတို့အိမျတှငျပငျနသေညျ။ ဒီတော့ အိမျမှာထှေးနှယျ တဈယောကျထဲသာကနျြခဲ့သညျ။ ထှေးနှယျအတှကျ ညမှုညတာအဖျောရစရေနျ ဆှမြေိုးနီးစပျတျောသူ အဒျေါကွီးတဈယောကျကိုချေါထားသညျ။ ထိုအဒျေါကွီးက ညမိုးခြုပျသညျနှငျ့ အိပျတော့သညျ။ စောစောမအိပျတတျသူ ထှေးနှယျတဈယောကျမှာတော့ခြောငျလညျခြောငျပတျနှငျ့ကနျြခဲ့သညျ။ ထှေးနှယျအရငျညတှတေုံးကတော့ တီဗှီထိုငျကွညျ့ပွီး တီဗှီသိမျးမှအိပျ သညျ။ ဒီညတော့ ထှေးနှယျမှာတီဗှီကွညျ့ခငျြစိတျမရှိသဖွငျ့ တီဗှီကိုပိတျကာ အိပျခနျးထဲသို့ဝငျခဲ့သညျ။ နှရောသီညမို့ အိုကျစပျစပျရှိသညျနှငျ့ ထှေးနှယျကိုယျပျေါမှ ဘျောလီအကငြ်္ီကိုခှာပဈ လိုကျပွီး ထမီကိုရငျလြားလိုကျသညျ။
ပွီးမှထှေးနှယျမှာ ရငျလြားထားသောထမီကိုပွနျ၍ဖွညျလိုကျပွီး ထမီကိုခါးသို့ပတျ၍ဝတျလိုကျသညျ။ ထိုအခါ ဆူဖွိုးသောထှေးနှယျက သူမ၏နို့နှဈလုံးကိုငုံ့၍ကွညျ့ပွီး ရညျးစားဖွဈသူ ခငျမောငျထှေးကိုသတိရလိုကျသညျ။ တဈခြိနျက ခငျမောငျထှေးမှတျမှတျရရကိုငျ၍ အငမျးမရစို့ခဲ့သော နို့လေးနှဈလုံး အခုတော့သခငျမဲ့နပွေီ။ ကိုငျမညျ့ စို့မညျ့သူမရှိ။ အဖျောမဲ့လြှကျ အထီးကနျြခဲ့ရပွီ။ ထှေးနှယျ သူမ၏နို့သီးခေါငျးနှဈခုအား သူမဘာသာဖဈြညှဈကွညျ့လိုကျပွီးမှ ပေါငျလေးကိုကှ၍အဖုတျလေးကို သူမလကျလေးဖွငျ့ထမီပျေါမှပငျအုပျ၍ ကိုငျကွညျ့လိုကျ ပွနျသညျ။ တဈခြိနျက သူမ၏ရညျးစား ခငျမောငျထှေးအားရပါးရလိုးခဲ့သော အဖုတျလေးခုတော့ လုပျမညျ့သူမရှိ အဖျောမဲ့ သခငျမဲ့လြှကျရှိသညျ။ ထှေးနှယျ သူမ၏အဖုတျလေးကို ထဘီပျေါမှပငျလကျဖဝါးဖွငျ့အုပျ၍ကိုငျကာ ဖဈြညှဈဆုပျနယျလိုကျပွီးခပျကွမျးကွမျးလေး နှဈခကျြသုံးခကျြပှတျပဈလိုကျသညျ။ ရညျးစားဖွဈသူ ခငျမောငျထှေးကို သတိရခွငျးနှငျ့အတူ ခန်ဓာကိုယျရှိကာမခလုတျမြားကို ကိုငျမိပှတျမိလုပျမိလိုကျတော့ ထှေးနှယျ၏သှေးသားတှကေ လှုပျရှား၍လာသညျ။
“ဟငျ” ကနဲ ထှေးနှယျ သကျပွငျးခကြာ ခါးတှငျပတျထားသော ထဘီလေးကိုဖွညျကာဆှဲတငျလိုကျပွီးပွနျ၍ ရငျလြားလိုကျသညျ။ ““ဖြောကျ…..ခြှတျ….ခြှတျ…”” ““ဟငျ”” ထှေးနှယျရငျထဲထိတျကာ မကျြလုံးလေးမြားဝိုငျးသှားသညျ။ ထှေးနှယျ၏အိပျခနျးအပွငျဖကျခွံထဲမှသဈကိုငျးခွောကျကို လူနငျးသညျ့အသံမှနျး ထှေးနှယျကောငျးကောငျးသိလိုကျသညျ။ အသာလေးခွဖေော့နငျးကာ ထှေးနှယျအိမျနံရံဘေးသို့ကပျလိုကျပွီး ပဉျြပွားအကှဲကွောငျးမှ အပွငျသို့ကွညျ့လိုကျသညျ။ ““ဟငျ….ကြျောကြျောပါလား…”” ထှေးနှယျတို့အိမျ၏နောကျဖေးအိမျမှ အသကျ(၁၈) (၁၉)သာရှိသော ကြျောကြျောဆိုတဲ့ကောငျလေး အိမျဘေးတှငျငုတျတုတျလေးထိုငျ၍နသေညျ။ ညနကေ ထှေးနှယျအိမျဘေးတှငျ ရခြေိုးနစေဉျက ကြျောကြျောက သူမကိုခွုံအကှယျမှထိုငျ၍ခြောငျးနတောကို ထှေးနှယျသတိထားလိုကျမိသညျ။
အခုလညျးကြျောကြျောက သူမကိုလာပွီးခြောငျးတာဖွဈမညျ။ ထှေးနှယျစိတျကူးတဈမြိုးရသှားသညျ။ ““ဟာ….အိုကျလိုကျတာ…”” ““ဂလြောကျ…..ဂလြောကျ…”” ထှေးနှယျ ပွူတငျးပေါကျကို ဖှငျ့ပဈလိုကျသညျ။ ပွီးတော့ ပွူတငျးပေါကျမှာပငျရပျ၍ ရငျလြားထားသောထဘီကိုဖွညျလိုကျပွီး စောစောကလိုပငျ သူမ၏နို့အုံနှဈလုံးကိုထုတျ၍ ငုံ့ကွညျ့ သညျ။ စောစောကထကျ နဲနဲပိုကွာသညျ။ ထို့နောကျတှငျထှေးနှယျပွူတငျးပေါကျကိုပွနျ၍ မပိတျဘဲကုတငျပျေါတကျ၍လှဲကာ ပွူတငျးပေါကျဘကျကို ကြောပေး၍ တဈစောငျးလေးလှဲ၍ အသာမကျြလုံးလေးမှိတျကာအသကျကို မှနျမှနျရှုရငျး ငွိမျနလေိုကျသညျ။
ဆယျ့ငါးမိနဈ၊ မိနဈနှဈဆယျလောကျအကွာမှာတော့ အိမျကတဈခကျြငွိမျ့ကနဲ သိမျ့ကနဲဖွဈသှားသညျ။ သိသာရုံလေးသာ ထှေးနှယျကမကျြလုံးမှိတျ၍ ငွိမျကာသတိထားနသေဖွငျ့သိလိုကျရခွငျးဖွဈသညျ။ ထှေးနှယျတို့အိမျ၏ပွူတငျးပေါကျအောကျဖကျဘောငျက မွပွေငျမှလေးပခေနျ့သာမွငျ့သညျ။ သံဇကာတှေ သဈသားတနျးတှကောထား ခွငျးမရှိသဖွငျ့ ပွူတငျးပေါကျဘောငျကို ခို၍ဆှဲတကျပါက အသာလေးတကျလို့ရပပွေီ။ ကြျောကြျောဆိုသောကောငျလေး အခနျးထဲသို့ရောကျပွီဆိုသညျကို ထှေးနှယျသိလိုကျပွီ…။ မကွာလိုကျ ပွူတငျးပေါကျဖကျကို ကြောပေး၍စောငျးအိပျနသေော ထှေးနှယျ၏တငျသားကွီးနောကျဖကျသို့ အေးစကျသောအရာလေးတဈခုက လာ၍ထိသညျ။ ကောငျလေးကွောကျနေ ထငျသညျ။ လကျဖြားလေးတှအေေးနသေညျဟု ထှေးနှယျအသကျမှနျမှနျရှုကာမကျြလုံးမှိတျ၍ အိပျခငျြယောငျဆောငျနရေငျးတှေးမိလိုကျသညျ။
ထှေးနှယျ ငွိမျခကျြသားကောငျးနတေော့ ကြျောကြျောဆိုသောကောငျလေးပို၍ရဲလာပုံရသညျ။ ထှေးနှယျ၏တငျသားကွီးတှကေို သူ့လကျလေးဖွငျ့မထိတထိလေးပှတျကွညျ့သညျ။ လကျဖဝါးလေးဖွငျ့ အိအိဖောငျးဖောငျးတငျသား ကွီးတှကေို အသာလေးဖိဖိကွညျ့သညျ။ စိတျထဲမှာမရိုးမရှဖွဈလာပမေယျ့ ထှေးနှယျမလှုပျရဲ အသာလေးဆကျပွီးငွိမျနသေညျ။ ဒီတော…ကြျောကြျောပို၍ရဲလာသညျ။ ထှေးနှယျ၏တငျ သားကွီးတှကေို သိသိသာသာကွီးကိုငျတှယျကာ ဆုပျနယျလာသညျ။ ထှေးနှယျဆကျပွီး ငွိမျနလေို့မဖွဈတော့။ အိပျခငျြယောငျဆောငျနမှေနျးသိသှားရငျ ကောငျလေးထှကျပွေးသှားလိမျ့ မညျ။ ထှေးနှယျမကျြလုံးကို ဖွတျကနဲဖှငျ့ကာ လကျတဈဖကျက ကြျောကြျော၏လကျကိုလှမျးဆှဲလိုကျပွီး ကနျြလကျတဈဖကျက သူမ၏ရငျလြားထားသော ထမီကိုရငျဘတျမှဆှဲခြှတျလိုကျကာ တဈပါတညျး ပကျလကျလှနျလိုကျသညျ။
““မမထှေး….ကြှနျနျော…..ဟို…..ဟို….”” ကြျောကြျောက ကွောကျအားလနျ့အားပွောနပေမေယျ့ သူ့မကျြလုံးတှကေ ထှေးနှယျ၏နို့တှကေိုစူးစူးဝါးဝါးကွညျ့နသေညျ။ ကောငျလေးလကျကိုကိုငျထားသော ထှေးနှယျ၏လကျကမ လှတျ…..ကနျြလကျတဈဖကျနှငျ့ ကြျောကြျော၏ပါးစပျကိုလှမျးပိတျလိုကျသညျ။ ကြျောကြျောအထဈထဈအငေါ့ငေါ့စကားသံရပျသှားပွီး ထှေးနှယျ၏မကျြနှာကိုလှမျးကွညျ့သညျ။ ရီဝသေောမကျြလုံးအစုံဖွငျ့ သူ့မကျြနှာကိုကွညျ့နသေော ထှေးနှယျ၏မကျြနှာလေးက သူ့ကိုပွုံးပွလိုကျတာကိုတှလေို့ကျရသညျ။ တဈဆကျတညျးမှာပငျ ထှေးနှယျကကြျောကြျော၏ လကျတဈဖကျကိုပါ လှမျးကိုငျကာ သူမဖကျကိုဆှဲယူလိုကျတော့ ရငေတျတုနျးရတှေငျးထဲဆငျးခငျြနသေညျ့ ကြျောကြျောမှာသူမအပျေါသို့မှောကျလြှကျသားကလြာပွီး ခကျြခွငျးပငျကုတငျ ဘေးတှငျရှိနသေေးသညျ့ သူ၏ခွထေောကျနှဈခြောငျးကိုပါ ကုတငျပျေါဆှဲတငျလိုကျပွီး ထှေးနှယျကိုအငမျးမရဖကျကာ ထှေးနှယျ၏ပါးပွငျနှဈဖကျကို ဒလစပျနမျးလိုကျရာမှ သူမ၏ရငျ ဘတျပျေါသို့ ကြျောကြျော၏မကျြနှာကမှောကျကသြှားသညျ။
ကလေးတဈယောကျနို့စို့သလို ထှေးနှယျ၏နို့သီးခေါငျးလေးတှကေို ကြျောကြျောက တပွှတျပွှတျစို့သညျ။ ထှေးနှယျ သူ့ကြောပွငျကို သိုငျးဖကျလိုကျပွီး ရငျဘတျလေးကိုကွှကာကွှကာ ဖွငျ့ နို့အစုံကို ကြျောကြျော၏မကျြနှာသို့ ကပျကပျပေးသညျ။ ဘေးကနေ သူမပျေါမှောကျထားသညျ့ ကြျောကြျော၏ကိုယျနှငျ့ပိနသေော ထှေးနှယျ၏လကျတဈဖကျက တရှရှလှုပျရှား၍လာ သညျ။ ကြျောကြျော၏ပေါငျကွားကိုစမျး၍ပငျ့ကိုငျသညျ။ ““ဟယျ…အယျ..နဲတာကွီးမဟုတျဘူး…လူကသာငယျတာ….ပစ်စညျးကွီးက ခငျမောငျထှေးလောကျကိုရှိသညျ…”” ကြျောကြျောကတော့ နို့စို့တာမဝနိုငျသေး။ နို့နှဈလုံးကို တဈလုံးပွီးတဈလုံး ဘယျပွနျညာပွနျစို့နသေညျ။ ထှေးနှယျ၏လကျက သူ့ပုဆိုးခါးပုံစကို အသာစမျးပွီးဖွုတျလိုကျရာက ပုဆိုးကွား သို့တိုး၍ဝငျသှားကာ လီးတနျကွီးကိုမိမိရရဆုပျကိုငျလိုကျသညျ။ ပူနှေးမာကြောလှသော လီးခြောငျးကွီးအတှကေ့ ထှေးနှယျစအိုလေးကို ရှုံ့သှငျးမိသညျအထိပငျဖွဈသှားရသညျ။ ထှေးနှယျ ကြျောကြျော၏လီးတနျကွီးကို အသာလေးပှတျပေးကာ ဖှဖှလေးကိုငျ၍ဂှငျးတိုကျပေးသညျ။
ပွီးတော့ ဥကွီးတှကေိုလညျးစမျးပွီး ဖှဖှလေးဆုပျနယျပေးသညျ။ ကောငျလေးက လညျးအလာကွီး ထှေးနှယျ၏နို့တှကေိုမပွတျတမျးစို့နရေငျး သူ့လကျတဈဖကျက ထှေးနှယျ၏ပေါငျကွားကိုစမျးလိုကျသညျ။ ထှေးနှယျပေါငျနှဈလုံးကိုဖွဲပေးလိုကျသညျ။ ထှေးနှယျ၏စောကျ မှေးလေးတှကေို ဖှဖှလေးပှတျလိုကျ အသာလေးဆှဲလိုကျဖွငျ့လုပျနသေညျ။ ထှေးနှယျအသဲယားလာပွီး သူမလကျထဲမှကြျောကြျော၏လီးကွီးကို ခပျသှကျသှကျလေးဂှငျးတိုကျပေးလိုကျ သညျ။ ကြျောကြျော၏လကျက ထှေးနှယျ၏စောကျဖုတျကိုရှရှလေးပှတျပွနျသညျ။ ““အို…..အဟငျ့…ဟငျ့…”” ထှေးနှယျ တဈကိုယျလုံးတုနျသှားသညျ။ ဟုတျတယျလေ……။ ကြျောကြျောတဈယောကျ စောကျဖုတျကိုမပှတျတတျပှတျတတျနှငျ့ လကျဖဝါးနဲ့ဖိပွီး ပှတျလိုကျတော့ သူ့လကျဖဝါးက ပွူးထှကျနသေောစောကျစလေ့ေးကိုပှတျလှညျ့လိုကျသလိုဖွဈသှားသညျ။ ထှေးနှယျငွီးသံလေးထှကျကာ အသားလေးတုနျသှားတာကိုမွငျလိုကျရပွီး သူပှတျတာဟုတျပွီလို့ သတျမှတျကာ ထိုအတိုငျးထပျ၍ပှတျပွနျသညျ။ ““အို….အို….ဟငျ့…အို…”” ““ကြျော….ကြျော…ဘယျနဲ့လုပျနတောလဲ….မမ မနတေတျတော့ဘူ…ထတော့….”” ကြျောကြျောလညျးမနနေိုငျတော့ပါ။ ထှေးနှယျလကျထဲက သူ၏လီးကွီးက အဆမတနျကွီးကာ တငေါကျငေါကျဖွဈနပွေီ။
ကြျောကြျောထထိုငျလိုကျပွီး သူ့ပုဆိုးကိုခေါငျးမှနကြေျော၍ ခြှတျလိုကျကာ သူ့ကိုယျကိုထှေးနှယျ၏ခွရေငျးဖကျသို့အရှေ့ ထှေးနှယျကပေါငျနှဈခြောငျးကိုဆှဲ၍ထောငျကာကားလိုကျပွီး ဒူးနှဈဖကျကိုသူမဝမျးဗိုကျပျေါသို့ ရောကျအောငျကှေးတငျပဈ လိုကျသညျ။ ကြျောကြျောကွညျ့နတေုနျး စောကျပတျနှုတျခမျးသားအထူအပါးကွီးနှဈခုက ပထမတော့တကျလာပွီးနောကျ စောကျစအေ့ောကျဖကျအကှဲကွောငျးနရောလေးဘေးနှဈဖကျ သို့ဆှဲတငျလိုကျသလိုပွဲသှားသညျ။ တှငျးပေါကျလေးတော့ ပျေါမလာပါ။ ဒါပမေယျ့ အဲ့ဒီနရောလေးကို သူ့လီးထိပျကွီးတလေို့ကျပွီး ကြျောကြျောဖိသှငျးလိုကျသညျ။ ““ဗွဈ….ပွှတျ…ပွှတျ…အိုး….အို….အား….အား…”” ဖိသှငျးလိုကျသောလီးကို ကြျောကြျောကအရှိနျမထိမျးနိုငျ လီးကတဈခါတညျးအဆုံးဝငျသှားသညျ။ ထှေးနှယျ၏ကြောလေးကော့တကျသှားပွီး မကျြနှာလေးရှုံ့ကာသှား၏။
လနျ့ပွီးဗွုံးက နဲတဈဆုံးဝငျသှားသော လီးကိုညှဈလိုကျမိတော့ ကြျောကြျောတနျ့ကနဲဖွဈသှားပွီးအတငျးနငျးဆောငျ့တော့သညျ။ ““ပွှတျ….ဖှတျ….ဖှတျ…ပလှတျ….ဗွဈ….ပွှတျ….”” ““အငျး….ဟငျး…..အိုး…အိုး….အဟငျး….”” မထူးတော့ပွီ သူဆောငျ့ခငျြသလိုသာဆောငျ့စတေော့ ထှေးနှယျကအောကျကကော့ကော့ပေးပွီး သူမစိတျတှကေိုလှတျထားပေးလိုကျသညျ။သူမ၏ကိုယျဘေးတှငျ ထောကျထားသော ကြျောကြျော၏လကျတဈဖကျကိုဆှဲယူပွီး နို့ပျေါတငျပေးလိုကျသညျ။ သဘောပေါကျသှားသော ကြျောကြျောကနို့နှဈလုံးကိုစုံကိုငျ၍ ဆကျဆောငျ့သညျ။““ပွှတျ…..ပလှတျ…ဖှတျ…..ဖှတျ…အိုး….အိုး….အ….အ…..ကြျော…..အီး…ဟငျး….”” ထှေးနှယျခေါငျးလေးကွှတကျလာပွီး တဈကိုယျလုံးတောငျ့သှားခိုကျ ကြျောကြျော၏လီးထိပျမှလညျး သုတျရညျမြားပနျးထှကျကာ နှဈယောကျသားပွိုငျတူပွီးသှားကွလသေညျ။
အသက်အစိတ်မှာ ပုခက်မချိတ်ရရင် တစ်သက်မနိတ်ဘူးဆိုတဲ့စကားရှိပေမယ့် ညိုမောင်အဖို့ကတော့ အသက်(၂၆)နှစ်ရောက်မှ ရှားရှားပါးပါးရည်းစားလေးတစ်ယောက်ရခဲ့ရသည်။ ရမဲ့ရတော့လည်း ညိုမောင်ရည်းစား လေးငယ်က ညိုမောင်ထက်အသက်(၇)နှစ်လောက်ငယ်သည်။ လေးငယ်အသက်က ခုမှ (၁၉)နှစ်သာရှိသေးသည်။ အသက်ကြီးမှရည်းစားလေး(၁) ယောက်ရတော့ ညိုမောင်မှာမထိရက်မကိုင်ရက် ထိလိုက်လျှင် နွမ်းကြေတော့မလားထင်နေသည်။ ပန်းလေးတစ်ပွင့်ကို ထိုင်၍အလှကြည့်နေသလိုထားသည်။ ဒါပေမယ့် လေးငယ်က ခေတ်ကာလသမီးပျိုဘဲ ညိုမောင်ထက်ရဲသည်၊ သွက်သည်။ ရည်းစားဘဝပီပြင်အောင် ညိုမောင်အားလမ်းပြခေါင်းဆောင်ပေးသည်။ ဘာလိုလိုနဲ့ ညိုမောင်နှင့်လေးငယ်ကြိုက်ကြတာ (၆)လကျော်လာခဲ့ပြီ။ တစ်နေ့မှာတော့ ညိုမောင်တစ်ယောက်အိမ်မှာတစ်ယောက်ထဲရှိသည်နှင့် ပျင်းပျင်းနှင့်အိပ်ပျော်နေတုန်း လေးငယ်တစ်ယောက် ဘယ်ကဘယ်လိုရောက်လာ သည်မသိ။ညိုမောင်၏အိပ်ခန်းထဲထိရောက်၍လာသည်။ ပက်လက်အိပ်နေသော ညိုမောင်၏ရင်ဘတ်ပေါ်သို့လေးငယ်ကပါးလေးအပ်ပြီး မှောက်အိပ်လိုက်သည်။
နုညက်သောအထိအတွေ့နှင့်မွှေးပျံ့သောရနံ့တွေကြောင့် ညိုမောင်နိုးလာပြီး မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်မိသည်။ ““ဟင်……လေးငယ်…”” ညိုမောင်အံ့သြသွားသည်။ ““အစ်ကိုနိုးလာပြီလား…”” ““အင်း….လာ အိမ်ရှေ့သွားရအောင်….”” ညိုမောင်က ထထိုင်ရန်ပြင်လိုက်သည်။ လေးငယ်က ညိုမောင်၏ရင်ဘတ်ပေါ်မှောက်ချထားသော သူမ၏ကိုယ်လုံးကို မ ထသည့်အပြင် ပို၍ဖိချလိုက်သည်။ ဒီလိုအနေအထားမှ ဘယ်သွေးဘယ်သားတွေက ခံနိုင်ရည်ရှိနိုင်ပါ့မလဲ……။ ပြောမရသည့်အဆုံး ညိုမောင်ကနားမလည်နိုင်စွာနှင့်လေးငယ်၏မျက်နှာလေးကို စိုက်ကြည့်ရင်း သူ့စိတ်တွေကလှုပ်ရှား၍လာ သည်။ ညိုမောင် သူ့ခေါင်းကိုကြွ၍ လေးငယ်ပါးလေးတစ်ဖက်ကိုနမ်းရှုံ့လိုက်သည်။ လေးငယ်မျက်လုံးလေးမှိတ်ကျသွားပြီး မျက်နှာလေးကပြုံးသွားသည်။ အရှိန်ပြင်းစွာလှုပ်ရှားနေသော ညိုမောင်၏ရင်ခုန်သံတွေကို လေးငယ်ကြားနေရသည်။ မိန်းမသားဆိုတာက အိနြေ္ဒကောင်းလွန်း၍သာ သူတို့ကိုအကဲမခတ်နိုင်ရှိရမည်။ သူတို့ကယောင်္ကျားတွေထက်ပိုပြီးခံစားချက်ပြင်း ပြ၍ စိတ်လှုပ်ရှားမှုပြင်းထန်သည်။
လေးငယ်၏လက်လေးတစ်ဖက်က ညိုမောင်၏ရင်ဘတ်ပေါ်ကို ယုယုယယလေးပွတ်သပ်ပေးရင်းမှ ညိုမောင်၏ဝမ်းဗိုက်ပေါ်ရောက်သွားရာမှ ဆီးခုံပေါ်သို့ထိပွတ်နေမိသည်။ ““လေးငယ်ထတော့ကွယ်…..တော်ကြာမှားကုန်ကြလိမ့်မယ်….”” ““တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ချစ်ကြတာ မှားတာလားဟင် အစ်ကို….”” အသံလေးများက လှိုင်းထပုတ်ခတ်နေသည်။ ညိုမောင်ဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိတော့ပေ။ လေးငယ်မကြားအောင်သက်ပြင်းတစ်ချက်ခိုး၍ချရင်း ညိုမောင်၏လက်အစုံက နွေးထွေးအိစက် နေသော လေးငယ်၏ကိုယ်လုံးလေးကို ရစ်ပတ်ပွေ့ပိုက်လိုက်သည်။ လေးငယ်၏ရင်ထဲတွင် ဝေဟင်ထဲလွင့်မျောသွားသလိုခံစားလိုက်ရသည်။ ညိုမောင်၏လက်တစ်ဖက်က လေးငယ်၏ တင်သားလုံးလုံးလေးကို ဆုပ်ကိုင်ပွတ်သပ်ပေးရင်းဆုပ်နယ်သည်။ ““ချစ်တယ်….လေးရယ်”” ညိုမောင်၏အသံက အစ်တစ်တစ် တစ်ဆို့ဆို့ကြီး….. ““လေးလဲ….အစ်ကို့ကို သိပ်ချစ်တာပဲ သိလား…….”” ကာမအမှောင်ထုသည် တစ်ဖြေးဖြေးမှုံရီနက်ရှိုင်း၍လာသည်။ ညိုမောင်ရင်ဘတ်ပေါ်သို့ လေးငယ်လှိမ့်တက်လိုက်သည်။ တစ်ယောက်မျက်နှာကို တစ်ယောက်စေ့စေ့မကြည့်ရဲကြပေ။ ညိုမောင် ပေါင်နှစ်ဖက်ကိုဘေးသို့ကားလိုက်သည်။ မာကျောကျော အချောင်းတစ်ခုက လေးငယ်၏စောက်ပတ်လေးကို ထောက်မိသွားသည်။
လေးငယ်၏အသားလေးတွေတဆတ်ဆတ် တုန်လာသည်။ ““အစ်ကို…”” ““ဘာလဲ…..လေး…”” ““လေးငယ် ရှက်တယ်ကွယ်….”” လေးငယ်ကညိုမောင်နားဝသို့ တိုးတိတ်ညင်သာစွာလေးဆိုသည်။ ညိုမောင်လက်များကတရွရွလှုပ်ရှား၍လာသည်။ လေးငယ်၏ထဘီအောက်စလေး လန်တက်သွားသည်။ ““အစ်ကို….လေးငယ် ရှက်ပါတယ်ဆို…”” ညိုမောင်ထံမှ တုန့်ပြန်စကားသံထွက်ပေါ်၍မလာပေ။ သူ၏အပေါ်မှာ မှောက်လျက်သားလေးဖြစ်ကာ ထဘီအောက်စလေးလှန်တင်နေ၍ ဖင်ပြောင်ပြောင်လေးဖြစ်နေသောလေးငယ် ကိုအသာပွေ့ဖက်၍ ဘေးသို့လှဲချလိုက်ရာက ညိုမောင်ကအပေါ်စီးမှဖက်လျှက်သား နေရာယူလိုက်သည်။ လေးငယ်၏ဒူးလေးကခပ်ကားကားလေး ထောင်ထားမိရာ ပေါင်လေးနှစ်ဖက် ကအလိုအလျှောက်ကားထားသည့်နှယ် အသင့်အနေအထားသို့ရောက်၍နေသည်။ ညိုမောင်၏အသက်ရှုသံတွေက စည်းချက်မကျတော့ဘဲ ဗရမ်းပတာဖြစ်ကာပြင်းထန်၍လာသည်။ အလားတူ လေးငယ်၏ထွက်သက်လေသံများကလည်းမူမမှန်တော့ပေ။ ညိုမောင်က သူနှင့်လေးငယ်တို့ကြားသို့ လက်ကိုလျှိုသွင်းပြီး လေးငယ်၏စောက်ဖုတ်လေးကိုစမ်းသည်။
““ဟင့်အင်း…..မကိုင်နဲ့ကွာ…..အို…”” ညိုမောင်၏ လီးကအစွမ်းကုန်မတ်တောင်၍နေသည်။ လီးကိုလက်တစ်ဖက်ဖြင့်ကိုင်ပြီး လေးငယ်၏စောက်ပတ်လေးထဲသို့တေ့သွင်းသည်။ လီးနှင့်စောက်ပတ်အတွေ့က စိုစွတ်နွေးထွေး ၍နေသည်။ တစ်ကိုယ်လုံးရှိသွေးသားများဆူပွက်ကာ နှစ်ယောက်စလုံးဆောက်တည်ရာမရကြချေ။ ““ပြွတ်….အား….ဟင့်…အဟင့်…..မဝင်ဘူး…..”” လီးကဘေးသို့ချော်ထိုးမိသည်။ လေးငယ်က လွှတ်ခနဲပါးစပ်ကထွက်သွားသည်။ ““မဝင်သေးဘူးလား………….ဟင်…..လေး….”” ““ဟင့်အင်း….”” လေးငယ် ညိုမောင်မျက်နှာကို မကြည့်ပဲ အသားတွေတဆတ်ဆတ်တုန်နေသည်။ ““ကိုင်သွင်းပေးပါလား….ဟင်..”” ““ဟာ….ကျွတ်….ဒုက္ခဘဲ….မကိုင်ရဲဘူး….အဟင့်….”” ခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုက ပူးကပ်တွန့်လိမ်နေသဖြင့် လိုရာမရောက်ဘဲ နှောင့်နှေး၍နေသည်။
ညိုမောင်က လေးငယ်၏ပါးပြင်နုနုဖွေးဖွေးလေးကို ညင်သာစွာနမ်းပြီး သူမ၏လည်တိုင်ဖွေးဖွေး လေးကို ယုယစွာပွတ်သပ်နမ်းရှုံ့ပြီး သူ့ကိုယ်ကြီးကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖက်ထားသော လေးငယ်၏လက်ထဲမှရုန်း၍ ကိုယ်ခြင်းခွာကာ သူ့ကိုယ်ကိုကြွပြီး သူ့လီးကြီးကို အသာအယာလေး ဖိသွင်းချလိုက်ပြန်သည်။ ““ပြွတ်….အမလေး…အစ်ကိုရယ်….”” သည်တစ်ခါတော့ လီးကလေးငယ်၏စောက်ပတ်လေးထဲသို့ တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီးဝင်သွားသည်။ ခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုလုံး တုန်ခါလှုပ်ရမ်းသွားသည်။ ““ပြွတ်…ပြွတ်….စွတ်…..စွတ်……ပြွတ်….”” ညိုမောင်၏အလိုးအညှောင့် လေးငယ်၏အလူးအလူးအလိမ့်လိမ့် အကော့လေးတွေ ဗြောင်းဆန်သွားသည်။
လှပနုနယ်သော လေးငယ်၏ခန္ဓာကိုယ်လေးမှာ ဘယ်လူးညာလိမ့်ဖြင့် ဖြစ်နေသည်။ ညိုမောင်၏လီးကြီးကလည်း မှန်မှန်ကြီးဆောင့်သွင်းနေသည်။ ““ပြွတ်….ဖွတ်….စွပ်…စွပ်…..ပြွတ်…ပြွတ်….”” အမွှေးပါးပါးလေးအုပ်လွှမ်းနေသော လေးငယ်၏စောက်ပတ်ကို ညိုမောင်ငုံ့၍ကြည့်သည်။ မဲမှောင်နေသော သူ၏လီးမွှေးကြီးများက ဖြူလွှနူးညံ့နေသောလေးငယ်၏စောက်ဖုတ်အုံလေး ကို ပွတ်သပ်မိလေတိုင်း လေးငယ်မှာကော့ပျံလူးလိမ့်သွားရသည်။ လီးကြီးဆွဲနှုတ်လိုက်တိုင်း ရဲကနဲ ရဲကနဲ အပြင်သို့ပြူးထွက်လာသောလေးငယ်၏ စောက်ခေါင်းအတွင်းသားလေးများမှာ အရည်များဖြင့် ရွှဲနစ်ကာနူးအိ၍နေသည်။ သူ့တစ်သက်မိန်းမတစ်ယောက်၏ စောက်ပတ်ကို နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ တွေ့မြင်လိုက်ရချိန်မှာပင် တစ်ပါတည်းလိုးဖူးလိုက်ရသည်။ မှန်မှန်ဆောင့်လိုးနေသည့်အရသာဒဏ်ကိုခံရင်းလူးလိမ့်၍ တစ်လောကလုံးကိုမေ့နေသော လေးငယ်၏ကိုယ်ပေါ်မှရင်စေ့အင်္ကျီလေး၏ကြယ်သီးများကို အဆောင့်မပျက်ညိုမောင်ဖြုတ် ပစ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့အောက်မှဘော်လီပန်းရောင်လေးကို အပေါ်သို့လှန်၍တင်လိုက်သည်။
အဲ့ဒီနောက်တော့ ညိုမောင်၏လက်တစ်ဖက်က လေးငယ်၏နို့နှစ်လုံးကိုဆုပ်ကိုင်ညှစ်နယ် ပေးလိုက်ရာ လေးငယ်ခမျာအလူးလူးအလိမ့်လိမ့်ဖြင့်ရင်ဘတ်လေးကော့ကော့တက်သွားရသည်။ ““ပြွတ်…..ပြွတ်…..စွပ်…..ပလွပ်….စွပ်…ပြွတ်….ပြွတ်”” ““အစ်ကို….အ…အင့်…..အင့်….အင့်…အ…အား…”” အင်္ဂါစပ်နှစ်ခုကြားမှ ယိုစိမ့်ကျလာသောချွဲပြစ်ပြစ်အရည်လေးများက လျှံကျလာပြီးအသံလေးတွေကပို၍ကျယ်လာသည်။ ““ရှီး…အား….အဟင်း….တစ်မျိုးကြီးဘဲ….ဟင်း…ဟင်း….”” ““နာရင်ပြောနော်….လေး..”” ““အင်…လေးငယ်..မပြောတတ်ဖူး….အင်း…ဟင်းးးးး”” ““လေး…လေးငယ်…..အား….ဟ”” နောက်ဆုံးဆောင့်ချက်နှင့်အတူ ညိုမောင်က လေးငယ်၏ရင်ဘတ်ပေါ်သို့မှောက်ချ၍ လေးငယ်၏ကိုယ်လေးကိုသိမ်းကြုံး၍ဖက်လိုက်ခိုက် လေးငယ်ကလည်းကမန်းကတမ်းပြန်ဖက်ရင်း ခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုမှာ ဗရမ်းဗတာတုန်ခါသွားရလေတော့သည်။
ကျွဲကောသီးအမွှာနှစ်ခုလိုတင်းပြောင်နေသော နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုက သာမာန်အနေအထားထက်ပိုပြီး ဖောင်းမို့နေတာသိသာ လှသည်။ ခံစားရတာလဲအသားတွေကတင်းနေပြီးနာနေသည်။ မခံမရပ်နိုင်အောင်နာကျင်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ပေမယ့် နေရထိုင်ရတာခက်လှသည်။ လေးငယ်ဘာလုပ်ရမည်မှန်းမသိ………. တစ်သက်နှင့်တစ်ကိုယ်ဒီတစ်ခါဘဲ ဒီနေရာမှဒီလိုဖြစ်ဖူးသည်။ အစ်ကိုညိုမောင်လေ….လူပျိုသိုးကြီး မနေ့ကနေ့ခင်းက လေးငယ်ကိုနဲနဲလေးတောင်အနားမပေးဘဲ သုံးချီဖြုတ်လိုက်သည်။ လီးဆိုတာ ဘာမှန်းမသိသေးသော မျက်နှာစိမ်းစောက်ပတ်လေးက သူ့အားသူ့အင်နှင့်မမျှလောက်အောင် တာဝန်တွေထမ်းဆောင်လိုက်ရသည်။ ဒီတော့ခုလိုယောင်ယမ်းလာရတာ ဘာမှမဆန်းလှပေ။ ဒါကလဲ လေးငယ်ကြောင့်ဘဲမဟုတ်လား……..သူ့ဘာသာအိပ်ပျော်နေတဲ့ ညိုမောင်ကိုလေးငယ်ဘဲ မိန်းကလေးတန်မဲ့ မနေနိုင်မထိုင်နိုင်သွားပြီး နူးခဲ့တာမဟုတ် လား……။
ညကတော့သိပ်ပြီးမသိသာလှ အရှိန်ကမသေသေးဘဲကို…စောက်ပတ်လေးနာနေတာကို “အစ်ကိုလိုးခဲ့တဲ့စောက်ပတ်လေးဆိုပြီး ဒီနေရာလေးကို အစ်ကိုမက်မက်မောမော လိုးခဲ့တာပဲဆိုပြီး” ဖီးလ်လေးနဲ့ယှဉ်ပြီး နာနေတာလေးကိုခံစားကာကြည်နူးနေတော့ ဝေဒနာတစ်ရပ်ရယ်လို့မခံစားမိသေးပေ။ အခုမိုးလင်းတော့မှ သူ့ဟာလေးသူကြည့်ပြီး လေးငယ်ဘာ လုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေသည်။ တစ်ခါမှမကြုံဖူးတော့လဲ ဘာတွေထပ်ပြီး တိုးပြီးဖြစ်လာအုံးမလဲဟုတွေးပြီး ထိတ်လန့်မိပြန်၏။ ဆေးခန်းသွားပြဖို့တော့ ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ပါ။ အတော်အတန်စဉ်းစားလိုက်တော့မှ နည်းလမ်းလေးတစ်ခုကို ဝေဝေဝါးဝါးလေးသိလိုက်ရသည်။ အိမ်တွင် မိဂသီဒဏ်ကြေလိမ်းဆေး ရှိသည်။ ခြေထောက်တွေလက်တွေ တစ်ခြားကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေထိခိုက်မိ၍ နာကျင်ယောင်ယမ်းလျှင်တော့ မိဂသီလိမ်းလျှင်ပျောက်သွားသည်။ လေးငယ်ဘာမှ သိပ်ပြီးမစဉ်းစား တော့ဘဲ အစ်မဖြစ်သူ ထွေးနွယ်၏အိပ်ယာဘေးမှာ တုံးလုံးပက်လက်လေးဖြစ်နေသော မိဂသီဆေးပုလင်းကိုယူ၍ နံရံကိုမှီကာ ခပ်လျှောလျှောလေးထိုင်၍ ပေါင်နှစ်ချောင်းထောင်ကာ ကားရင်းဆေးလူးနေမိသည်။
““ဟယ်….လေးငယ် ဘာဖြစ်လို့လဲ”” ““ဟာ မမ ….ဘာ….ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး”” လေးငယ်ပေါင်နှစ်လုံးကိုစေ့၍ထဘီကိုကမန်းကတန်းဆွဲချလိုက်ပြီး ခါးကိုပတ်ပြီးထိုင်ပစ်လိုက်မိသည်။ မမ၏မျက်နှာက ညီးပြောတာငါမယုံပါဘူးအေ ဆိုသည့်မျက်နှာပေးမျိုးဖြင့် လေးငယ်ကိုကြည့်သည်။ ““ငယ်လေးကလဲ….ညီအစ်မချင်းဘဲဟာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပေါ့ ဒါမှမမလဲ ဝိုင်းပြီးလုပ်ပေးနိုင်မှာ….”” ““အာ….မမကလဲ ခုံစောင်းနဲ့ဆောင့်မိလို့ ဒီမှာနာရတဲ့ကြားထဲမှာ ဘာတွေမှန်းလဲမသိဘူး လာပြောနေတယ်….”” မိဂသီဆေးပုလင်းကို ထွေးနွယ်၏အိပ်ယာပေါ်တင်လိုက်ပြီး ခြေကိုဆောင့်နင်း၍ထွက်လာခဲ့မိသည်။ အငယ်ဆုံးတွေရဲ့စရိုက်ကဒီလိုဘဲဆိုးတတ်သည်။ လေးငယ် မမထွေးနွယ်ကို သိပ် ပြီးအစာမကြေချင်။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် သူဒီလိုဖြစ်တာ မမထွေးနွယ်ကြောင့်…၊မမကြောင့် တစ်နေ့ကညက မမထွေးနွယ်လေ သူ့ရည်းစား ခင်မောင်ထွေးနဲ့ချိန်းတွေ့တယ်….ချိန်းတွေ့တဲ့ နေရာကသိပ်ပြီးဝေးဝေးလံလံမဟုတ်။ သူမတို့အိမ်တွင်ပင်ဖြစ်သည်။
တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင် ခင်မောင်ထွေးက အိမ်လာတတ်သည်ဟုလည်း ပြောရင်ရသည်။ ကွာပါ့…အစ်ကိုညိုမောင် တို့နှင့်အတော့ အိမ်ရှေ့လမ်းကဖြတ်သွားလို့ ““အိမ်ထဲဝင်အုန်းလေ””ဟု လေးငယ်ကခေါ်ရင်တောင်မှ အစ်ကိုညိုမောင်က “မဝင်တော့ဘူးသွားတော့မယ်” ဆိုပြီးဆက်လျှောက်သွား တတ်သည်။ မမထွေးနွယ်ရဲ့ရည်းစားခင်မောင်ထွေးကတော့ လူခြေတိတ်ချိန်ကျမှ ခြံထဲကိုရောက်လာတတ်သည်။ မမထွေးနွယ်နှင့်ခင်မောင်ထွေးတို့က ကြိုတင်ချိန်းထားပုံမရ။ ခင်မောင်ထွေးရောက် လာလျှင် သစ်ကိုင်းခြောက်သေးသေးလေးတွေကို သွပ်မိုးပေါ်ပစ်တင်၍အသံပေးတတ်သည်။ ခဲလုံးလိုလိမ့်ဆင်းသွားတာမျိုးမဟုတ်တော့ ဖျောက်….ဖျောက်……ဆိုသောအသံလေးသာ ကြားလိုက်ရသည်။ ဒီအသံကြားပြီးပြီဆိုလျှင် မမထွေးနွယ်က လေးငယ်အိပ်နေရာဖက်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီး အသာလေးအိပ်ယာပေါ်မှထကာ ခြံထဲဆင်းသွားတတ်သည်။
ဒီအခါမျိုးတွင် လေးငယ်အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေပြီး အိပ်ယာထဲမှာငြိမ်ပြီးနေလိုက်သည်။ နောက်တော့….လေးငယ်တစ်ကယ်အိပ်ပျော်သွားသည်။ သူတို့ခြံထဲတွင်ဘာတွေဖြစ်နေမှန်းမသိတော့ပေ။ တစ်နေ့ကတော့ မိုးချုပ်မှလေးငယ်လက်ဖက်တွေစားထားမိလို့ ညဖက်အိပ်မပျော်ဘဲဖြစ်နေတုံး သွပ်မိုးပေါ်မှတစ်ဖျောက်ဖျောက်အသံလေးတွေကြားလိုက်ရသည်။ လေးငယ်အိပ်ချင် ယောင်ဆောင်နေသည်။ မမထွေးနွယ်ထွက်သွားပြီး ခဏလောက်ကြာမှ လေးငယ်အိပ်ယာမှထပြီး မမထွေးနွယ်စေ့ထားပစ်ခဲ့သော နောက်ဖေးတံခါးမှခြံထဲသို့ဆင်း၍စပ်စုမိသည်။ ခြံထဲ ရောက်တော့ လေးငယ်သူမကိုယ်သူမ မှားများသွားပြီလားလို့ အထိတ်တလန့်တွေးလိုက်မိသည်။ တွေ့လိုက်ရသောမြင်ကွင်းကမသက်သာလှ။
မမထွေးနွယ်က မြေပြင်မှနှစ်ပေကျော် ကျော်အမြင့်ပေါ်တွင်ပေါက်နေသော သရက်ပင်ခွကြားပေါ်သို့ သူ့ဗိုက်လေးကိုတင်ပြီး မှောက်ထား၍လက်နှစ်ဖက်က ဘယ်ညာခွဲထွက်သွားသောသရက်ပင် ပင်စည်နှစ်ခုကိုကိုင်၍ အားပြုထားသည်။ (သရက်ပင်ခွကြားမှာ သားရေခွလိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေသည်။) ခါးအောင်ပိုင်းက ထဘီကိုခါးဆီသို့ဆွဲ၍လှန်တင်ထားပြီး မမထွေးနွယ်၏ဖင်ဖွေးဖွေးကြီးတွေက ပြောင်၍နေ၏။ ခင်မောင်ထွေးဆိုတဲ့လူက နောက်ကနေ မမရဲ့ခါးသေးသေးလေးကိုကိုင်ပြီး နောက်ကိုပြူးထွက်နေတဲ့ မမပစ္စည်းထဲကိုသူ့ဟာကြီးကဝင်နေပြီး အားရပါးရကြီးကို ကစ်နေသည်။
ဒီလောက်ကြီး ခင်မောင်ထွေးက အားရပါးရကြီးသွင်းနေတာတောင်မှ မမထွေးနွယ်ကအားရပုံမရ။ ““ပြွတ်……ဖွတ်….ဗြစ်……ပြွတ်…..ဖွတ်…..ဖွတ်…ကျွတ်…ဆောင့်….ဆောင့်…ကိုထွေး….အားရအောင်လုပ်….ပြွတ်…..ပြွတ်……ဖွတ်….ဖွတ်…စွပ်…စွပ်….ပလွတ်..ဖွတ် အား….အင်း…အင်း….ဗျင်းစမ်းပါအုန်း….နာနာလုပ်….”” သုမနောက်မှ ခင်မောင်ထွေးကို လည်ပင်းကြောလေးထောင်အောင် သမင်လည်ပြန်လှည့်ကြည့်ရင်း အငမ်းမရပြောသည်။ မြင်လိုက်ရသည့်တစ်ခဏအတွင်းမှာပင် အပျိုရိုင်းမလေး လေးငယ်၏သွေးသားတွေက ဟုန်းကနဲထ၍သောင်းကျန်းလာသည်။ သဲသဲမဲမဲ ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်နေသော ခင်မောင်ထွေး၏လီးကြီးကို ငေးကြည့်မိရင်းလေးငယ်၏ဒူးဆစ်လေး တွေက မခိုင်ချင်တော့ တဆတ်ဆတ်ဖြစ်လာသည်။ ပြီးတော့ လေးငယ်စောက်ခေါင်းထဲကယားတက်လာပြီး အရည်လေးတွေလှိမ့်ဆင်းလာသည်။ စိတ်တွေအဆမတန်ထနေပုံရတဲ့ စောက်ပတ်ဖောင်းဖောင်းမို့မို့ကြီးထဲကို ဒုတ်ကနဲ ဒုတ်ကနဲ စိုက်စိုက်ဝင်သွားနေတဲ့ ခင်မောင်ထွေး၏လီးကြီးက အရည်တွေစိုရွှဲပြီးပြောင်တင်း၍နေသည်။ လေးငယ်မျက်တောင်ပင်ခတ်မိသလား၊ မခတ်မိလားမသိတော့။
ကြည့်ရင်း ပွဲကကြမ်းသထက်ကြမ်းလာသည်။ လေးငယ်ဒူးတွေတုန်ပြီး အာခေါင် တွေခြောက်ကာ ရင်ထဲတွင်ကြပ်၍မောလာသည်။ လေးငယ်ဆက်ပြီးရပ်ကြည့်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ပေ။ ဒါကြောင့်အိမ်ပေါ်သို့ပြန်တက်ခဲ့ပြီး အိပ်ယာထက်သို့ခြေပစ်လက်ပစ် လှဲချလိုက်မိသည်။ အိပ်ယာပေါ်တွင်ပက်လက်လေးနေရင်းနဲ့ လေးငယ်မျက်လုံးထဲမှာ မမထွေးနွယ်နှင့်ခင်မောင်ထွေးတို့ဆော်နေကြသည့်မြင်ကွင်းကတစ်ဖန်ပြန်လည်လို့မြင်ယောင်လာမိပြန်သည်။ မမထွေးနွယ်ကလည်း သူ့ကိုယ်တိုင်ကကိုရွထကာ ခင်မောင်ထွေး၏ဆောင့်လိုးချက်များကို အံကြိတ်ခံရင်းညီးညူနေရပြန်တော့ လေးငယ်မှာလည်းသူတို့အတွဲလိုဖြစ်ချင်စိတ်ကနိုးထလာရပြန်သည်။ မမထွေးနွယ်တစ်ယောက်တည်း ရည်းစားရှိသည်မဟုတ်။ လေးငယ်မှာလည်းရည်းစားရှိတာဘဲ။ ဒီခံစားချက်ကြောင့်ပင် လေးငယ်တစ်ယောက် မိန်းကလေးတန်မဲ့ အရှက်ကိုငဲ့ကွက် ၍ မနေ့ကအစ်ကိုညိုမောင်ဆီရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်လေတော့သည်။ လေးငယ်တစ်ယောက် ညိုမောင်ကိုမျက်နှာပူမိတာအမှန်ပင်ဖြစ်သည်။
အပျိုလေး၏ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံဆိုတော့လဲ လေးငယ်ရှက်မိသည်။ နောက်ပြီးတော့ လေးငယ်ကအိနြေ္ဒမဲ့ပြီး အစ်ကိုကို့နှုးခဲ့တာမဟုတ်လား…..။ တစ်နေ့တည်းနှင့်လေးငယ်၏ပစ္စည်းလေးက မူလနဂိုအတိုင်းပြန်၍ဖြစ်သွားသည်ဆိုပေမဲ့လေးငယ် ညိုမောင်ကိုရှောင်နေခဲ့သည်။ တစ်ရက်မှနှစ်ရက် နှစ်ရက်မှသုံးရက် အစ်ကိုညိုမောင်တို့အိမ်ဖက်ကိုမသွား။ အစ်ကိုညိုမောင်ကလည်း လေးငယ်ကိုရှိန်နေပြီး မျက်နှာမပြဘူး။ ဒီမှာလေးငယ်တစ်ယောက်နောက်ပိုင်းတော့အနေရအထိုင်ရခက်လာသည်။ လေးငယ်အခုခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာက နာကျင်သော၊ ယောင်ယမ်းခြင်းဝေဒနာထက်ပိုဆိုးသည်။ ပိုပြီးခံရခက်သည်။ အရည်လေးတွေတစ်စိုစိုဖြစ်နေသည်။ ညိုမောင်ကို မတွေ့ရတာ(၃)ရက်မှ(၄)ရက်ထိရောက်လာတော့ လေးငယ်စိတ်ထဲဒေါသစိတ်လေးတွေပွားလာသည်။
သူကြင်မှကိုယ်ကြင်ဘဲ သူကဘာမို့လို့လဲ…..။ သူမလာသမျှ ငါ့ကိုဘယ်တော့မှ မတွေ့ရဘူး။ ငါကတော့ သူ့ဆီဘယ်တော့မှမသွားဘူးဟု ဒေါသအတွေးတွေဝင်လာပြီး ဝေဒနာကိုကြိတ်မှိတ်ပြီး ခံစားနေမိသည်။ ဒီကြားထဲ မမထွေးနွယ်ကလဲ တစ်မှောင့် အကိုညိုမောင် တို့အိမ်ခေါင်းရင်းမှ လှလှတင်တို့အိမ်တွင်အလှူရှိ၍ဝိုင်းလုပ်ရန် လေးငယ်ကိုပါခေါ်နေသည်။ ““မလိုက်ချင်ဘူး မမရာ မမဘာသာသွားပေါ့”” ““ငယ်လေး အိမ်မှာတစ်ယောက်ထဲဖြစ်နေမှာပေါ့”” ““မမကလဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့….အိမ်ကတံခါးပိတ်ထားရင်လုံနေတာဘဲဟာ….ခါတိုင်းလဲ….မမသွားရင် ငယ်လေးတစ်ယောက်ထဲ နေတာဘဲဟာကို….”” ““ငယ်လေးကလဲကွာ မမက မိုးလင်းမှပြန်လာမှာ”” ““ဟင့်အင်းကွာ….ဟင့်အင်း…မလိုက်ချင်ဘူး”” ““ကဲ….မယ်မင်းကြီးမ မလိုက်ချင်လဲနေတော့….မမဘာသာဘဲ သွားလိုက်တော့မယ်…”” ““အဲ့ဒါပြီးတာဘဲဟာကို…”” ““အေးပါ….အေးပါဟုတ်ပါတယ်”” ““တံခါးတွေတော့ သေချာပိတ်အိပ်…”” ““သွားမဲ့ဟာ သွားစမ်းပါမမရာ…”” လေးငယ်မျက်စောင်းထိုး၍နှုတ်ခမ်းစူရင်း စိတ်မရှည်သလိုလုပ်ကာပြောလိုက်သည်။
လေးငယ်၊ ထွေးနွယ်တို့၏မိဘနှစ်ပါးမှာ များသောအားဖြင့် အိမ်တွင်မရှိတတ်…..လေးငယ်တို့အဖေကပြည်တွင်းရေကြောင်းသင်္ဘောမှာစက်ဆရာဆိုတော့ အမေကပါ.. အဖေ့သင်္ဘော နှင့်လိုက်နေတတ်သည်။ တစ်လမှတစ်ခါလောက်သာ သင်္ဘောနားရက်မှအိမ်သို့ပြန်လာတတ်လေသည်။ အိမ်တွင်က လေးငယ်နှင့်ထွေးနွယ်တို့ ညီအစ်မနှစ်ယောက်ထဲသာ ကျန်ရစ်ခဲ့ရ တာဖြစ်သည်။ ညနေစာစားပြီး နဲနဲမှောင်မှ မမထွေးနွယ်တစ်ယောက်အလှူအိမ်သို့ထွက်သွားခဲ့သည်။ မမထွေးနွယ်ထွက်သွားပြီးတော့ လေးငယ်က အိပ်ယာထဲတွင်လှဲကာ ဝတ္ထုဖတ်သည်။ အချစ်ဝတ္ထုတွေကိုကြိုက်သာ လေးငယ်တစ်ယောက်ဖတ်နေသောဝတ္ထုစာအုပ်တစ်ဝက်မကျိုးခင်မှာပင် ရည်းစားဖြစ်သူ ညိုမောင်ကိုသတိရလာသည်။
ဒီရက်တွေထဲတွင် သူမခံစားနေရသောကာမဆန္ဒဝေဒနာကလည်း လေးငယ်အချစ်ဝတ္ထုကိုဖတ်နေခြင်း၊ အိမ်ကြီးတစ်လုံးထဲတွင် တစ်ယောက်ထဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြစ်နေခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေခြင်းတို့ကိုအားပြု၍ လေးငယ်၏တစ်ကိုယ်လုံးရှိသွေးသားတွေကိုဆူပွက်အောင်လှုပ်ရှားလာစေသည်။ လေးငယ်ညိုမောင်ကို ဒေါသဖြစ်လိုက်မိသည်။ လက်ထဲမှဝတ္ထုစာအုပ်ကို ဘုန်းကနဲဘေးသို့ပစ်ချလိုက်ပြီး စားပွဲတင်နာရီလေးကိုလှမ်း၍ကြည့်လိုက်မိသည်။ ည(၁၀)နာရီတောင် ထိုးတော့မှာပဲ သူမဝတ္ထုဖတ်တာ အချိန်မနဲတော့ လေးငယ်အိပ်ယာမှထ၍မီးပိတ်ပြီး၊ ခြင်ထောင်ချကာလေးငယ်ခြင်ထောင်ထဲဝင်သည်။
ခံစားနေရသောဝေဒနာခံစားချက်ကို ကြိတ်မှိတ် ခံစား၍ လေးငယ်အိပ်ပျော်အောင်ကြိုးစားသည်။ အချိန်တော်တော်လေးကြာသွားသည်အထိ လေးငယ်ကအိပ်၍ပင်မပျော်နိုင်ဖြစ်နေသည်။ ““ဖျောက်….ဖျောက်….ဖျောက်ဖျောက်”” ကြားလိုက်ရသည်နှင့်လေးငယ်တစ်ယောက်ခေါင်းနပမ်းကြီးကာ ရင်တွေတဒိန်းဒိန်းခုန်သွားသည်။ သစ်ကိုင်းခြောက်သေးသေးလေးများ သွပ်မိုးပေါ်သို့ကျလာသည့်အသံ။ ခြံထဲသို့ မမ ထွေးနွယ်ရည်းစားခင်မောင်ထွေးရောက်လာပြီး အချက်ပေးလိုက်သည့်အသံဖြစ်သည်။ လေးငယ်ရင်တွေခုန်ပြီး စိတ်တွေဗြောင်းဆန်အောင်လှုပ်ရှားလာသည်။ ခင်မောင်ထွေးရောက်လာ ပြီး အိမ်မှာကမမထွေးနွယ်က မရှိပေ။ သူအလှူအိမ်သွားမှာကိုမပြောထားလို့လား….အဲ….ဘယ်လိုပြောဖြစ်ပါ့မလဲ…ခင်မောင်ထွေးကစက်ရုံအလုပ်လုပ်နေပြီး နှစ်ရက်ဆင်းတစ်ရက်နား ရသော အလုပ်ဆိုတော့ခုညမှအိမ်ကိုပြန်လာပြီး ရည်းစားထံပြေးလာဟန်တူသည်။
““ဖျောက်….ဖျောက်….ဖျောက်….ဖျောက်”” မမထွေးနွယ် မနိုးသေးဘူးထင်၍ထပ်ပြီးအချက်ပေးတာဖြစ်သည်။ ဟိုတစ်နေ့က သူမတွေ့ခဲ့ရသည့် ခင်မောင်ထွေးနှင့်မမထွေးနွယ်တို့၏မြင်ကွင်းကို လေးငယ်ပြန်၍မြင်ယောင်လာပြီး မူလခံစားနေရသော ဝေဒနာပေါ်တွင်ထပ်ဆင့်ကာသွေးသားဆူပွက်မှုတို့က အဆမတန်ခံစား၍လာရသည်။ အရည်လေးတွေကဆက်တိုက်ဆိုသလိုစိမ့်ထွက်ကျလာသည်။ လေးငယ် ကောက်ကာငင်ကာထထိုင်လိုက်ပြီး ခြင်ထောင်ကိုဖွင့်၍ထွက်လိုက်သည်။ ခြင်ထောင်အပြင်ရောက်တော့ ထရပ်ရန်ကြမ်းပြင်သို့လက်တစ်ဖက်ထောက်လိုက်ပြီးမှ လေးငယ်နဲနဲတွေး၍ ပြီးမှအောက်နှုတ်ခမ်းလေးကိုကိုက်ပြီး ဆတ်ကနဲထရပ်လိုက်ကာ လျှောက်လာခဲ့ပြီးအိမ်နောက်ဖေးတံခါးကိုဖွင့်ကာ ခြံထဲသို့ဆင်းလိုက်လေသည်။
အပြင်ဖက်မှာက လမိုက်ညမို့မှောင်မဲနေ သည်။ အမြဲသွားလာလှုပ်ရှားနေသည့် မိမိအိမ်ရှိရာခြံဝန်းကိုတော့ လေးငယ်အခက်အခဲမရှိသွားလိုရာသို့လျှောက်လာနိုင်သည်။ အမှောင်ထဲတွင်မျက်စေ့ကလဲနဲနဲကျင့်သားရလာသဖြင့် ခြံထဲတွင်မသဲမကွဲလေးဖြစ်လာရသည်။ အိမ်ဘေးရှိခြံထဲတွင်သရက်ပင်ဘေး၌ငုတ်တုတ်ထိုင်၍စောင့်နေသော ခင်မောင်ထွေးကို လေးငယ်ရေးရေးလေးမြင်လာရသည်။ လေးငယ်၏တစ်ကိုယ်လုံးဖိန်းရှိန်း၍တက်လာပြီး ရင်တွေတဒိန်းဒိန်းပိုခုန်လာသည်။
ဆုံးဖြတ်ပြီးလျှင်နောက်ဆုတ်တက်သူတွေထဲမှာ လေးငယ်မပါ။ ခင်မောင်ထွေးကိုတွေ့လိုက်ရသည်နှင့် ရပ်တော့မလိုဖြစ်သွားသောသူမ၏ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုအားယူ၍ ထပ်လှမ်းလိုက်ပြီးခင်မောင်ထွေး၏ရှေ့မှဖြတ်ကနဲလျှောက် သရက်ပင်ခွကြားကို မျက်နှာမူ၍လေးငယ်ရပ်လိုက်သည်။ ထွေးနွယ်ဆင်းလာမည်ဆိုသောအသိဖြင့်စောင့်နေသော ခင်မောင်ထွေးမှာလေးငယ်သူ့နားသို့ရောက်သည်နှင့် လေးငယ်မှန်းသိပြီးအနားမှပန်းခြုံထဲ လှည့်ဝင်မည်အလုပ်သူအနီးကပ်မြင်လိုက်ရသော လေးငယ်၏မျက်နှာ၌ တဏှာခိုးတွေဝေပြီးအမ်းတန်းတန်းဖြစ်နေကာ နီမြန်းနေသည်ကိုသတိရလိုက်ပြီး ပန်းခြုံထဲခေါင်းတိုးဝင်ပြီးကာမှ ခင်မောင်ထွေးမှလေးငယ်ဖက်သို့လှည့်၍ကြည့်သည်။ သူကြည့်လိုက်မိသောခဏမှာပင် လေးငယ်ကသရက်ပင်ခွကြားသို့ သူမ၏ဗိုက်ကလေးကိုမှောက်၍ကုန်းလိုက်သည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရသည်။
ခင်မောင်ထွေးနောက်သို့ပြန်လှည့်၍ မတ်တပ်ရပ်လိုက်ခိုက်မှာပင် လေးငယ်ကကုန်းရက်သားလေးမှ သူမ၏ထဘီလေးကို ခါးဆီသို့လှန်၍တင်လိုက်သည်ကိုတွေ့လိုက်ရပြီး ခင်မောင်ထွေးတစ်ယောက်လေးငယ်၏နောက်နား သို့ရောက်မှန်းမသိရောက်၍သွားသည်။ ကိုယ့်ချစ်သူလည်းမဟုတ်၊ တစ်စိမ်းယောင်္ကျားတစ်ယောက်ရှေ့၌ဖင်ကုန်းပေးပြီး ထဘီကိုပါလှန်ပေးလိုက်ကာလိုးတော့မည့်အရေးကိုစောင့်မျှော် နေရသော လေးငယ်၏ရင်တွေမှာတစ်လှပ်လှပ်ဖြစ်ကာ တစ်ကိုယ်လုံးကသွေးသားတွေဗြောင်းဆန်နေပြီး အသားလေးတွေပင်တစ်ဆတ်ဆတ်တုန်၍နေချေသည်။
ကာမရှေ့ပြေးအရည် တို့ကလည်း ပေါင်တွင်းသားနှစ်ဖက်ပေါ်သို့ပင်လိမ့်ဆင်းကျလာကြသည်။ ခင်မောင်ထွေးစားရကံကြုံတော့မုတ်ဆိတ်ပျားစွဲပြီး ထွေးနွယ်ကိုလိုးဖို့ဆောင့်နေရင်း ထချင်တိုင်းထနေသော သူ့လီးကြီးကိုဝတ်ထားသောပုဆိုးကိုလှန်တင်၍ ခါးတွင်ပြန်ညှပ်ကာထုတ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ ကားကားတစ်တစ်ဖြစ်နေသောလေးငယ်၏ဖင်နှစ်လုံးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ညှပ်၍ ကိုင်လိုက်သည်။ လေးငယ်ဆီမှ သက်ပြင်းသေးသေးလေးတစ်ချက်ချသံကိုကြားလိုက်ရသည်။ လေးငယ်၏တင်သားအစုံကမာပြီးကျစ်နေသည်။ ထွေးနွယ်၏တင်သားတွေလို အိစက်၍မနေ။
သူမကြာခဏ လိုးလိုးနေသဖြင့် ထွေးနွယ်၏တင်သားတွေကအတန်ငယ်ပျော့နေပြီ။ ခင်မောင်ထွေးလက်ဖဝါးတစ်ဖက်ကို ပက်လက်လှန်၍လေးငယ်၏ပြူးထွက်နေသော စောက်ပတ်ကြီးကိုအောက်မှနေ ၍ပင့်ကိုင်လိုက်သည်။ လေးငယ်ကိုယ်လေးတွန့်ကနဲဖြစ်ကာ ဖင်လေးရမ်းသွားသည်။ အရည်တွေက မတရားရွှဲနေပြီ။ လေးငယ်ဆီမှ သက်ပြင်းချသံလေး တစ်ချက်ကြားလိုက်ရပြန်သည်။ လေးငယ်၏စောက်ပတ်ကို စိုစွတ်နွေးထွေးစွာထိတွေ့မိလိုက်ကာမှ ခင်မောင်ထွေး၏စိတ်တွေကပိုပြီးဗလောင်ဆူလာသည်။ ခင်မောင်ထွေး သူ့လီးကိုကိုင်ကာတေ့လိုက်ပြီးမှ မွှန်လာသောကာမစိတ်တွေကြောင့် လီးကိုဆောင့်၍သွင်းလိုက်သည်။ ““ပြွတ်….ဖွတ်…အား….အား…”” လီးကတစ်ခါတည်းအဆုံးဝင်မသွား…..အပြင်တွင်လက်နှစ်လုံးလောက် ကျန်နေသေးသည်။ ဒါကိုဆက်မသွင်းသေးဘဲ ခဏရပ်လိုက်သည်။ ““လေးငယ်…သိပ်နာသွားလား…”” ““ဟင့်အင်း….ကြပ်တယ်ကွာ…”” လေးငယ်စိတ်တွေဘယ်လိုမှ မအောင့်အီးနိုင်တော့…ဖင်ကြီးကိုနောက်သို့တွန်းပို့ရင်းပြောသည်။
ခင်မောင်ထွေးက လေးငယ်၏ခါးလေးကိုဆွဲ၍ တစ်ချက်ခြင်းဆောင့်လိုးသည်။ ““ပြွတ်….ဖွတ်….ပြွတ်….ဖွတ်….ပလွတ်…”” ““ကျွတ်….ကျွတ်….ကျွတ်…အင်း….အင်း”” လိုးနေရင်း လေးငယ်ဆီကမသဲမကွဲငြီးသံလေးတွေကြားနေရတာ ခင်မောင်ထွေးအဖို့ပို၍အရသာတွေ့လှသည်။ ထွေးနွယ်ကတော့ဒါမျိုးမဟုတ် အံကြိတ်ပြီးနှုတ်ခမ်းနှစ်ခုတင်းတင်းစေ့ ကပ်ကာခံသည်။ လူကြားမှာစိုးတာလဲပါသည်။ ပြီးတော့လီးတစ်ဆုံးဝင်သွားကတည်းက လေးငယ်၏အတွင်းထဲမှဆွဲငင်ရစ်ပတ်အားက ပြင်းထန်လှသည်။ ဒီလိုတစ်မူထူးကို အရသာတွေ ထူးခြားလာတော့ ခင်မောင်ထွေး၏ဆောင့်ချက်တွေကပို၍စိပ်လာသည်။ သရက်ပင်ခွကြားမှာမှောက်ထားသော လေးငယ်၏ကျောပြင်လေးကော့ကော့ပြီး ထောင်ထောင်သွားရသည်ထိ ဆောင့်ချက်တွေကပြင်းထန်လာသည်။
““ ပြွတ်….ဖွတ်….ပြွတ်….ဖွတ်….ပလွတ်…”” ““ကျွတ်….ကျွတ်….ကျွတ်…အင်း….အင်း”” ““အား….အား…..အင်း…အင်း…..လုပ်…”” ““အမလေး….လုပ်…လုပ်ပါ”” လေးငယ်ပြီးလုပြီးခင်ဖြစ်လာပြီဆိုတာကို ခင်မောင်ထွေးသိလိုက်ပြီး ခပ်စိတ်စိတ်လေးဆောင့်ပစ်လိုက်သည်။ ညိုမောင်လိုးတာကိုခံရတုံးကထက် အများကြီးပိုပြီးအရသာရှိလှသည်။ ဒီတုံးကအစိမ်းသက်သက်ဖြစ်နေရတာကလည်းတစ်ကြောင်း၊ ညိုမောင်ကလည်း မိန်းမလုပ်ဖူးပုံမရသေး….၊လိုးချက်တွေကထိထိမိမိမရှိလှ။ အခုတော့ အတွေ့အကြုံများလှသော ခင်မောင်ထွေး၏အတွေ့ဝယ် လေးငယ်ဘယ်လိုမှမအောင့်နိုင်တော့ဘဲ အားနဲ့ဖင်ကြီးတွေကိုနောက်သို့ခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်ပြီး အဆုံးသတ်လိုက်သည်။ လေးငယ်ပြီးသွားမှန်းသိတော့ ခင်မောင်ထွေးကခပ်ဖြေးဖြေးတစ်ချက်ခြင်းဆောင့်ပေးသည်။ လေးငယ်အရသာရှိလှသည်မှာ မပြောပါနဲ့တော့။
အရသာရှိလှပေမယ့် သရက်ပင်ခွကြားမှမှောက်ပြီးခံရတော့ သိပ်ပြီးဇိမ်မ တွေ့လှပေ။ သရက်ပင်ခွကြားတွင်မှောက်၍ကုန်းထားသော လေးငယ်ခါးကိုဆန့်၍ဗြုန်းကနဲမတ်တပ်ရပ်လိုက်တော့ ခင်မောင်ထွေး၏လီးကအလိုအလျှောက်ကျွတ်သွားသလို ခါးသို့လှန် တင်ထားသော သူမ၏ထဘီလေးကလည်း အလိုအလျှောက်အောက်သို့ပြန်ကျ၍ လေးငယ်၏အောက်ပိုင်းကိုဖုံးအုပ်သွားသည်။ လေးငယ်ကိုခင်မောင်ထွေးနားမလည်နိုင်စွာကြည့်လိုက်သည်။ သူ့ပုဆိုးကိုပြန်ပြီးမဖုံးမိသေး။ မပြီးသေးသော ခင်မောင်ထွေး၏လီးကြီးကအရည်တို့ဖြင့် ပေပွကာမတ်တောင်နေသည်မှာ အသဲယားစရာကောင်းလှသည်။ မျက်လုံးစွေ၍ လေးငယ် ခင်မောင်ထွေး၏အောက်ပိုင်းကိုကြည့်လိုက်သည်။ ““လာ….အစ်ကိုထွေး အိမ်ပေါ်သွားရအောင်…”” လေးငယ်က သူမဘာသာတစ်ယောက်ထဲပြောသလို ခင်မောင်ထွေးကိုမကြည့်ဘဲပြောပြီးလှမ်းထွက်သွားသည်။
ရပ်နေသောခင်မောင်ထွေး၏ခြေထောက်တွေက ဗြုံးကနဲမလှုပ်ရှားတွေ ဝေနေပုံရသည်။ ““အိမ်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူး အစ်ကိုထွေး…”” ဒီတော့မှ ခင်မောင်ထွေး၏ခြေထောက်တွေက လှုပ်ရှား၍လာသည်။ ရှေ့မှသွားနေသော လေးငယ်၏နောက်သို့ ခင်မောင်ထွေးလိုက်လာသည်။ အိမ်ပေါ်ရောက်တော့ လေးငယ်အိပ်ခန်း ထဲထိသွားမနေတော့၊ မီးဖိုဆောင်ကြမ်းပြင်မှာပင် ထိုင်၍လှဲချလိုက်သည်။ ခင်မောင်ထွေး သူမဘေးသို့ရောက်လာပြီးထိုင်ချလိုက်ရာမှ လေးငယ်၏ထဘီလေးကိုလှန်တင်လိုက်သည်။ လေးငယ်မျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီး ငြိမ်ခံနေသည်။ ပြီးတော့ ခင်မောင်ထွေးသူမ၏စောက်ပတ်လေးကို တရွရွကိုင်တွယ်ပွတ်သပ်သည်။ လေးငယ်ပေါင်နှစ်လုံးကိုဆွဲထောင်လိုက်သည်။ ဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်နေပေမယ့် စောက်ပတ်ကအဝလေးဟနေမယ်ဆိုတာ လေးငယ်သိသည်။ ““လိုးတော့မယ်နော်…..လေးငယ်…”” လေးငယ်နားထဲပူသွားပြီး တစ်ကိုယ်လုံးဖိန်းရှိန်းသွားသည်။
စောစောက လေးငယ်၏ဟာလေးကို သူတရွရွကိုင်ကြည့်နေကထဲက လေးငယ်စိတ်တွေပါလာနေပြီဖြစ်သည်။ လေးငယ် ပေါင်နှစ်လုံးကိုထပ်ပြီးကားကာ ဖင်လေးကိုပွတ်ပေးရင်းစောက်ဖုတ်လေးကို ပိုခုံးမောင်အောင်လုပ်ပေးသည်။ ခင်မောင်ထွေးလီးထိပ်ကြီးက စောက်ပတ်လေးကိုပွတ်တိုက်ဆော့ကစားပြီးမှ စောက်ခေါင်းဝလေးကိုတေ့လိုက်သည်။ လေးငယ်အသက်အောင့်ထားမိသည်။ ခင်မောင်ထွေး၏ဖင်ကြီးကိုကော့၍ လီးကိုဖိသွင်းသည်။ စောက်ခေါင်းထဲသို့ပြည့်ကြပ်စွာ တင်းတင်းကြီးပင် ဝင်လာသော လီးကြီး၏အရသာကိုခံစားရင်းလေးငယ်၏မျက်ဝန်းတွေထဲတွင် ညိုမောင်ကိုမြင်ယောင်နေမိသည်။ ချစ်သူညိုမောင်ကိုသတိရနေမိသည်။ လေးငယ်မှားများ မှားသွားပြီလား၊ မသိဘူး၊ အချစ်ကိုငဲ့ကွက်၍ လေးငယ်သွေးသားဆန္ဒကို ရှေ့တန်းတင်ခဲ့လေသည်။
တင်းကနဲဝင်လာသောလီးကြီး၏အရသာအတွေ့က လေးငယ်၏တစ်ကိုယ်လုံးကိုဖျင်းကနဲလွှမ်းခြုံရစ် သိုင်း၍သွားသည်။ လေးငယ်လက်ကလေးများကခင်မောင်ထွေး၏ကျောပြင်ကိုအလိုလျှောက်ဖက်တွယ်လိုက်မိသည်။ လေးငယ်ဖင်လေးကိုကော့ထားရင်း တင်းတင်းလေးနေသဖြင့် စောက်ဖုတ်လေးကခုံးမို့ဖောင်းကားနေသည်။ ““ ပြွတ်….ဖွတ်….ပြွတ်….ဖွတ်….ပလွတ်….စွပ်….ဖွတ်….အင်း…အင်း…အမလေး..လေး…အား….အင်း…”” လေးငယ် ခင်မောင်ထွေးကိုမချစ်မိသည်ကတော့သေချာသည်။ ခင်မောင်ထွေးလိုးတာကိုခံရင်း ချစ်သူညိုမောင်ကိုဘဲ မြင်ယောင်နေသည်။ ဒါပေမယ့် လေးငယ် ခင်မောင်ထွေးကို တစ်အားပြန်၍ဖက်ထားပြီး ခင်မောင်ထွေး၏ပါးကိုပင် ခေါင်းထောင်၍တစ်ချက်နမ်းလိုက်မိသေးသည်။ ဆောင့်အားနှင့်လိုးအားကောင်းလှသောကြောင့် မကြာမှီမှာပင် လေးငယ်မခံနိုင် အောင်ကျင်တက်အီဆိမ့်လာသည်။ ဖင်ကိုလူးလိမ့်၍ စကောဝိုင်းကော့ကော့ပေးလိုက်မိသည်။ ““ပြွတ်….ဖွတ်….ပြွတ်…ဗြစ်….အား…”” လေးငယ်၏စောက်ခေါင်းထဲမှအရည်များပွက်ကနဲ ပန်းထုတ်လိုက်သည်။
““ပြွတ်…ဒုတ်….ဖွတ်….ဖွတ်…ဗြွီ….”” ““အင်း……”” တခဏအတွင်းမှာပင် ခင်မောင်ထွေး၏လီးထိပ်မှထွက်လာသောအရည်တွေက လေးငယ်၏စောက်ခေါင်းလေးအတွင်းဝယ် နွေးကနဲ နွေးကနဲဖြင့် လေးငယ်ကိုဆိမ့်ကျင်သွားပေတော့ပါ သည်။ ခင်မောင်ထွေးနှင့်လေးငယ်လိုက်ပြေးသွားသည်ဟူသော သတင်းကညိုမောင်၏အသဲကို ကျွဲခတ်သွားရုံမျှသာမဟုတ်။ ထွေးနွယ်၏ရင်ဝကိုလည်း လှံချွန်စိုက်သကဲ့သို့ခံစားလိုက်ရသည်။ ညိုမောင်က လေးငယ်၏ရည်းစား၊ ထွေးနွယ်ဆိုတာက ခင်မောင်ထွေး၏ရည်းစား၊ ပြီးတော့ထွေးနွယ်ကလေးငယ်၏အစ်မအရင်းခေါက်ခေါက် ခင်မောင်ထွေးနှင့်လေးငယ်ဘက်က ဘယ်လိုဖြစ်သွားကြသည်ကို ထွေးနွယ်နှင့်ညိုမောင်တို့နှစ်ယောက်စလုံး မစဉ်းစားတတ်အောင်ဖြစ်ကြရသည်။ ထွေးနွယ်ဆီနှစ်ရက်ခြားတစ်ခါလာနေကြ ခင်မောင်ထွေးမလာတာ နှစ်လကျော်အကြာမှာလေးငယ်ကို ခိုးပြေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီကြားထဲမှာ ခင်မောင်ထွေးက ထွေးနွယ်ကိုတစ်ခါချိန်းခဲ့ဘူးသည်။ လာနေကြဘာကြောင့်ရောက်မလာသလဲဆိုတာသိချင်သော ထွေးနွယ်က ခင်မောင်ထွေး၏အိမ်ကိုအရဲစွန့်၍ သွားတွေ့ခဲ့သည်။
ဟိုရောက်တော့ ကိုထွေးဘာကြောင့်မလာသလဲဆိုသော မေးခွန်းကိုမမေးမိ၊ မတွေ့ရတာကြာပြီဖြစ်သောချစ်သူနှင့် အတိုးချပြီးချစ်ခဲ့ကြသည်။ ဒါပေမယ့်ပြန်ခါနီးမှာတော့ နုံးချိနေသော ထွေးနွယ်၏ကိုယ်လုံးလေးကို ဖေးမဖက်ငင်ကာအိမ်ပေါက်ဝသို့လိုက်ပို့ရင်း ကိုယ် ထွေးနွယ်ဆီလာဖို့မလွယ်တော့ဘူး။ အိမ်ကလူကြီးတွေကညဘက်ဆို ကိုယ့်ကိုအပျောက်မခံတော့ဘူး။ အခုလိုအိမ်မှလူရှင်းတဲ့အခါ ထွေးနွယ်ကိုလှမ်းပြီးချိန်းလိုက်ပါ့မယ်…ဟူသောစကားက အိမ်ပေါက်ဝရောက်ကာမှ ကိုယ့်လည်ပင်းကြီးကိုထွေးနွယ်လှမ်းဖက်ပြီးနမ်းလိုက်မိသည်အထိ ထွေးနွယ်ကိုအင်အားတွေဖြစ်စေခဲ့တာပါ။ အခုတော့ဒီစကားက ထွေးနွယ်ကိုပျားရည်နဲ့ဝမ်းချခဲ့တာမှန်း ထွေးနွယ်နောက်ကျစွာဖြင့်သိခဲ့ရပါပြီ။ အခုတော့ကိုရယ် ထွေးနွယ်ဘယ်လိုနေရမ လဲ ဟင်……။ ညိုမောင်အိမ်သို့ လေးငယ်ရောက်လာပြီးညိုမောင်အိပ်နေစဉ်ရောက်လာကာ လေးငယ်ကဦးဆောင်၍အချစ်ပွဲကိုနွှဲခဲ့ကြသည်။
နောက်နေ့မှစ၍ လေးငယ်အားညိုမောင်မတွေ့မိတော့ပေ။ လေးငယ်ရှက်နေတာပဲဖြစ်မည်။ ဒါဆိုလေးငယ်တို့အိမ်ဖက်လျှောက်ပြီး လေးငယ်ကိုသွားတွေ့ဖို့ကောင်းပါ့မလား….လူပျိုသိုးကြီးညိုမောင်မဆုံးဖြတ်နိုင်။ ချီတုံချတုံဖြစ်နေသည်။ သူသွား တော့ရှိနေသောလေးငယ်စိတ်တိုသွားလျှင်ခက်မည်။ ဒီအသက်အရွယ်ရောက်မှ ရည်းစားဦးရသော ညိုမောင်တစ်ယောက်ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေသည်။ ပြီးတော့တစ်ကယ်လို့များ သူနှင့်လေးငယ် ဟိုတစ်နေ့ကတွေ့ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြတာတွေကို တစ်နည်းနည်းနဲ့လူကြီးတွေသိသွားပြီး လေးငယ်ဘာပြဿနာတွေဖြစ်မှန်းမသိ။ အကယ်၍ဒီလိုဖြစ်နေတာမှန်ခဲ့ရင် သူရောက်သွား ရင် လေးငယ်အတွက်ပါ ပြဿနာကမသေးလှ။ ညိုမောင်၏အတွေးတွေက သူလေးငယ်ဆီမသွားဖို့ကများနေသည်။
ဒါကြောင့်လဲ ညိုမောင်ကိုငယ်ငယ်ထဲကသွေးကြောင်တဲ့ညိုမောင်လို့ သူငယ်ချင်းတွေက ပြောကြသည်။ ပြီးတော့ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင် သူငယ်ချင်းတွေကသူ့ကို စကြောက်ကြီးတဲ့။ နောက်ဆုံးညိုမောင်တွေးမိတာကတော့ အရင်တစ်ခါကလည်းလေးငယ်သူ့ဆီရောက်လာတာနဲ့ အခုလည်းအခြေအနေပေးရင် သူ့ဆီရောက်လာမှာဘဲဟုတွေးကာဆုံးဖြတ်ပြီး လေးငယ် အလာကိုသာညိုမောင်မျှော်နေမိတော့သည်။ အခုတော့လေးငယ်တစ်ယောက် ညိုမောင်ဆီဘယ်တော့မှ လာတော့မည်မဟုတ်တော့ပေ။ ညိုမောင်ထံလေးငယ်ရောက်ခဲ့ပြီး ညိုမောင်လာ လေနိုးနဲ့မျှော်ခဲ့ပေမယ့်လည်း လေးငယ်ထံသို့ညိုမောင်ရောက်မလာခဲ့ပေ။ ထန်းနို့ကလှီးလိုက်မိပြီ။
အစရှိတနောင်နောင် သွေးသားတို့က ပကတိသွေးသားတွေမဟုတ်တော့…။ လူသွေး ကိုလျှာပေါ်တင်ယက်စုပ်လိုက်မိသော ကျားရိုင်းမလေးသဖွယ်ဖြစ်နေသည်။ လေးငယ်က ငယ်ရွယ်နုပျိုသူမို့ မထိမ်းနိုင်၊ အစ်မဖြစ်သူထွေးနွယ်၏ရည်းစား ခင်မောင်ထွေးတစ်ယောက်လာနေကြအတိုင်း ညဖက်ခြံထဲရောက်လာတော့ အိမ်မှာမမထွေးနွယ်ကမရှိ။ အလှူအိမ်သို့သွားနေသည်။ မမထွေးနွယ်နှင့်ခင်မောင်ထွေးတို့၏ ပျော်ရွှင်မြူးတူးချစ်ပွဲလူးခဲ့ကြတာကိုလည်း လေးငယ်မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့ရဖူးသည်။ အခုလတ်တလောမှာလည်း ကျားရိုင်းမလေး လေးငယ်သွေးကဆာနေသည်။ အစ်မထွေးနွယ်၏ရည်းစား ခင်မောင်ထွေး စောင့်နေမည့်ခြံထဲသို့ လေးငယ်ညသန်းခေါင်တွင် တစ်ယောက်ထဲဆင်းလာသည်။
ပြီးတော့ လေးငယ်တစ်ယောက်အသိဉာဏ်တွေ အရှက်တွေကိုလွှင့်ပစ်လိုက်ပြီး မမထွေးနွယ်ကာမအရသာကိုခံစားနေကြ သရက်ပင်ခွကြား၌မှောက်၍ကုန်းပေးလိုက်သည်။ အစ်မဖြစ်သူ ထွေးနွယ်ထက်တောင့်သော ချောသော ပို၍စွဲမက်ဖွယ်ရာကောင်းလှသော လေးငယ်တစ်ယောက်သူ့ရှေ့သို့စက်ရုပ်တစ်ရုပ်နှယ် လှမ်းလျှောက်ရောက်လာပြီး ဖင်လေးကုန်း ကာ ထဘီလေးလှန်တင်လိုက်တာမြင်လိုက်ရတော့ ခင်မောင်ထွေးမှာကျန်းမာသန်စွမ်းသော လူပျိုလူငယ်တစ်ယောက်ပါ…။ ပြီးတော့လာနေကျအတိုင်း ချစ်သူထွေးနွယ်ထံရောက်လာပြီး ပြင်းပြသောဆန္ဒနှင့်ထွေးနွယ်ကိုစောင့်နေခိုက်…….ဒီတော့လေးငယ်ကို ဘယ်အလွတ်ပေးပါ့မလဲ…..။
သူဖြစ်ချင်သောဆန္ဒ၊ လေးငယ်တောင့်တနေသောဆန္ဒတွေကို တစ်ဝကြီးဖြည့် ဆည်းလိုက်သည်။ အတွေ့အကြုံများက ညိုမောင်ထက်အစစအရာရာသာသော အတွေ့တို့တွင်နစ်မွန်းကာ လေးငယ်တစ်ယောက်ခင်မောင်ထွေးကို အိမ်ပေါ်အထိခေါ်ခဲ့လေသည်။ တစ်ကြိမ်မှသည် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ တစ်ရက်မှသည်ရက်ပေါင်းများစွာ နှစ်လတာကြာခဲ့သောကာလဝယ် ကာမအတွေ့၌နစ်ဝင်နေခဲ့သော လေးငယ်တစ်ယောက်ခြောက်ခြားစရာကောင်း လှသော အိပ်မက်ကြောင့်အိပ်ပျော်နေရာမှ ဗြုံးကနဲလန့်နိုးရသူလို လေးငယ်တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားသွားရသည်။ မိန်းမတို့ စမူဆာ မတွေ့ရတာနှစ်လရှိသွားခဲ့ပြီ။ တတ်ကျွမ်းနားလည်သူကို တိုးတိုးတိတ်တိတ်ပြကြည့်တော့ ထင်သည့်အတိုင်းအဖြေကမှန်နေသည်။ လေးငယ်ဘာလုပ်ရမလဲမသိ….။ ပထမဆုံးညိုမောင်နှင့်တစ်နေ့ခင်းလုံးအပျော်ကြူးခဲ့ကြသည်။
နောက်ခင်မောင်ထွေးနှင့် အကြိမ်ကြိမ်အဖန်ဖန်ဆိုတော့ ဘယ်သူ့လက်ချက်မှန်း လေးငယ်ဝေခွဲဆုံးဖြတ်၍မရ။ ဒါပေမယ့်လက်ရှိက ခင်မောင်ထွေး ဒီတော့…မိန်းမသားပီပီ လေးငယ်တစ်ယောက် ခင်မောင်ထွေးထံမျက်ရည်ခံထိုး၍ ကိုထွေးရင်သွေးလေး ငယ်လေးဆီမှာ ရှိနေပြီဆိုတဲ့စကားလေးကို မရဲတရဲလေးတုန်ခိုက်စွာ မပွင့်တပွင့်လေးဆိုလိုက်တော့ ခင်မောင်ထွေးတစ်ယောက်လေးငယ်ကို ခိုးပြေးလေတော့သည်။ အိမ်မှာက မိဘနှစ်ပါးရှိသည်မဟုတ် အစ်မကြီးအမိအရာဆိုသလို ထွေးနွယ်တစ်ယောက်မျက်ရည်စက်လက်ဖြင့် မိဘတွေထံကိုလည်းအကြောင်းကြားရသည်။ ရပ်ရွာသူကြီးများမှတစ်ဆင့် ခင်မောင်ထွေး၏မိဘများထံလည်း ဆက်သွယ်ရသည်။ ညီမလည်းဆုံး၊ ချစ်သူလည်းဆုံး ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိစ္စကိုလည်း ထွေးနွယ်မျက်ရည်စက်လက်ဖြင့်လိုက်လုပ်နေရသည်။ ထွေးနွယ်လောက်နာကျင်ခံစားနေရ တာ ဘယ်မှာရှိနိုင်ပါတော့မည်နည်း။ ညိုမောင်ကတော့ ယောင်္ကျားလေးအမာစား၊ အပျော့စားမဟုတ်။
ဒါပေမယ့် လေးငယ်ကညိုမောင်အတွက်ရည်းစားဦး၊ ဒီတော့ညိုမောင်ခံနိုင်ရည်မရှိ၊ မကြုံဖူးသောဝေဒနာကို လူးလှိမ့် နေအောင်ခံစားနေရသည်။ ဒီလိုကိစ္စမျိုးနှင့်ပတ်သက်၍ ယောင်္ကျားတွေမှာထွက်ပေါက်ကရှိပြီးသား အဲ့ဒါကတော့ ယမကာထွက်ပေါက်ပင်ဖြစ်သည်။ တစ်သက်လုံးသောက်တတ်စားတတ် သူမဟုတ်တော့ ညိုမောင်စိတ်ကမရဲ ဒီတော့အိမ်သို့ဝယ်လာပြီး ပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုးသောက်ရသည်။ အိမ်မှာကလည်း လူကများများစားစားရှိတာမဟုတ်။ ညိုမောင်အစ်ကိုဝမ်းကွဲ မြင့်ဝေ နှင့် မရီးခင်သက်တို့လင်မယားနှစ်ဦးသာရှိသည်။ မြင့်ဝေက လိုင်းကားမောင်းတော့ ညဥ့်နက်မှပြန်လာတတ်ပြီး မိုးမလင်းမှီထသွားတတ်သည်။ ဒီတော့ညိုမောင်တစ်ယောက် လွတ်လပ် ချင်တိုင်းလွတ်လပ်၍နေသည်။ အမှန်တော့ ညိုမောင်တို့မိသားစုကနယ်တွင်နေတာဖြစ်သည်။ ညိုမောင်သာအလုပ်လာရှာရင်း စက်ရုံတွင်အလုပ်ရကာ အစ်ကိုဝမ်းကွဲမြင့်ဝေ၏အိမ်မှာနေတာဖြစ်သည်။ မြင့်ဝေမိန်းမ ခင်သက်ကလည်း သူတို့မြို့သူပင်ဖြစ်တော့…..ညိုမောင်နှင့်ရင်းနှီးခင်မင်ပြီးသားဖြစ်လေသည်။
မခင်သက်က သဘောကောင်းသည်။ အိမ်တွင်ညိုမောင်ကို အစစအရာရာ ဦးစားပေးသည်။ ညိုမောင်၏အဝတ်အစားကအစ ခင်သက်လျှော်ပေးသည်။ စားစရာချက်ရင်လည်း အသဲအမြစ်လေးများပင် ညိုမောင်အတွက်ခူးခပ်၍ဖယ်ပေးထားသည်။ မခင်သက်က ညိုမောင်ထက် အသက်တစ်နှစ်သာကြီးသည်မို့ သူငယ်ချင်းတွေလိုပြောဆိုဆက်ဆံသည်။ ဒါပေမယ့် ညိုမောင်ကအိမ်တွင်ရှိသော ခင်သက်ကိုလည်းဂရုမစိုက် စက်ရုံမှခွင့်ရက်ရှည်ယူထားပြီး ပုလင်းတစ်လုံးနှင့်သာအဖော်ပြုနေလေသည်။ ညိုမောင်ရည်းစား လေးငယ် ခင်မောင်ထွေးနှင့်လိုက်ပြေးသဖြင့် ညိုမောင်ခံစားနေရတာကို ခင်သက်သိသည်။ အရင်ကညိုမောင်ရည်းစားမထားခဲ့ဖူးတာကိုလည်း ခင်သက်တစ်စွန်းတစ်စသိသည်။ ဒီတော့ ညိုမောင်အဖြစ်ကိုစာနာ၍ ညိုမောင့်ကို ဘာမှမပြောဘဲ ခင်သက်အသာဘဲကြည့်၍နေသည်။
ဒါပေမယ့် ညိုမောင်က တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပို၍ဆိုးလာသည်။ သောက်ကာစက သူ့ကိုယ်သူထိမ်းနိုင်သိမ်းနိုင်သေးသည်။ သူ့ကိုယ်သူ သတိထား၍သောက်သည်။ နောက်တွင်တော့ ဆင်ဆင်ခြင်ခြင်မရှိရုံမျှမက လူမှန်းသူမှန်းမသိအောင်အထိသောက်လာပြီး ခင်သက်ခူးခပ်၍လာချပေးသော ထမင်းဟင်းကိုပင်စားတယ်ဆိုရုံ တစ်ဇွန်းနှစ်ဇွန်းစား၍ နေရာတွင်ပင်လှဲချအိပ် ပျော်သွားသည်အထိ အခြေအနေဖြစ်လာတော့ ခင်သက်ဆက်ပြီးဒီအတိုင်းကြည့်မနေနိုင်တော့ ညိုမောင်အားပြောဆိုဖျောင်းဖျရန် စဉ်းစားရလေတော့သည်။ ညိုမောင်တစ်ယောက်ရှေ့တွင် အရက်ပုလင်း၊ ဖန်ခွက်၊ ရေခွက်နှင့် ငါးခြောက်ကြော်ပန်းကန်လေးကိုချ၍ ကြမ်းပြင်တွင်ထိုင်ကာ ထုံးစံအတိုင်း သူလုပ်နေကြအတိုင်း အိမ်ရှေ့လမ်းမကို အကြာကြီးမျှော်ကြည့်နေလိုက် အရက်ဖန်ခွက်ကို ကောက်မော့လိုက်နှင့်လုပ်နေသည်။ ခင်သက်ရေချိုးပြီး အိမ်ပေါ်သို့တက်လာကာ မျက်နှာသုတ်အပြီး ညိုမောင်အားထမင်းခူးပေးရန် သတိရကာ ထမင်းနှင့်ဟင်းတို့ကို ပန်းကန်နှင့်ခူးခပ်ထည့်ယူလာပြီး ညိုမောင်၏ရှေ့တွင်ချပေးလိုက်သည်။
ခင်သက်ကြည့်လိုက်တော့ အရက်ပုလင်းထဲတွင်လက်နှစ်လုံးလောက်သာရှိ တော့သည်။ ““ညိုမောင်…..ထမင်းစားတော့..”” ““အင်း….”” ပြောပြီး ထမင်းပန်းကန်ကိုချပေးကာ ခင်သက်လှည့်ထွက်မည်အလုပ် အပြင်တွင်မှောင်စပျိုးနေသည်ကိုသတိထားမိပြီး အိမ်ရှေ့တံခါးကို ခင်သက်သွား၍ပိတ်လိုက်သည်။ သူမပြန်လှည့် လာသည်အထိ ညိုမောင်ကထမင်းပန်းကန်ကိုမတို့သေး။ ““ညိုမောင် ထမင်းလည်းစားအုန်း……ပြီးတာတွေလည်းပြီးသွားပြီဘဲဟာ….တစ်ယောက်မကောင်း တစ်ယောက်ပေါ့….ကိုယ့်ကျန်းမာရေးလည်းဂရုစိုက်ဦး…..”” ခင်သက် ညိုမောင်နားအရောက်ရပ်၍ ဖျောင်းဖျပြောဆိုလိုက်သည်။ ခင်သက်ဖျောင်းဖျလိုက်သည်ကပင် ညိုမောင်ကိုဆွပေးသလိုဖြစ်သွားသည်လားမပြောတတ်တော့။
““မပြီးဘူး….ဘယ်တော့မှမပြီးဘူး….ငါ့ရင်ထဲမှာ ဘယ်တော့မှ မပြီးဘူးခင်သက်…”” ခင်သက်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီး ညိုမောင်ကမူးသံကြီးဖြင့်ပြောသည်။ ရှေ့မှပုလင်းကို ခင်သက်ကြည့်လိုက်တော့ စောစောက ကျန်နေသည့်အရက်လက်နှစ်လုံးကမရှိတော့။ ပုလင်းပင် ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် တုံးလုံးလဲနေပြီ။ ““ဒါတော့…..ဒါပေါ့ဟာ….ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ဖို့ပြောတာပါ…”” ““ထွီ….ယောင်္ကျားချင်း ဘာများကွာလို့လဲ ခင်သက်ရာ ငါလည်းယောင်္ကျားစစ်ပါပဲဟာ…”” အို…“ဟာ…..ဝုန်း…..အာ”” ““ဟဲ့…ညို…..မောင်…..ညိုမောင်….အို….အို….”” ညိုမောင်က အားမာန်အပြည့်ဖြင့်ကြုံး၍အထ ဘေးသို့ယိုင်ဆင်းသွားတော့ ခင်သက်ကလှမ်းဆွဲ၍ထိန်းလိုက်သည်။ ညိုမောင်သူမဖက်ပါလာပေမယ့် ခါးကပုဆိုးကကျွတ်ကျသွားသည်။
ခင်သက်က ဗြုံးကနဲလှမ်းဆွဲ၍ ညိုမောင်ကခင်သက်ဘက်ကို မတ်၍ပြန်ပါလာသော်လည်း သူ့ကိုယ်သူမဟန်နိုင်၍ ပြန်၍ယိုင်အသွား ညိုမောင်က ခင်သက်ကိုလှမ်း၍ဖက်လိုက်သော်လဲ ညိုမောင်၏ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကို ခင်သက်မထိန်းနိုင် နှစ်ယောက်စလုံးဖက်လျှက်သား…..ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့လဲပြို၍ကျသွားတော့သည်။ ရင်လျားထားသော ခင်သက်၏ထဘီကပြေကျ သွားပြီး ဖွေးနစ်သော နို့နှစ်လုံးကဝင်းကနဲထွက်ပေါ်၍လာသည်။ စူးရှသောမျက်လုံးအစုံဖြင့် ညိုမောင်ကခင်သက်၏နို့နှစ်လုံးကို စူးစူးရဲရဲစိုက်ကြည့်နေသည်။ ““ညိုမောင်…..ဖယ်…ဖယ်တော့….ငါထတော့မယ်….”” ခင်သက် ဘယ်လိုမှဒီအနေအထားနှင့်မနေတတ်တော့…. နို့နှစ်လုံးကလည်း ဟင်းလင်းကြီးပေါ်၍နေသည်။ ဒါကိုလည်း ညိုမောင်ကစိုက်ကြည့်နေသည်။ ဒါတင်လားမဟုတ်သေး။ သူမ၏ကိုယ်တစ်ခြမ်းပေါ်သို့ မှောက်ကျနေသော ညိုမောင်၏ပေါင်ကြားမှဖွားဖက်တော်ကြီးက ဘယ်အချိန်ကထနေတာလဲမသိ သံချောင်းကြီးအလား ခင်သက်၏ပေါင်ထိပ်ဘေးကို ထောက်ထားမိသည်။
စောစောက ကျွတ်ကျသွားပြီဖြစ်၍ ညိုမောင်ခါးတွင်ပုဆိုးကရှိတော့တာမဟုတ်။ ကိုယ်လုံးခြင်းပိနေသဖြင့် မာကျောလှသော လီးတန်ကြီးကတဒိတ်ဒိတ်သွေးတိုင်း နေတာကို ခင်သက်သိနေရသည်။ ခင်သက်တစ်ကိုယ်လုံးထူပူလာသည်။ ခင်သက်ပြောလိုက်တာကို ညိုမောင်ကဘာမှပြန်မပြော ခင်သက်၏မျက်နှာကို ဖြတ်ကနဲလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီး “ရွှတ်” ကနဲ လှမ်းနမ်းလိုက်သည်။ ““ဟင်….အို…”” တစ်ကိုယ်လုံးထူပူနေရသည့်အထဲတွင် ခင်သက်တစ်ကိုယ်လုံးကြက်သီးဖျန်းကနဲထသွားသည်။ ““ဖယ်….ဖယ်ဟာ…အို….အို….အင်း…..အင်း…အ…အင်း..”” ခင်သက်၏နို့ကိုညိုမောင် အငမ်းမရစို့လိုက်သည်။ စို့တာမှ ကမူးရှုးထိုးကို ကြမ်းကြမ်းရမ်းရမ်းစို့ပစ်လိုက်သည်။ ခင်သက် ညိုမောင်၏ကျောပြင်ကို လက်သီးဆုပ်လေးဖြင့်ထုသည်။
နှစ်ချက်သုံးချက်သာထုလိုက်နိုင်ပြီး ခင်သက်ငြိမ်ကျသွားပြီး တအင်းအင်းငြီးကာ ရင်ဘတ်လေးကြွ၍ ကြွ၍တက်လာသည်။ ဟုတ်သည် ဒီလိုအငမ်းမရကြမ်းကြမ်းရမ်းရမ်းစို့တာကို သူမခံ ရတာကြာပြီ။ နို့နှစ်လုံးကို တစ်လုံးပြီးတစ်လုံး ညိုမောင်စို့သည်။ ဖွေးနစ်သော နို့အုံလေးများပင် ပန်းနုရောင်သန်းလာသည်။ ခင်သက်မျက်လုံးလေးတွေစင်းကျလာပြီး တအင်းအင်းငြီးကာ ခန္ဓာကိုယ်မှအားအင်များက တစ်စတစ်စရုတ်လျော့၍လာသည်။ ခင်သက်၏အာရုံက နို့စို့ခံနေရသောအတွေ့မှသည် ပေါင်ထိပ်တွင်ထောက်၍နေသော လီးချောင်းကြီးဆီသို့ တစ်ချက်ချက် ရောက်၍သွားသည်။ သန်လိုက်တဲ့ဟာကြီးဟု တွေးမိလိုက်တိုင်း နို့အုံတစ်ခုလုံးပါစပ်ထဲပြုတ်ဝင်သွားလုမတတ် ရင်ဘတ်လေးကြွပေးရသည်အထိခံစားနေရသော အတွေ့ဆီကိုအာရုံက ရောက်သွားပြန်သည်။ ခင်သက်ဘာသားနဲ့ထုထားတာမို့လို့လဲ…ခင်သက်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှသွေးသားတွေဘလောင်ဆူလာသည်။
ညိုမောင် သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကြွပြီးထလိုက်ကာ သူလွှတ်ပေးလိုက်သော နို့လေး တွေကိုအာသာမပြေပုံဖြင့်ကြည့်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြွပြီး ညိုမောင်ထလိုက်တော့ ညိုမောင်၏လီးတန်ကြီးက ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးဖြစ်သွားသည်။ ခင်သက်အမိအရကြည့်လိုက်ရင်း မျက်တောင်လေးတွေ တစ်ဖျတ်ဖျတ်ခတ်လိုက်ကာ သူမ၏မျက်လုံးလေးတွေကချက်ချင်းရီဝေသွားသည်။ လီးကြီးကဒစ်ပြဲကြီး စောင်းကြီးကအသဲယားစရာကောင်းလောက်အောင် ဖောင်း ထနေပြီး တငေါက်ငေါက်ဖြစ်ကာ လီးထိပ်တွင်အရည်လေးတွေစို့နေတာကို ထင်ထင်ရှားရှားမြင်လိုက်ရသည်။ ခင်သက်ရင်ထဲတွင်မွန်းကြပ်၍လာသည်။ ပက်လက်လေးဖြစ်နေသော ခင်သက်၏တစ်ကိုယ်လုံးကို ညိုမောင်ခြေဆုံးခေါင်းဖျားကြည့်သည်။ နှစ်ဆယ်ကျော်အသက်နှင့် တစ်သားမှမကျ သေးသော ခင်သက်၏ကိုယ်လုံးလေးက ဖွံ့ထွားကျစ်လစ်ကာ စွဲမက်စရာကောင်းလှသည်။ မူလရင်လျားထားသော ထဘီကခါးနားအထိပြေကျနေပြီး ထဘီအောက်နားစလေးကလည်း ဒူးဆစ်တစ်ဖက်ပေါ် တစ်ဖက်ဖုံးဖြင့်အသားလေးတွေကဝင်း၍နေသည်။
ခင်သက်တစ်ကိုယ်လုံးကို ညိုမောင်က တစ်ချက်မျှကြည့်လိုက်ပြီးမှ ထဘီအောက်နားစလေးကို အပေါ်သို့လှန် တင်လိုက်သည်။ ““အို….ဟဲ့…ညိုမောင်….မလုပ်နဲ့လေ….မတော်ပါဘူး….”” အတွင်းအင်္ဂါကိုလေစိမ်းတိုး၍ အေးကနဲဖြစ်အသွားသတိဝင်လာသော ခင်သက်ကတစ်ဆို့ဆို့အသံလေးဖြင့်တားရှာသည်။ လူကတော့ နေရာမှမရွေ့။ ညိုမောင် ခင်သက်ကိုဂရုမစိုက် လှစ်ဟပေါ်ပေါက်လာသော ခင်သက်၏အတွင်းအင်္ဂါကိုကြည့်သည်။ ခင်သက်အမွှေးသန်သည်။ ဒါကြောင့် တစ်လတစ်ခါရိတ်ပေးရသည်။ အခုရိတ်ပြီးတာ နှစ်ရက်ဘဲရှိသေးတော့ အမွှေးငုတ်တိုလေးတွေကစိမ်းမြမြလေးထွက်၍နေသည်။ စောက်ပတ်နှုတ် ခမ်းသားနှစ်ခုက ဘာလို့ဖောင်းစို၍ထကြွနေသည်မသိ ဖောင်းတင်း၍ထနေသည်။ ညိုမောင် သူမအပေါ်သို့ခွ၍အတက် ခင်သက်မျက်လုံးမှိတ်ချလိုက်သည်။ မောင်မင်းကြီးသားညိုမောင်က လူပေါ်ကိုခွတက်ပြီးကာမှ စောက်ပတ်ကိုလက်ဖဝါးလှန်၍ကိုင်ကြည့်လိုက်သည်။
ခင်သက်တစ်ချက်တွန့်သွားသည်။ သေသေချာချာကိုင်ပြီးပွတ်လိုက်တော့ပါလား….ထိုသို့မဟုတ် စမ်းကြည့်ကိုင်တွယ်ရုံမျှသာ တစ်ချက်ကိုင်လိုက်ပြီး သူ့လီးကိုအရင်းမှကိုင်ကာတေ့လိုက်သည်။ ပြီးတော့တစ်ဆက်တည်းဆောင့်သွင်းလိုက်သည်။ ““ပြွတ်…ဖွတ်…ဟင်း…”” အထဲမှာကအရည်တွေပြည့်လျှံနေသည်။ တစ်ချက်တည်းနှင့် လီးကတစ်ဆုံးဝင်သွားသည်။ ခင်သက်ဟင်းကနဲသက်ပြင်းချကာ ကြမ်းပြင်နှင့်တစ်ထွာလောက်ကွာအောင်သာကြွထား သော သူမ၏ဒူးနှစ်ဖက်ကိုဆွဲထောင်ပစ်လိုက်သည်။ ညိုမောင် ခင်သက်၏မျက်နှာလေးကိုလှမ်း၍နမ်းရင်း သူမပေါ်သို့မှောက်၍ချကာ ဖင်ကြီးကြွကြွပြီးဆောင့်သည်။ ““ပြွတ်…ဖွတ်….ဖွတ်…ဟင့်…ဟင့်…ဟင်း…”” လူပျိုလို့မပြောရ ညိုမောင်၏ဆောင့်ချက်တွေက အရိုင်းဆန်လှသည်။
ခင်သက်က အရိုင်းသက်သက်မဟုတ်ပါ။ ဆောင့်ချင်သလိုဆောင့်၍နေသော ညိုမောင်၏လီးတန်ကြီးကို သူမလို သလို ဖင်ကိုညာလိမ့်လိုက် ဘယ်လိမ့်လိုက်ကြွ၍ ကော့ပေးလိုက်သဖြင့် သူမလိုသလိုလှည့်ပြောင်းကာ အလိုးခံသည်။ တစ်ချက်တစ်ချက် သတိရလျှင်လည်း ညိုမောင်အရသာတွေ့စေ ရန် သဲကြီးမဲကြီးဆောင့်ဝင်နေသော ညိုမောင်၏လီးတန်ကြီးကို စောက်ပတ်နှင့်ညှစ်၍ပေးသည်။ ဆွဲ၍ပေးသည်။ ““ပြွတ်…ဖွတ်…ပလွတ်….ဖွတ်…..ဖွတ်…ဟင့်…ဟင့်…ဟင်း…”” ညိုမောင်က တရှုးရှုးအသက်ရှုသံကြီးနှင့် အားရပါးရဆောင့်နေသလို ခင်သက်ခမျာမှာလည်း မျက်လုံးစုံမှိတ်ထားရင်းက ပါးစပ်လေးဟဟပြီး ဟင်းကနဲ ဟင်းကနဲ အသက်ရှု၍ ရှုံ့၍သွား သည်။ ““ပြွတ်…ဖွတ်…ပလွတ်….ဖွတ်…..ဖွတ်…အင်း…ဟင်း…အ….အ…..အင်း…ညို…ညိုမောင်….ဟင်း…..ဟင်း”” ခင်သက်ဘယ်လိုမှစိတ်တင်းထား၍မရ၊ ညိုမောင်ကိုယ်ကြီးကိုပြန်၍ဖက်ထားလိုက်မိသည်။
ကာမအရသာက နှစ်ယောက်စလုံး၏ကိုယ်နှစ်ခုစလုံးမှာဆူဝေ၍တက်လာသည်။ ညိုမောင် ကုန်းထ၍ ခင်သက်၏နို့ကိုဆွဲစို့ရင်း ဆက်ဆောင့်သည်။ ဒီတော့ခင်သက်က ညိုမောင်၏လည်ပင်းကို သိုင်း၍ဖက်သည်။ ညိုမောင်၏စိတ်ထဲအာရုံထဲတွင် လေးငယ်ဆိုတာမရှိတော့သလို ခင်သက်၏အာရုံထဲတွင်လည်း မြင့်ဝေဆိုတာမရှိတော့ပေ။ နှစ်ယောက်စလုံး အရာအားလုံးကိုမေ့၍ ကာမအရသာတွင်နစ်မွန်းနေကြသည်။ ““ဖွတ်…..ပြတ်…ပြတ်…ပလွတ်….အဟင်း….အင်း….ဟင်းဟင်း….”” ညိုမောင်က ဒလစပ်ဆောင့်လာသလိုအောက်မှ ခင်သက်ကလည်း ဟင်းကနဲ ဟင်းကနဲ အားယူကာ ညိုမောင်၏ဆောင့်ချက်အတိုင်းဖင်ကြီးကိုကော့၍ကော့၍ပြန်ဆောင့်သည်။ ““ပလွတ်…..ဖွတ်….ဗြစ်….ညို….မောင်….အား….ထွက်….ထွက်….ပြီ…အား….အား…”” ခင်သက်တစ်ယောက်အတင်းကော့၍ လီးကြီးကိုဆွဲညှစ်ကာပြီးသွားခိုက် ညိုမောင်မှာလည်း မအောင့်နိုင်တော့ဘဲပန်းထုတ်လိုက်ပါလေတော့သည်။ ခင်မောင်ထွေးနှင့်လေးငယ်တို့၏ မင်္ဂလာဆောင်ကပြီးသွားပြီ။ လေးငယ်နှင့်ထွေးနွယ်တို့၏ ဖခင်မှာလည်းတာဝန်ကျရာ ရေယာဉ်သို့ပြန်ရသဖြင့် မိခင်ဖြစ်သူပါပြန်၍လိုက်ပါသွားသည်။
အိမ်မှာကထွေးနွယ်တစ်ယောက်ထဲကျန်ခဲ့သည်။ လေးငယ်မှာ ယောင်နောက်ဆံထုံးပါဆိုသောစကားအတိုင်း ခင်မောင်ထွေးတို့အိမ်တွင်ပင်နေသည်။ ဒီတော့ အိမ်မှာထွေးနွယ် တစ်ယောက်ထဲသာကျန်ခဲ့သည်။ ထွေးနွယ်အတွက် ညမှုညတာအဖော်ရစေရန် ဆွေမျိုးနီးစပ်တော်သူ အဒေါ်ကြီးတစ်ယောက်ကိုခေါ်ထားသည်။ ထိုအဒေါ်ကြီးက ညမိုးချုပ်သည်နှင့် အိပ်တော့သည်။ စောစောမအိပ်တတ်သူ ထွေးနွယ်တစ်ယောက်မှာတော့ချောင်လည်ချောင်ပတ်နှင့်ကျန်ခဲ့သည်။ ထွေးနွယ်အရင်ညတွေတုံးကတော့ တီဗွီထိုင်ကြည့်ပြီး တီဗွီသိမ်းမှအိပ် သည်။ ဒီညတော့ ထွေးနွယ်မှာတီဗွီကြည့်ချင်စိတ်မရှိသဖြင့် တီဗွီကိုပိတ်ကာ အိပ်ခန်းထဲသို့ဝင်ခဲ့သည်။ နွေရာသီညမို့ အိုက်စပ်စပ်ရှိသည်နှင့် ထွေးနွယ်ကိုယ်ပေါ်မှ ဘော်လီအင်္ကျီကိုခွာပစ် လိုက်ပြီး ထမီကိုရင်လျားလိုက်သည်။
ပြီးမှထွေးနွယ်မှာ ရင်လျားထားသောထမီကိုပြန်၍ဖြည်လိုက်ပြီး ထမီကိုခါးသို့ပတ်၍ဝတ်လိုက်သည်။ ထိုအခါ ဆူဖြိုးသောထွေးနွယ်က သူမ၏နို့နှစ်လုံးကိုငုံ့၍ကြည့်ပြီး ရည်းစားဖြစ်သူ ခင်မောင်ထွေးကိုသတိရလိုက်သည်။ တစ်ချိန်က ခင်မောင်ထွေးမှတ်မှတ်ရရကိုင်၍ အငမ်းမရစို့ခဲ့သော နို့လေးနှစ်လုံး အခုတော့သခင်မဲ့နေပြီ။ ကိုင်မည့် စို့မည့်သူမရှိ။ အဖော်မဲ့လျှက် အထီးကျန်ခဲ့ရပြီ။ ထွေးနွယ် သူမ၏နို့သီးခေါင်းနှစ်ခုအား သူမဘာသာဖျစ်ညှစ်ကြည့်လိုက်ပြီးမှ ပေါင်လေးကိုကွ၍အဖုတ်လေးကို သူမလက်လေးဖြင့်ထမီပေါ်မှပင်အုပ်၍ ကိုင်ကြည့်လိုက် ပြန်သည်။ တစ်ချိန်က သူမ၏ရည်းစား ခင်မောင်ထွေးအားရပါးရလိုးခဲ့သော အဖုတ်လေးခုတော့ လုပ်မည့်သူမရှိ အဖော်မဲ့ သခင်မဲ့လျှက်ရှိသည်။ ထွေးနွယ် သူမ၏အဖုတ်လေးကို ထဘီပေါ်မှပင်လက်ဖဝါးဖြင့်အုပ်၍ကိုင်ကာ ဖျစ်ညှစ်ဆုပ်နယ်လိုက်ပြီးခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး နှစ်ချက်သုံးချက်ပွတ်ပစ်လိုက်သည်။ ရည်းစားဖြစ်သူ ခင်မောင်ထွေးကို သတိရခြင်းနှင့်အတူ ခန္ဓာကိုယ်ရှိကာမခလုတ်များကို ကိုင်မိပွတ်မိလုပ်မိလိုက်တော့ ထွေးနွယ်၏သွေးသားတွေက လှုပ်ရှား၍လာသည်။
“ဟင်” ကနဲ ထွေးနွယ် သက်ပြင်းချကာ ခါးတွင်ပတ်ထားသော ထဘီလေးကိုဖြည်ကာဆွဲတင်လိုက်ပြီးပြန်၍ ရင်လျားလိုက်သည်။ ““ဖျောက်…..ချွတ်….ချွတ်…”” ““ဟင်”” ထွေးနွယ်ရင်ထဲထိတ်ကာ မျက်လုံးလေးများဝိုင်းသွားသည်။ ထွေးနွယ်၏အိပ်ခန်းအပြင်ဖက်ခြံထဲမှသစ်ကိုင်းခြောက်ကို လူနင်းသည့်အသံမှန်း ထွေးနွယ်ကောင်းကောင်းသိလိုက်သည်။ အသာလေးခြေဖော့နင်းကာ ထွေးနွယ်အိမ်နံရံဘေးသို့ကပ်လိုက်ပြီး ပျဉ်ပြားအကွဲကြောင်းမှ အပြင်သို့ကြည့်လိုက်သည်။ ““ဟင်….ကျော်ကျော်ပါလား…”” ထွေးနွယ်တို့အိမ်၏နောက်ဖေးအိမ်မှ အသက်(၁၈) (၁၉)သာရှိသော ကျော်ကျော်ဆိုတဲ့ကောင်လေး အိမ်ဘေးတွင်ငုတ်တုတ်လေးထိုင်၍နေသည်။ ညနေက ထွေးနွယ်အိမ်ဘေးတွင် ရေချိုးနေစဉ်က ကျော်ကျော်က သူမကိုခြုံအကွယ်မှထိုင်၍ချောင်းနေတာကို ထွေးနွယ်သတိထားလိုက်မိသည်။
အခုလည်းကျော်ကျော်က သူမကိုလာပြီးချောင်းတာဖြစ်မည်။ ထွေးနွယ်စိတ်ကူးတစ်မျိုးရသွားသည်။ ““ဟာ….အိုက်လိုက်တာ…”” ““ဂျလောက်…..ဂျလောက်…”” ထွေးနွယ် ပြူတင်းပေါက်ကို ဖွင့်ပစ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ ပြူတင်းပေါက်မှာပင်ရပ်၍ ရင်လျားထားသောထဘီကိုဖြည်လိုက်ပြီး စောစောကလိုပင် သူမ၏နို့အုံနှစ်လုံးကိုထုတ်၍ ငုံ့ကြည့် သည်။ စောစောကထက် နဲနဲပိုကြာသည်။ ထို့နောက်တွင်ထွေးနွယ်ပြူတင်းပေါက်ကိုပြန်၍ မပိတ်ဘဲကုတင်ပေါ်တက်၍လှဲကာ ပြူတင်းပေါက်ဘက်ကို ကျောပေး၍ တစ်စောင်းလေးလှဲ၍ အသာမျက်လုံးလေးမှိတ်ကာအသက်ကို မှန်မှန်ရှုရင်း ငြိမ်နေလိုက်သည်။
ဆယ့်ငါးမိနစ်၊ မိနစ်နှစ်ဆယ်လောက်အကြာမှာတော့ အိမ်ကတစ်ချက်ငြိမ့်ကနဲ သိမ့်ကနဲဖြစ်သွားသည်။ သိသာရုံလေးသာ ထွေးနွယ်ကမျက်လုံးမှိတ်၍ ငြိမ်ကာသတိထားနေသဖြင့်သိလိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ထွေးနွယ်တို့အိမ်၏ပြူတင်းပေါက်အောက်ဖက်ဘောင်က မြေပြင်မှလေးပေခန့်သာမြင့်သည်။ သံဇကာတွေ သစ်သားတန်းတွေကာထား ခြင်းမရှိသဖြင့် ပြူတင်းပေါက်ဘောင်ကို ခို၍ဆွဲတက်ပါက အသာလေးတက်လို့ရပေပြီ။ ကျော်ကျော်ဆိုသောကောင်လေး အခန်းထဲသို့ရောက်ပြီဆိုသည်ကို ထွေးနွယ်သိလိုက်ပြီ…။ မကြာလိုက် ပြူတင်းပေါက်ဖက်ကို ကျောပေး၍စောင်းအိပ်နေသော ထွေးနွယ်၏တင်သားကြီးနောက်ဖက်သို့ အေးစက်သောအရာလေးတစ်ခုက လာ၍ထိသည်။ ကောင်လေးကြောက်နေ ထင်သည်။ လက်ဖျားလေးတွေအေးနေသည်ဟု ထွေးနွယ်အသက်မှန်မှန်ရှုကာမျက်လုံးမှိတ်၍ အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေရင်းတွေးမိလိုက်သည်။
ထွေးနွယ် ငြိမ်ချက်သားကောင်းနေတော့ ကျော်ကျော်ဆိုသောကောင်လေးပို၍ရဲလာပုံရသည်။ ထွေးနွယ်၏တင်သားကြီးတွေကို သူ့လက်လေးဖြင့်မထိတထိလေးပွတ်ကြည့်သည်။ လက်ဖဝါးလေးဖြင့် အိအိဖောင်းဖောင်းတင်သား ကြီးတွေကို အသာလေးဖိဖိကြည့်သည်။ စိတ်ထဲမှာမရိုးမရွဖြစ်လာပေမယ့် ထွေးနွယ်မလှုပ်ရဲ အသာလေးဆက်ပြီးငြိမ်နေသည်။ ဒီတော…ကျော်ကျော်ပို၍ရဲလာသည်။ ထွေးနွယ်၏တင် သားကြီးတွေကို သိသိသာသာကြီးကိုင်တွယ်ကာ ဆုပ်နယ်လာသည်။ ထွေးနွယ်ဆက်ပြီး ငြိမ်နေလို့မဖြစ်တော့။ အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေမှန်းသိသွားရင် ကောင်လေးထွက်ပြေးသွားလိမ့် မည်။ ထွေးနွယ်မျက်လုံးကို ဖြတ်ကနဲဖွင့်ကာ လက်တစ်ဖက်က ကျော်ကျော်၏လက်ကိုလှမ်းဆွဲလိုက်ပြီး ကျန်လက်တစ်ဖက်က သူမ၏ရင်လျားထားသော ထမီကိုရင်ဘတ်မှဆွဲချွတ်လိုက်ကာ တစ်ပါတည်း ပက်လက်လှန်လိုက်သည်။
““မမထွေး….ကျွန်နော်…..ဟို…..ဟို….”” ကျော်ကျော်က ကြောက်အားလန့်အားပြောနေပေမယ့် သူ့မျက်လုံးတွေက ထွေးနွယ်၏နို့တွေကိုစူးစူးဝါးဝါးကြည့်နေသည်။ ကောင်လေးလက်ကိုကိုင်ထားသော ထွေးနွယ်၏လက်ကမ လွှတ်…..ကျန်လက်တစ်ဖက်နှင့် ကျော်ကျော်၏ပါးစပ်ကိုလှမ်းပိတ်လိုက်သည်။ ကျော်ကျော်အထစ်ထစ်အငေါ့ငေါ့စကားသံရပ်သွားပြီး ထွေးနွယ်၏မျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်သည်။ ရီဝေသောမျက်လုံးအစုံဖြင့် သူ့မျက်နှာကိုကြည့်နေသော ထွေးနွယ်၏မျက်နှာလေးက သူ့ကိုပြုံးပြလိုက်တာကိုတွေ့လိုက်ရသည်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပင် ထွေးနွယ်ကကျော်ကျော်၏ လက်တစ်ဖက်ကိုပါ လှမ်းကိုင်ကာ သူမဖက်ကိုဆွဲယူလိုက်တော့ ရေငတ်တုန်းရေတွင်းထဲဆင်းချင်နေသည့် ကျော်ကျော်မှာသူမအပေါ်သို့မှောက်လျှက်သားကျလာပြီး ချက်ခြင်းပင်ကုတင် ဘေးတွင်ရှိနေသေးသည့် သူ၏ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကိုပါ ကုတင်ပေါ်ဆွဲတင်လိုက်ပြီး ထွေးနွယ်ကိုအငမ်းမရဖက်ကာ ထွေးနွယ်၏ပါးပြင်နှစ်ဖက်ကို ဒလစပ်နမ်းလိုက်ရာမှ သူမ၏ရင် ဘတ်ပေါ်သို့ ကျော်ကျော်၏မျက်နှာကမှောက်ကျသွားသည်။
ကလေးတစ်ယောက်နို့စို့သလို ထွေးနွယ်၏နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ကျော်ကျော်က တပြွတ်ပြွတ်စို့သည်။ ထွေးနွယ် သူ့ကျောပြင်ကို သိုင်းဖက်လိုက်ပြီး ရင်ဘတ်လေးကိုကြွကာကြွကာ ဖြင့် နို့အစုံကို ကျော်ကျော်၏မျက်နှာသို့ ကပ်ကပ်ပေးသည်။ ဘေးကနေ သူမပေါ်မှောက်ထားသည့် ကျော်ကျော်၏ကိုယ်နှင့်ပိနေသော ထွေးနွယ်၏လက်တစ်ဖက်က တရွရွလှုပ်ရှား၍လာ သည်။ ကျော်ကျော်၏ပေါင်ကြားကိုစမ်း၍ပင့်ကိုင်သည်။ ““ဟယ်…အယ်..နဲတာကြီးမဟုတ်ဘူး…လူကသာငယ်တာ….ပစ္စည်းကြီးက ခင်မောင်ထွေးလောက်ကိုရှိသည်…”” ကျော်ကျော်ကတော့ နို့စို့တာမဝနိုင်သေး။ နို့နှစ်လုံးကို တစ်လုံးပြီးတစ်လုံး ဘယ်ပြန်ညာပြန်စို့နေသည်။ ထွေးနွယ်၏လက်က သူ့ပုဆိုးခါးပုံစကို အသာစမ်းပြီးဖြုတ်လိုက်ရာက ပုဆိုးကြား သို့တိုး၍ဝင်သွားကာ လီးတန်ကြီးကိုမိမိရရဆုပ်ကိုင်လိုက်သည်။ ပူနွေးမာကျောလှသော လီးချောင်းကြီးအတွေ့က ထွေးနွယ်စအိုလေးကို ရှုံ့သွင်းမိသည်အထိပင်ဖြစ်သွားရသည်။ ထွေးနွယ် ကျော်ကျော်၏လီးတန်ကြီးကို အသာလေးပွတ်ပေးကာ ဖွဖွလေးကိုင်၍ဂွင်းတိုက်ပေးသည်။
ပြီးတော့ ဥကြီးတွေကိုလည်းစမ်းပြီး ဖွဖွလေးဆုပ်နယ်ပေးသည်။ ကောင်လေးက လည်းအလာကြီး ထွေးနွယ်၏နို့တွေကိုမပြတ်တမ်းစို့နေရင်း သူ့လက်တစ်ဖက်က ထွေးနွယ်၏ပေါင်ကြားကိုစမ်းလိုက်သည်။ ထွေးနွယ်ပေါင်နှစ်လုံးကိုဖြဲပေးလိုက်သည်။ ထွေးနွယ်၏စောက် မွှေးလေးတွေကို ဖွဖွလေးပွတ်လိုက် အသာလေးဆွဲလိုက်ဖြင့်လုပ်နေသည်။ ထွေးနွယ်အသဲယားလာပြီး သူမလက်ထဲမှကျော်ကျော်၏လီးကြီးကို ခပ်သွက်သွက်လေးဂွင်းတိုက်ပေးလိုက် သည်။ ကျော်ကျော်၏လက်က ထွေးနွယ်၏စောက်ဖုတ်ကိုရွရွလေးပွတ်ပြန်သည်။ ““အို…..အဟင့်…ဟင့်…”” ထွေးနွယ် တစ်ကိုယ်လုံးတုန်သွားသည်။ ဟုတ်တယ်လေ……။ ကျော်ကျော်တစ်ယောက် စောက်ဖုတ်ကိုမပွတ်တတ်ပွတ်တတ်နှင့် လက်ဖဝါးနဲ့ဖိပြီး ပွတ်လိုက်တော့ သူ့လက်ဖဝါးက ပြူးထွက်နေသောစောက်စေ့လေးကိုပွတ်လှည့်လိုက်သလိုဖြစ်သွားသည်။ ထွေးနွယ်ငြီးသံလေးထွက်ကာ အသားလေးတုန်သွားတာကိုမြင်လိုက်ရပြီး သူပွတ်တာဟုတ်ပြီလို့ သတ်မှတ်ကာ ထိုအတိုင်းထပ်၍ပွတ်ပြန်သည်။ ““အို….အို….ဟင့်…အို…”” ““ကျော်….ကျော်…ဘယ်နဲ့လုပ်နေတာလဲ….မမ မနေတတ်တော့ဘူ…ထတော့….”” ကျော်ကျော်လည်းမနေနိုင်တော့ပါ။ ထွေးနွယ်လက်ထဲက သူ၏လီးကြီးက အဆမတန်ကြီးကာ တငေါက်ငေါက်ဖြစ်နေပြီ။
ကျော်ကျော်ထထိုင်လိုက်ပြီး သူ့ပုဆိုးကိုခေါင်းမှနေကျော်၍ ချွတ်လိုက်ကာ သူ့ကိုယ်ကိုထွေးနွယ်၏ခြေရင်းဖက်သို့အရွှေ့ ထွေးနွယ်ကပေါင်နှစ်ချောင်းကိုဆွဲ၍ထောင်ကာကားလိုက်ပြီး ဒူးနှစ်ဖက်ကိုသူမဝမ်းဗိုက်ပေါ်သို့ ရောက်အောင်ကွေးတင်ပစ် လိုက်သည်။ ကျော်ကျော်ကြည့်နေတုန်း စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားအထူအပါးကြီးနှစ်ခုက ပထမတော့တက်လာပြီးနောက် စောက်စေ့အောက်ဖက်အကွဲကြောင်းနေရာလေးဘေးနှစ်ဖက် သို့ဆွဲတင်လိုက်သလိုပြဲသွားသည်။ တွင်းပေါက်လေးတော့ ပေါ်မလာပါ။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီနေရာလေးကို သူ့လီးထိပ်ကြီးတေ့လိုက်ပြီး ကျော်ကျော်ဖိသွင်းလိုက်သည်။ ““ဗြစ်….ပြွတ်…ပြွတ်…အိုး….အို….အား….အား…”” ဖိသွင်းလိုက်သောလီးကို ကျော်ကျော်ကအရှိန်မထိမ်းနိုင် လီးကတစ်ခါတည်းအဆုံးဝင်သွားသည်။ ထွေးနွယ်၏ကျောလေးကော့တက်သွားပြီး မျက်နှာလေးရှုံ့ကာသွား၏။
လန့်ပြီးဗြုံးက နဲတစ်ဆုံးဝင်သွားသော လီးကိုညှစ်လိုက်မိတော့ ကျော်ကျော်တန့်ကနဲဖြစ်သွားပြီးအတင်းနင်းဆောင့်တော့သည်။ ““ပြွတ်….ဖွတ်….ဖွတ်…ပလွတ်….ဗြစ်….ပြွတ်….”” ““အင်း….ဟင်း…..အိုး…အိုး….အဟင်း….”” မထူးတော့ပြီ သူဆောင့်ချင်သလိုသာဆောင့်စေတော့ ထွေးနွယ်ကအောက်ကကော့ကော့ပေးပြီး သူမစိတ်တွေကိုလွှတ်ထားပေးလိုက်သည်။သူမ၏ကိုယ်ဘေးတွင် ထောက်ထားသော ကျော်ကျော်၏လက်တစ်ဖက်ကိုဆွဲယူပြီး နို့ပေါ်တင်ပေးလိုက်သည်။ သဘောပေါက်သွားသော ကျော်ကျော်ကနို့နှစ်လုံးကိုစုံကိုင်၍ ဆက်ဆောင့်သည်။““ပြွတ်…..ပလွတ်…ဖွတ်…..ဖွတ်…အိုး….အိုး….အ….အ…..ကျော်…..အီး…ဟင်း….”” ထွေးနွယ်ခေါင်းလေးကြွတက်လာပြီး တစ်ကိုယ်လုံးတောင့်သွားခိုက် ကျော်ကျော်၏လီးထိပ်မှလည်း သုတ်ရည်များပန်းထွက်ကာ နှစ်ယောက်သားပြိုင်တူပြီးသွားကြလေသည်။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ထိနျးမရသောအဖွဈ